Minna No Nihongo (Grmmar) - PDF Free Download
Author: Thaw Ko Zin
178 downloads 1570 Views 2MB Size
Minna No Nihongo II - Workbook , all units second book
Minna no Nihongo grammartical notes
2016 Minna No Nihongo Grammar
Plz visit my page >>>>>> https://www.facebook.com/YoshikoMelodi/
Lesson 1 Grammar ၁။ –ဖြစ်ပါသည် --- は --- です ---wa --- desu ---သည်/က---ဖြစ်ပါသည်။
watashi wa mira- desu. ကျွန်တော် မီလာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ –မဟုတ်ပါဘူး --- は --- じゃ（では） ありません。 ---wa ---jya(dewa) arimasen ---သည်/က--- မဟုတ်ပါဘူး။
watashi wa gakusei jya arimasen ကျွန်တော် ကျောင်းသား မဟုတ်ပါဘူး ၃။ –ဖြစ်ပါသလား ---は ---ですか ---wa ---desuka ---သည်/က---ဖြစ်ပါသလား။
mira-san wa kaisha in desuka မီလာစံက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလား
KyiPhyu(plz visit my page)
၄။ –လည်းဘဲ–ဖြစ်ပါတယ် ---も ---です ---mo ---desu ---လည်းဘဲ---ဖြစ်ပါတယ်။
santosusan mo kaisha in desu စန်တိုစုစံ လည်းဘဲ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါတယ် 文型(ぶんけい) ၀ါကျ
(ဇယား၏အောက်တွင် အသံထွက်ကို romajiဖြင့်ရေးထားပါသည်)
わたし は マイク（まいく）・ミラ （みら）ーです。
ကျွန်တော်က မိုက(် ခ်)မီလာ
サントス（さんとす）さんは 学生（が くせい）じゃ （では）ありません。
ミラ（みら）ーさんは 会社員（かいし ゃいん） ですか。
မီလာစံက ကုမ္ပဏ၀ီန်ထမ်း
サントス（さんとす）さんも 会社員 （かいしゃいん） です。
ကုမ္ပဏ၀ီန်ထမ်း ဖြစ်ပါသည်။
1.watashi wa maiku mira- desu. 2.santosusan wa gakusei jya(dewa) arimasen. 3.mira-san wa kaishain desu ka. 4.santosusan mo kaishaindesu.
「あなたは」 マイク（まい く）・ミラ（みら）ーさんです か。
(ခင်ဗျား) မိုက(် ခ်)မီလာ
．．．はい、「わたしは」 マイ ク（まいく）・ミラ（みら）ーで す・
ミラ（みら）ーさんは 学生（が くせい）ですか。
．．．いいえ、「わたしは」 学 生（がくせい）じゃありません。
ワン（わん）さんは エンジニア （えんじにあ）ですか。
．．．いいえ、ワン（わん）さん は エンジニア（えんじにあ）じ ゃありません。
ဟင့်အင်း ဝမ်းစံက အင်ဂျင်နီယာ
あの 方（かた）は どなたです か。
．．．ワット（わっと）さんで す。 さくら大学（だいがく） の 先生（せんせい）です。
ဝတိုစံ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကူရာတက္က
テレサ（てれさ）ちゃんは 何歳 （なんさい）ですか。
．．．9歳（きゅうさい）です。
မိုက(် ခ်)မီလာ ဖြစ်ပါတယ်
1.(anata) wa maiku mira- san desu ka.
…hai, (watashi) wa maiku mira desu.
2.mira- san wa gakusei desu ka.
…iie, (watashi) wa gakusei jya arimasen.
3.wan san wa enjinia desu ka.
…iie, wan san wa enjinia jya arimasen.
4.ano kata wa donata desu ka.
watto san desu. sakura daigaku no sensei desu.
5.teresa chan wa nansai desu ka.
ဥပမာစာကြောင်းများ အတွင်းမှသတိပြုစရာများ ၁ တွင် မိုက်(ခ်)မီလာဖြစ်ပါသလား ဟုမေးထားသောမေးခွန်း၌ နာမည်ကို マイク(まいく)・ミラ(みら)ーさん (maiku mira- san)ဟူ၍ さん san ထည့်၍သုံးနှုန်းထားပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကိုခေါ်ရာတွင် さん san ကိုသုံးပေမဲ့ ကိုယ့်နာမည်တွင် သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ၅ တွင် テレサ(てれさ)ちゃん teresa chan လို့ပြောထားပါတယ်။ ၁၀နှစ်အောက် မိန်းခလေးဖြစ်လို့ ちゃん chan ကိုသုံးထားတာပါ။
Lesson2Grammar ၁။ ဒါက—ဖြစ်တယ် これは--- です。 kore wa--- desu. ဒါက---ဖြစ်တယ်
kore wa hon desu. ဒါက စာအုပ် ဖြစ်တယ်။ ၂။ –ရဲ—့ဖြစ်တယ် これは---の---です。 kore wa---no---desu. ဒါက---ရဲ--့---ဖြစ်တယ်
korewa watashi no hon desu. ဒါက ကျွန်တော့ရဲ့ စာအုပ်ပါ။ ၃။ ကျွန်တော့်ဟာ この---は---わたしの です。 kono---wa---watashi no desu. ဒီ---ကကျွန်တော့်ဟာဖြစ်ပါတယ်။
kono hon wa watashino desu. ဒီစာအုပ်က ကျွန်တော့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
これは 辞書（じしょ）です。 kore wa jisho desu. ဒါ အဘိဓါဏ် ဖြစ်ပါတယ်။
これは コンピューター（こんぴゅーたー）の 本（ほん）です。 kore wa conpyu-ta- no hon desu. ဒါ ကွန်ပြူတာ (ရဲ့)စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
それは わたしの 傘（かさ）です。 sore wa watashi no kasa desu. ဒီဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ ထီးဖြစ်ပါတယ်။
この 傘（かさ）は わたしのです。 kono kasa wa watashi no desu. ဒီထီးက ကျွန်တော့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
これは テレホン（てれほん）カード（かーど）ですか。 kore wa terehon ka-do desuka. ဒါ တယ်လီဖုန်းကဒ် (ဖြစ်ပါသ) လား။ ．．．はい、そうです。 ….hai, soudesu. ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ်။
sore wa no-to desuka. ဒီဟာ(က)မှတ်စုစာအုပ်လား။ ．．．いいえ、そうじゃ ありません。手帳（てちょう）です。 ….iie,soujya arimasen. techoudesu. ဟင့်အင်း၊ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းပါ။ 3.
それは 何（なん）ですか。 sore wa nan desuka. ဒီဟာ(က)ဘာလဲ။ ．．．「これは」名刺（めいし）です。 …[kore wa] meishi desu. ဒါ လိပ်စာကဒ် ပါ။
これは「９」ですか、「７」ですか。 kore wa  desuka, [ ７ ] desuka. ဒါ ၉ လား၊ ၇ လား။ ．．．「９」です。 …. desu. ၉ ပါ။
それは 何（なん）の 雑誌（ざっし）ですか。 sore wa nan no zasshi desuka. ဒီဟာ ဘာမဂ္ဂဇင်းလဲ။ ．．．自動車（じどうしゃ）の 雑誌（ざっし）です。 …. jidousha no zasshi desu,
あれは だれの かばんですか。 are wa dare no kaban desuka ဟိုဟာ ဘယ်သူ့ရဲ့ အိပ်လဲ။ ．．．佐藤（さとう）さんの かばんです。 …. sato san no kaban desu. စတိုစံရဲ့ အိပ်ပါ။
この 傘（かさ）は あなたのですか。 kono kasa wa anata no desuka. ဒီထီး ခင်ဗျားဟာလား။ ．．．いいえ、わたしのじゃ ありません。 …. iie, watashi no jya arimasen. ဟင့်အင်း၊ ကျွန်တော့ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။
この かぎは だれのですか。 kono kagi wa dare no desuka. ဒီသော့ (က) ဘယ်သူ့ဟာလဲ။ ．．．わたしのです。 …. watashi no desu. ကျွန်တော့ဟာပါ။
နံပါတ် ၁ တွင်သုံးထားသော これ kore နှင့်နံပါတ် ၄တွင်သုံးထားသော この kono ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကွဲလွဲခြင်းနဲ့ သုံးပုံသုံးနည်း これ kore။ ။ ဒါ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူတစ်လုံးတည်းလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ “これ? kore?” ဒါလား ဆိုပြီးမေးလို့ရပါတယ်။ この kono။ ။ ဒီ– လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ တစ်လုံးတည်းသုံးလို့မရပါ။ သူ့နောက်မှာအမြဲအရာဝတ္ထုတစ်ခု လိုက်ရပါတယ်။ ဥပမာ “この傘(かさ) kono kasa” ဒီထီး ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်။
Lesson3Grammar ၁။ ဒီနေရာက—ဖြစ်တယ် ここは---です。 koko wa --- desu. ဒီနေရာက---ဖြစ်တယ်
koko wa byouin desu. ဒီနေရာက ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ ဟိုးနေရာ ---は あそこです。 ---wa asoko desu. ---က ဟိုးမှာပါ။
hon wa asoko desu. စာအုပ်က ဟိုးမှာပါ။ ဝါကျများ 1.
ここは 食堂（しょくどう）です。 koko wa shokudou desu. ဒီနေရာက ထမင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
電話（でんわ）は あそこです。 denwa wa asokodesu. တယ်လီဖုန်းက ဟိုးမှာပါ။
ここは 新大阪（しんおおさか）ですか。 koko wa sinoosaka desuka. ဒီနေရာက ရှင်းအိုဆာကာ ဖြစ်ပါသလား။ …はい、そうです。 hai, soudesu. ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ်။
お手洗（てあら）いは どこですか。 otearai wa doko desuka. အိမ်သာက ဘယ်မှာလဲ။ …あそこです。 asoko desu. ဟိုးမှာပါ။
山田（やまだ）さんは どこですか。 yamada san wa doko desuka. ယမဓစံက ဘယ်မှာလဲ။ …事務所（じむしょ）です。 jimusho desu. ရုံးခန်းမှာပါ။
エレベーター（えれべーたー）は どちらですか。 erebe-ta- wa dochira desuka. ဓါတ်လှေခါးက ဘယ်ဘက်မှာလဲ။ …そちらです。 sochira desu. ဟိုဘက်မှာပါ။
［お］国（くに）は どちらですか。 [o]kuni wa dochira desuka. နိုင်ငံက ဘယ်ကလဲ။(ဘယ်နိုင်ငံကလဲ) …アメリカ（あめりか）です。 amerika desu.
それは どこの 靴（くつ）ですか。 sore wa doko no kutsu desuka. အဲဒါ ဘယ်ကဖိနပ်လ(ဲ ဘယ်နိုင်ငံက လုပ်တဲ့ဖိနပ်လ)ဲ …イタリア（いたりあ）の 靴（くつ）です。 itaria no kutsu desu. အီတလီက ဖိနပ်ပါ။(အီတလီကလုပ်တဲ့ ဖိနပ်ပါ)
この 時計（とけい）は いくらですか。 kono tokei wa ikura desuka. ဒီနာရီက ဘယ်လောက်လဲ။ … 18,600 円（えん）です。 18,600 en desu. 18,600 ယန်းပါ။
၄ တွင် “どちらですか” နဲ့မေးခွန်းမေးထားပြီး အဓိပ္ပါယ်က “どこですか” နဲ့အတူတူဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “どちらですか” နဲ့မေးခွန်းမေးထားရင် အဖြေကို “こちら、そちら、あちら” မှသင့်တော်တာနဲ့ ဖြေပေးရပါမယ်။ ၆ တွင် どこの
靴(くつ)ですか လို့မေးထားပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တဲ့
Lesson4Grammar ၁။အခု 今（いま）--- です。 ima--- desu. အခု ---- ဖြစ်တယ်။
ima goji desu. အခု ၅နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။–ကနေ၊မှ—အထိ ---から--- まで--- ます。 ---kara ---made ---masu. ---ကနေ၊မှ--- အထိ --- ဖြစ်တယ်
kuji kara goji made hataraki masu. ၉နာရီမှ ၅နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်တယ်။ 
“ —から kara—まで made ” ဆိုတာက “ —ကနေ— အထိ” လို့ဆိုလိုတာပါ။ အချိန်နဲ့ နေရာတွေကိုဖေါ်ပြတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ ၃။—မှာ ---に ---ます。 ---ni--- masu. ---မှာ ---တယ်
rokuji ni oki masu. ၆နာရီမှာ နိုးတယ်။ “に ni မှာ” အချိန်ရဲ့နောက်လိုက်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် နာရီရဲ့နောက်မှာ လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ တိုးလာတဲ့ ပုံစံသစ်များကို မရောထွေးစေရန် သေချာခွဲ၍ ကျက်မှတ်ပါ၊
အရင်သင်ခန်းစာတွေအထိ “です(ဖြစ်တယ်)/ですか(ဖြစ်သလား)” ကိုသာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
です desu ရဲ့ရှေ့မှာ နာမ်ဘဲလိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ o
ဥပမာ–sensei desu ဆရာဖြစ်တယ်။
gakusei desu ကျောင်းသားဖြစ်တယ်။ စတာတွေပါ၊ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ “ます masu (—တယ်) /ますか masuka (—သလား)”
ます masu နဲ့ဆုံးတာတွေဟာ ကြိယာ (verb) ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကိုမေးခွန်းအဖြစ် ပြောင်းချင်ရင် နောက်ကနေ “か ka” ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။
masu ၏ verb form များမှာအောက်ပါ ဇယားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလွတ်ကျက်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
～ます/ ますか (ပစ္စုပ္ပန် ကာလပြကြိယာ)
～ません/ ませんか (ပစ္စုပ္ပန် ကာလပြကြိယာ)
～ました/ ましたか အတိတ် ကာလပြကြိယာ)
～ませんでした/ ませんでしたか (အတိတ်
今（いま） ４時（じ）５分（ふん）です。 ima yoji gofun desu. အခု ၄ နာရီ ၅ မိနစ်ပါ။
わたしは ９時（じ）から ５時（じ）まで す。
watashi wa kuji kara goji made hataraki masu. ကျွန်တော် ၉ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်တယ်။ 3.
わたしは 朝（あさ） ６時（じ）に 起（お）きます。 watashi wa asa roku ji ni oki masu. ကျွန်တော် မနက် ၆ နာရီမှာ နိုးတယ်။
わたしは きのう 勉強（べんきょう）しました。 watashi wa kinou benkyou shimashita. ကျွန်တော် မနေ့က စာကျက်ခဲ့တယ်။
今（いま） 何時（なんじ）ですか。 ima nanji desuka. အခု ဘယ်နှစ်နာရီလဲ။ …2 時（じ） 10 分（ぷん）です。 ni ji jyuppun desu. ၂ နာရီ ၁၀မိနစ်ပါ။ ニューヨーク（にゅーよーく）は 今（いま） 何時（なんじ）で
すか。 nyu-yo-ku wa ima nanji desuka. နယူးယောက်က အခုဘယ်နှစ်နာရီလဲ။ … 午前（ごぜん）
0 時（じ） 10 分（ぷん）です。
gozen rei ji jyuppun desu. မနက် သုညနာရီ ၁၀မိနစ်ပါ။ (သန်းခေါင် ၁၂ နာရီကို သုညနာရီဟုခေါ်ပါသည်) 2.
銀行（ぎんこう）は 何時（なんじ）から 何時（なんじ）までで すか。 ginkou wa nanji kara nanji made desuka. ဘဏ်က ဘယ်နှစ်နာရီမှ ဘယ်နှစ်နာရီအထိလဲ။ …9 時（じ）から
kuji kara sanji made desu. ၉နာရီမှ ၃နာရီအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ 休（やす）みは 何曜日（なんようび）ですか。 yasumi wa nan youbi desuka. နားရက်(ပိတ်ရက်)ကဘယ်နေ့လဲ။ … 土曜日（どようび）と 日曜日（にちようび）です。 do youbi to nichi youbi desu. စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ 3.
毎晩（まいばん） 何時（なんじ）に 寝（ね）ますか。 maiban nanji ni ne masuka. ညတိုင်း ဘယ်နှစ်နာရီမှာ အိပ်သလဲ။
…11 時（じ）に 寝（ね）ます。 jyuu ichi ji ni ne masu. ၁၁ နာရီမှာ အိပ်တယ်။ 4.
土曜日（どようび） 働（はたら）きますか。 do youbi hataraki masuka. စနေနေ့ အလုပ်လုပ်သလား။ … いいえ、働（はたら）きません。 iie, hataraki masen. ဟင့်အင်း မလုပ်ပါဘူး။
きのう 勉強（べんきょう）しましたか。 kinou benkyou shima shitaka. မနေ့က စာကျက်ခဲ့သလား။ …
iie, benkyou shimasen deshita. ဟင့်အင်း မကျက်ခဲ့ပါဘူး။ 6.
の 電話番号（でんわばんごう）は 何番（なんばん）です
か。 IMC no denwa bango wa nanban desuka. IMC ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က ဘာနံပါတ်(ဘယ်လောက်)လဲ။ … 341 の
san yon ichi no ni go kyuu nana desu. ၃၄၁ ရဲ့ ၂၅၉၇ ဖြစ်ပါတယ်။
Lesson5Grammar ၁။–ကို၊ သို့ ---へ
行 ( い ) きます。
---he iki masu. --- ကိ(ု သိ)ု့ သွားမယ်။
nihon he iki masu. ဂျပန်ကို သွားမယ်။ 
“へ he” က လားရာကို ညွန်ပြတဲ့ လားရာပြပုဒ်ပါ။
၂။–ဖြင့်၊ နှင့်၊ ---で
---de iki masu. --- ဖြင့်၊ နှင(့် နဲ့)သွားမယ်။
hikouki de iki masu. -လေယဉ်ပျံနဲ့သွားမယ်။ 
“で de” က အသုံးခြခံရတဲ့ နာမ်တစ်ခုခုရဲ့ နောက်မှာ ထားပြီးသုံးပါတယ်။ ၃။နှင့်အတူ ---と
---to iki masu. --- နှင့်အတူ သွားမယ်။
kazoku to iki masu. မိသားစုနဲ့ သွားမယ်။ 
“と to” အတူတူသွားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နောက်မှာ ထားပြီးသုံးပါတယ်
၄။မှာ(အချိန်ပြ) ---に ---ni
来（き）ました。 ki mashita.
shichi gatsu youka ni ki mashita. ၇လ ၈ရက်မှာ လာခဲ့တယ်။ “に ni” နာရီနေ့ရက်တွေ ရဲ့ နောက်မှာထားပြီး သုံးပါတယ်။
わたしは 京都（きょうと）へ 行（い）きます。 watashi wa kyouto he iki masu. ကျွန်တော် ကျိုတိုကို သွားမယ်။
わたしは タクシー（たくしー）で うちへ
watashi wa takushi- de uchi he kaeri masu. ကျွန်တော် တက္ကဆီနဲ့ အိမ်ကို ပြန်မယ်။ 3.
わたしは 家族（かぞく）と 日本（にほん）へ 来（き）まし た。 watashi wa kazoku to nihon he ki mashita. ကျွန်တော် မိသားစု နဲ့ ဂျပန်ကို လာခဲ့မယ်။
あした どこへ 行（い）きますか。 ashita doko he iki masuka. မနက်ဖန် ဘယ်ကို သွားမလဲ။ … 奈良（なら）へ 行（い）きます。 nara he iki masu. နာရာကို သွားမယ်။
日曜日（にちようび） どこへ 行（い）きましたか。 nichi youbi doko he iki mashitaka. တနင်္ဂနွေနေ့ ဘယ်ကို သွားခဲ့သလဲ။ … どこ［へ］も 行（い）きませんでした。 doko [he] mo iki masendeshita. ဘယ်ကိုမှ မသွားခဲ့ဘူး။
何（なん）で 東京（とうきょう）へ 行（い）きますか。 ဘာနဲ့ တိုကျိုကို သွားမလဲ။ nande tokyou he iki masuka. … 新幹線（しんかんせん）で 行（い）きます。 shinkansen de iki masu. ကျဉ်ဆံရထားနဲ့ သွားမယ်။
だれと 東京（とうきょう）へ 行（い）きますか。
dare to tokyou he iki masuka. ဘယ်သူနဲ့ တိုကျိုကို သွားမလဲ။ … 山田（やまだ）さんと 行（い）きます。 yamada san to iki masu. ယမဓစံ နဲ့ သွားမယ်။ 5.
いつ 日本（にほん）へ 来（き）ましたか。 itsu niho he ki mashitaka. ဘယ်တုန်းက ဂျပန်ကို လာခဲ့သလဲ။ …3 月（がつ） 25 日（にち）に 来（き）ました。 san gatsu nijyuugo nichi ni ki mashita. ၃ လ ၂၅ရက် မှာ လာခဲ့ပါတယ်။
誕生日（たんじょうび）は いつですか。 tanjyoubi wa itsu desuka. မွေးနေ့က ဘယ်တော့လဲ။ …6 月（がつ） 13 日（にち）です。 roku gatsu jyuusan nichi desu. ၆လ ၁၃ရက် ပါ။
ဥပမာ စာကြောင်းများအတွင်းမှ သတိပြုစရာများ
နံပါတ် ၁ တွင် ဘယ်ကိုသွားမလဲ ဆိုတာကို “どこへ
နံပါတ် ၂ တွင် ဘယ်ကိုမှ မသွားခဲ့ဘူးလို့ ငြင်းချင်ရင် “どこも
နံပါတ် ၃ တွင် အသုံးပြုစီးနင်းသွားသည့် ယဉ်ကို မေးချင်ရင် “何(なん)で
လို့မေးပါ တယ်။ KyiPhyu(plz visit my page)
Lesson6Grammar ၁။—ကို
—を V ます。(V=Verb) — ကို (ます ကြိယာ) 新聞(しんぶん)を
—V ませんか。 —မဘူးလား။ いっしょに
အတူတူ မသွားဘူးလား။ (အတူပါဝင်စေချင်သောအခါတွင် မေးသော မေးခွန်းဖြစ်သည်)
—V ましょう。 —(ကြိယာ)ရအောင် 今日(きょう)は
ဒီနေ့(တော့) ပြန်ရအောင်။ (ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားသူများကိုပါ ပါဝင်စေ ချင်သောအခါတွင် သုံးသည်။)
(place)で— (နေရာ)မှာ— 駅(えき)で
ကျွန်တော် ဖျော်ရည်သောက်မယ်။ ２．わたしは
ကျွန်တော်ဘူတာမှာ သတင်းစာဝယ်မယ်။ ３．いっしょに
အတူတူ Kobe ကိုမသွားဘူးလား။ ４．ちょっと
ဆေးလိပ်သောက်သလား။ …いいえ、吸(す)いません。 ဟင့်အင်း၊ မသောက်ဘူး။ ２．毎朝(まいあさ)
မနက်တိုင်းဘာကို စားသလဲ။ …パン(ぱん)と
ပေါင်မုန့်နဲ့ ကြက်ဥကိုစားတယ်။ ３．けさ
ဒီမနက်ဘာကို စားခဲ့သလဲ။ …何(なに)も
(み)ました。 ဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ 日曜日(にちようび)は KyiPhyu(plz visit my page)
しましたか。 Page 23
တနင်္ဂနွေနေ့ ဘာကိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ …友達(ともだち)と
သူငယ်ချင်းနဲ့ Nara ကိုသွားခဲ့တယ်။ ５．どこで
ဘယ်မှာ အဲဒီအိပ်ကိုဝယ်ခဲ့သလဲ။ …メキシコ(めきしこ)で
မက္ကစီကမှိုာဝယ်ခဲ့တာပါ။ ６．いっしょに
အတူတူဘီယာမသောက်ဘူးလား။ …ええ、飲(の)みましょう。 အင်း၊ သောက်ရအောင်။
ဒီအခန်းမှာ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို စကားဆက်နှင့်ဆက်သော သင်ခန်းစာတိုးလာပါတယ်။ နံပါတ် ၄ တွင“် それから အဲဒီနောက်” ကိုသုံးပြီး စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ဆက်ထားပါတယ်။ ကြိယာများ၏နောက်ဆုံးစာလုံးမှာ “ます” ဆိုလျှင် ပစ္စုပ္ပန်ကာလနဲ့အနာဂတ်ကာလ အတွက် သုံးပြီး၊ “ ました” ကတော့ အတိတ်ကာလအတွက်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ပြပုဒ်မပါ သော်လည်း သုံးထားသောကြိယာပုံစံကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အတိတက်ာလလား ပစ္စုပ္ပန်ကာလလား ဆိုတာ ကိုသိနိုင်ပါ တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
Lesson7Grammar ၁။—ပြီးပြီလား
もう—ましたか。 —ပြီးပြီလား もう 食(た)べましたか。 ထမင်းစားပြီးပြီလား။ 
“もう” ကိုကြိယာအရှေ့တွင်ထားပြီးသုံးလျှင် ၄င်းကြိယာရဲ့ ပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
“もう” ရဲ့နောက်မှာ အတိတ်ကလကြိယာ “ました” ဘဲလိုက်ပါတယ်။
まだ—ません。これから—ます。 မ—သေးဘူး။ အခုကစပြီး—မယ်။ まだ食(た)べません。これから
မစားရသေးဘူး။ အခုကစပြီးစားမယ်။ 
まだ” ဟာ တစ်ခုခုကို မလုပ်ရသေးဘူးလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
ဥပမာ စားပြီးပြီလားလို့မေးရင် “まだです” လို့ပြန်ဖြေရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ်။
“まだです”ရဲ့နောက်မှာ “これから” နဲ့စကားဆက်လေ့ရှိပြီး “これから” ရဲ့နောက်မှာ အမြဲတမ်း ပစ္စုပ္ပန်ပြကြိယာ(“ます” နဲ့ဆုံး တဲ့ကြိယာ)ဘဲလိုက်ပါတယ်။
၃။—ကနေ၊ —ကိ/ု —ထံမှ၊ —ထံသို့
～に —ကနေ၊ —ကို/ —ထံမှ၊ —ထံသို့ 先生(せんせい)に
ဆရာထံမှ ရခဲ့တယ်။ 
“に” ကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ အချိန်နောက်ကလိုက်ပြီး —မှာ အနေနဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်နောက်တွင်ထားပြီးသုံးပါသည်။ —ကနေ၊ —ကို/ —ထံမှ၊ —ထံသို့ အနေဖြင့်သုံးပါသည်။
～で —ဖြင့်၊ —နဲ့ ごはんを
၁။ ကျွန်တော် လက်နှိပ်စက်ဖြင့်စာ (letter) ကိုရေးတယ်။ ၂။ ကျွန်တော် ခီမူရာစံက(ို သို့) ပန်းကိုပေးမယ်။ ၃။ ကျွန်တော် ခရီနာစံ ကနေ(ထံမ)ှ ချောကလက်ကိုရခဲ့တယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…いいえ、ラジオ(らじお)で ２．日本語(にほんご)で …いいえ、英語(えいご)で ３．“Goodbye” は
၁။ တီဗီမှာ(နဲ)့ ဂျပန်စကားကို လေ့လာခဲ့တာလား။ ဟင့်အင်း၊ ရေဒီယိုနဲ့လေ့လာခဲ့တာ။ ၂။ ဂျပန်စကားနဲ့ အစီရင်ခံစာ(report)ကို ရေးသလား။ ဟင့်အင်း၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်။ ၃။ Goodbye ကိုဂျပန်လိုဘာလဲ(ဘယ်လိုပြောလဲ) 「さようなら」ဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ဘယ်သူ့ကို ခရစ်စမတ်ကဒ် ရေးမှာလဲ။ မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းဆီကို ရေးမယ်။ ၅။ အဲဒါဘာလဲ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းပါ။ ယမဓစံဆီက ရတာပါ။ ၆။ ကျဉ်ဆံရထားရဲ့ လက်မှတ်ကို ဝယ်ပြီးပြီလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဝယ်ပြီးပြီ။ ၇။ နေ့လည်စာ စားပြီးပြီလား။ ဟင့်အင်း မစားရသေးဘူး၊ အခုကစပြီး စားမှာ။(အခုမှ စားမှာ)
Lesson 8 Grammar နာမဝိသေသနများ(adj) ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကွဲပြားပုံများ။
ဂျပန်စာတွင်နာမဝိသေသန နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ၁။ “い” နှင့်ဆုံးသော နာမဝိသေသန(い adj) ၂၊ “な” နှင့်ဆုံးသော နာမဝိသေသန(な adj) ယေဘူယျအားဖြင့် “い” နှင့်အဆုံးသတ်လျှင် い adj ဟုမှတ်ယူနိုင်ပြီး၊ “い” နှင့်မဆုံးသော အရာများကို な adj ဟုအလွယ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ နာမဝိသေသန ပုံစံပြဇယား
おいし いです /
きれい です / か
きれい じゃ あ りません
မူရင်းပုံစံသည် –သော နှင့်ဆုံးသောနာမဝိသေသနများကိုဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာ လှသော။ ကောင်းသော။ ကြီးသော စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်လိုတော့ い/な နဲ့ဆုံးပါတယ်။
၂။ စာကြောင်းတွင်သုံးသော နာမဝိသေသန
မူရင်းပုံစံကို စကားပြောနှင့် စာကြောင်းတွေမှသုံးရင် မြန်မာလိုဆို —သော၊ မှ —တယ် သို့ပြောင်း လဲသွားပါတယ်။ ဥပမာ လှသော က လှတယ် လို့ပြောင်းလဲလာပါမယ်။ ဒီအတွက် ဂျပန်စာမှာ adj နောက်မှ “です”ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ きれいです ကလှတယ် လို့ပြောတာပါ။ သတိပြုရမှာက い adj အတွက် ဒီအတိုင်း “です”ကိုထည့်လို့ရသော်လည်း な adj အတွက် な ကိုဖြုတ်ပြီးမှ “です”ထည့်ရပါတယ်။ ဇယားရဲ့ နံပါတ် ၂ က な adj အကွက်တွင်လေ့လာပါ။ ၃။ အငြင်းနာမဝိသေသန
い adj အတွက် い ကိုဖြုတ်ပြီး くない ထည့်ရပါတယ်။ な adj အတွက် な ကိုဖြုတ်ပြီး じゃ
ません ကိုထည့်ရပါတယ်။ ဇယားရဲ့ နံပါတ် ၃ တွင်လေ့လာပါ။ ဒါကြောင့် နာမဝိသေသနတစ်ခုဟာ い adj လား な adj လားဆိုတာကွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ်။
၁။ ဆာကူရာပန်းက လှတယ်။ ၂။ ဖူဂျီတောင်က မြင့်တယ်။ ၃။ ဆာကူရာက လှတဲ့ပန်းဖြစ်တယ်။ ၄။ ဖူဂျီတောင်က မြင့်တဲ့တောင် ဖြစ်တယ်။
…はい、にぎやかです。 ２．琵琶湖(びわこ)の …いいえ、あまり
５．東京(とうきょう)の …きれいです。そして …どんな
映画(えいが)です。 ７．ミラー(みらー)さんの …あの
၁။ အိုဆာကာက စည်းကားပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့ စည်ကားပါတယ်။ ၂။ ဘီဝကိ(ု ရေကန်)ရဲ့ရေဟာ သန့်ရှင်းပါသလား။ ဟင့်အင်း သိပ်မသန့်ရှင်းဘူး။ ၃။ ပီကင်းက အခု ချမ်းပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့ အလွန်ချမ်းပါတယ်။ ရှမ်ဟိုင်းလည်း ချမ်းသလား။ ဟင့်အင်း သိပ်မချမ်းဘူး။ ၄။ အဲဒီအဘိဓါဏ် ကောင်းလား။ ဟင့်အင်း သိပ်မကောင်းဘူး။ ၅။ တိုကျိုရဲ့မြေအောက်ရထားက ဘယ်လိုလဲ။ KyiPhyu(plz visit my page)
သန့်ရှင်းတယ်၊ ပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်(သုံးရလွယ်ကူတယ်) ၆။ မနေ့က ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုရုပ်ရှင်မျိုးလဲ။ စာမူရိုင်း ၇ ယောက် ရုပ်ရှင်ပါ။ ဟောင်းပေမဲ့လည်း အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်။ ၇။ မီလာစံရဲ့ ထီးက ဘယ်ဟာလဲ။ ဟိုးက အပြာရောင်ဖြစ်တယ်။
ဥပမာစာကြောင်းများအတွင်းမှ သတိပြုစရာများ 
နံပါတ် ၂ ဒုတိယစာကြောင်းတွင် “あまり” ကိုသုံးထားပါတယ်။ –သိပ် လို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး သူ့ရဲ့ နောက်မှာ အငြင်းနာမဝိသေသနဘဲလိုက်ပါတယ်။
နံပါတ် ၅ ဒုတိယစာကြောင်းတွင် “そして” ကိုသုံးထားပြီး အဓိပ္ပါယ်က အဲဒီနောက် /ပြီးနောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်တူညီသော စာကြောင်းတွေကို တဆက်တည်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။
နံပါတ် ၆ တတိယစာကြောင်းတွင် “が” ကိုသုံးထားပြီး အဓိပ္ပါယ်က “ပေမဲ့လ”ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပါယ်ကို တဆက်တည်းပြောတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။
Lesson9Grammar ၁။ “が” ၏သုံးပုံသုံးနည်း 
“が” ကိုမြန်မာလို –ကို နေရာမှာသုံးပါတယ်။
“を” လည်း –ကို အဖြစ်နဲ့သုံးပါတယ်။
水(みず) を 飲(の)みま
အီတလီအစားအစာ ကို ကြိုက်တယ်
ရေ ကို သောက်တယ်
日本語(にほんご) が わかります。
それ を ください
ဂျပန်စာ ကိုနားလည်တယ်
အဲဒါ ကို ပေးပါ။
စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ နာမဝိသေသနများ၊ ကြိယာ
ပြုလုပ်ခံ၊ အသုံးချခံ အနေဖြင့်
များရဲ့ရှေ့တွင် が ကိုသုံးသည်
သုံးလျှင် を ကိုသုံးသည်
ります。 ၁။ ကျွန်တော် အီတလီအစားအစာ ကြိုက်တယ်။ ၂။ ကျွန်တော် ဂျပန်စကားကို နည်းနည်းနားလည်တယ်။ ၃။ ဒီနေ့ခလေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်လို့ စောစောပြန်မယ်။
၁။ အရက်ကို ကြိုက်လား။ ဟင့်အင်း မကြိုက်ဘူး။ ၂။ ဘယ်လိုအားကစားကို ကြိုက်လဲ။ ဘောလုံးအားကစားကိုကြိုက်တယ်။ ၃။ ခရီနာစံ ပုံဆွဲတော်လား။ ဟုတ်ကဲ့ အလွန်တော်ပါတယ်။ ၄။ တနာခါစံ အင်ဒိုနီးရှားစကား နားလည်လား။ ဟင့်အင်း လုံးဝနားမလည်ဘူး။ ၅။ ပိုက်ဆံ အကြွေရှိပါသလား။ ဟင့်အင်း မရှိဘူး။ ၆။ မနက်တိုင်း သတင်းစာကို ဖတ်ပါသလား။ ဟင့်အင်း အချိန်မရှိလို့ မဖတ်ပါဘူး။ ၇။ ဘာလို့မနေ့က စောစောပြန်ခဲ့သလဲ။ ကိစ္စရှိလို့ပါ။ KyiPhyu(plz visit my page)
ဥပမာစာကြောင်းအတွင်းသုံးထားသော “どんな” နဲ“့ どうして” ကွာခြားပုံ။ “どんな” — ဘယ်လိုမျိုး သူ့နောက်မှာ နာမ် (noun) လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုမျိုးလို့မေးချင်ရင် မေးခွန်းမှာ “どんな” နဲ့စပြီးမေးရပါတယ်။ “どうして” — ဘာဖြစ်လို့ သူ့နောက်မှာ စာကြောင်းရှည်နဲ့ ကြိယာများလိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ “どうしてですか” ဆိုရင် ဘာဖြစ်လလိုဲ့လို့မေးတာပါ။
Lesson 10 Grammar ၁။ —ရှိတယ် သက်ရှိရှိတယ် (လူ၊ တိရိစ္ဆာန)်
あります。 ၁။ ဟိုးမှာ စတိုစံရှိတယ်။ ၂။ စားပွဲရဲ့ အပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံရှိတယ်။ ၃။ မိသားစုက နယူးယောက်မှာနေတယ်။ ၄။ Tokyo Disney Land ကချိဘမြို့နယ်မှာ ရှိတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…はい、あそこに ３．庭(にわ)に …だれも
５．ミラー(みらー)さんは KyiPhyu(plz visit my page)
いますか。 Page 35
၁။ ဟိုးမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလူက ဘယ်သူလဲ IMC ရဲ့ မစုမိုတိုစံပါ။ ၂။ ဒီအနီးနားမှာ တယ်လီဖုန်းရှိသလား။ ဟုတ်ကဲ့ ဟိုးမှာ ရှိပါတယ်။ ၃။ ခြံ(ထဲ)မှာ ဘယ်သူရှိလဲ။ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ ကြောင်ရှိတယ်။ ၄။ ဗူးထဲမှာ ဘာရှိလဲ။ စာအဟောင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရှိတယ်။ ၅။ မီလာစံက ဘယ်မှာရှိလဲ။ အစည်းအဝေးခန်းမှာရှိတယ်။ ၆။ စာတိုက်က ဘယ်မှာရှိလဲ။ ဘူတာရုံရဲ့အနီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ရဲ့ရှေ့မှာ ရှိတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းအတွင်းမှ သတိပြုစရာများ 
နံပါတ် ၃ တွင် “庭(にわ)に” ကိုမြန်မာလို ဆီလျှော်အောင် ခြံထဲမှာ လို့ဘာသာပြန်ပါမယ်။
နံပါတ် ၄ တွင် “古(ふる)い
စာအဟောင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေလို့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ 
ဒီမှာ “～や～など” ကိုသုံးခြင်းဟာ စာအဟောင်းနဲ့ဓါတ်ပုံအပြင် အခြားအရာများလည်းရှိသည် လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
စာအဟောင်းနဲ့ဓါတ်ပုံဘဲရှိရင်တော့ “と” လို့သုံးနိုင်ပါတယ်။
Lesson 11 Grammar ၁၊ လူနှင့်အရာဝတ္ထုများရေတွက်ပုံ １ 人（ひとり）
လေးယောက်မှစ၍ ～人（にん） ဟုရေတွက်ပါ။ ４ 人（よにん）
၂။ အချိန်များရဲအဓိပ္ပါယ် ဒီသင်ခန်းစာမှာ အချိန်များရဲ့ကြာချိန်ကိုပြောတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ မေးခွန်းများပါဝင်ပါတယ်။ အောက်ပါကြာချိန်နှင့်အချိန်
１ヶ 月 （いっかげつ） တစ်လ။(တစ်လကြာမြင့်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးသည်) １月（いちがつ）
１ 時間 （いちじかん） တစ်နာရီကြာ။(တစ်နာရီကြာမြင့်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါတွင်သုံးသည်) １時（いちじ）
၃။ မေးခွန်းတွင်မေးသော ရေတွက်ပုံအတိုင်းအဖြေတွင်ပြန်သုံးပေးရမည် いくつ ⇒ つ ဘယ်နှစ်ခု မေးခွန်းတွင် “ いくつ ” ဖြင့်မေးလာလျှင် အဖြေတွင်အရေအတွက်ရဲ့နောက်မှာ “ つ ” ကိုသုံး ပြီးဖြေရမယ်။ 何人(なんにん) ⇒ 人(にん) ဘယ်နှစ်ယောက် မေးခွန်းတွင် “ 何人(なんにん) ” ဟုမေးလျှင်အဖြေတွင် “ 人(にん) ” ကိုသုံးပြီးဖြေပေးရမည်။ 何回(なんかい) ⇒ 回(かい) ဘယ်နှစ်ခေါက် မေးခွန်းတွင် “ 何回(なんかい) ” ဟုမေးလျှင်အဖြေတွင် “ 回(かい) ” ကိုသုံးပြီးဖြေရမည်။
၄။ ကြာချိန်ကိုမေးခွန်းမေးခြင်း ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
၁။ အစည်းအဝေးမှာ စားပွဲခုံ ၇ ခုရှိတယ်။ ၂။ ကျွန်တော် ဂျပန်မှာ ၁ နှစ်နေတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
か。 …はい、3 人(さんにん) います。みんな ４．家族(かぞく)は
６．田中(たなか)さんは しましたか。 …3 ヶ月(さんかげつ)
えっ、3 ヶ月(さんかげつ)だけですか。上手(じょうず)ですね。 ７．大阪(おおさか)から
い かかりますか。 …2 時間半(にじかんはん) かかります。 ၁။ ပန်းသီးကို ဘယ်နှစ်လုံးဝယ်ခဲ့လဲ။ ၄လုံးဝယ်ခဲ့တယ်။ ၂။ ယန်း ၈၀တန် တံဆိပ်ခေါင်း ၅ခုနဲ့ post card ၂ခု ပေးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ အားလုံး ၅၀၀ ယန်းပါ။ ၃။ ဖူဂျီတက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံခြားသားကျောင်းဆရာရှိလား။ ဟုတ်ကဲ့ ၃ ယောက်ရှိတယ်။ အားလုံး အမေရိကလူမျိုးဖြစ်တယ်။ ၄။ မိသားစု ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။ ၅ ယောက်ပါ။ မိဘ၊ အမနဲ့ အကို ရှိတယ်။ ၅။ တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ခေါက် တင်းနစ်ကစားလဲ။ ၂ ခေါက်လောက် ကစားတယ်။ ၆။ တနာခစံက ဘယ်လောက်စပိန်စကားကို လေ့လာခဲ့သလဲ။ ၃လ လေ့လာခဲ့တယ်။ ဟယ် ၃လ တည်းဘဲလား။ တော်တယ်နော်။ ၇။ အိုဆာကာကနေ တုကျိုအထိ ကျဉ်ဆံရထားနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ ၂နာရီခွဲကြာတယ်။
Lesson 12 Grammar ၁။ な adjနှင့် နာမ် noun များ၏အတိတ်ကာလများ present
past tense အငြင်း
+ じゃ なかった/（じゃ あ
tense + です
やすみ で す
ゃ ありませんでした） なかった/（じ
၂။ い adj များ၏အတိတ်ကာလများ present
+ く なかった
“ い ” ကိုဖြုတ်၍ “ くない ”
“ い ” ကိုဖြုတ်၍ “ くなかっ
た ” ကိုထည့်ပါ
しい 暑(あつ) い
၃။ နာမ် နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း “～より adj です” 
ထက်ပို ---- ဖြစ်တယ်။
နာမ်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောချင်လျှင် ၄င်းနာမ်နှစ်ခုရဲ့နောက်မှာ “～より ဥပမာ။ 新幹線(しんかんせん)は
adj です” ကိုထည့်ပါ။
၄။ တစ်ခုတည်းကိုသာ အလေးပေးပြောခြင်း “ いちばん adj です” 
နာမဝိသေသန၏ရှေ့တွင် “いちばん” ကိုထည့်လျှင် ၄င်းနာမဝိသေသန၏ အ—ဆုံးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ いちばん
၅။ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးမေးခွန်းမေးခြင်း “ どちらが adj ですか ” 
အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဘယ်ဟာကလို့မေးချင်ရင် အရာဝတ္ထုရဲ့နောက်မှာ “どちらが
ですか” လို့မေးရပါတယ်။ ဥပမာ။ サッカー(さっかー)と
-ဘောလုံးနဲ့ တင်းနစ်နဲ့ ဘယ်ဟာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။ “ ほうが adj です ”
အထက်ပါဥပမာအတိုင်းမေးခွန်းမေးလာလျှင် ကြိုက်သောအရာ၏နောက်တွင် “のほうが” ကိုထည့်ဖြေရပါတယ်။ ဥပမာ။ サッカー(さっかー)
-ဘောလုံး ကို ကြိုက်တယ်။
၁။ မနေ့က မိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။(မိုးရွာခဲ့တယ်) ၂။ မနေ့က ချမ်းခဲ့တယ်။ ၃။ Hokkaido ကKyuushuu ထက်ပိုကြီးတယ်။ ၄။ ကျွန်တော် ၁ နှစ်လုံးမှာ နွေရာသီကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…いいえ、静(しず)かじゃ ２．旅行(りょこう)は …はい、とても …いいえ、あまり …とても
すか。 KyiPhyu(plz visit my page)
…電車(でんしゃ)の ７．海(うみ)と …どちらも
၁။ Kyoto ကတိတ်ဆိပ်ခဲ့သလား။ ဟင့်အင်း မတိတ်ဆိပ်ခဲ့ဘူး။ ၂။ ခရီးသွားတာ ပျော်ခဲ့လား။ ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ခဲ့တယ်။ ၃။ ရာသီဥတုက ကောင်းခဲ့သလား။ ဟင့်အင်း သိပ်မကောင်းခဲ့ဘူး။ ၄။ မနေ့ကပါတီပွဲက ဘယ်လိုလဲ။ အလွန်စည်ကားခဲ့တယ်။ လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ၅။ Tokyo က နယူးယောက်ထက် လူပိုများလား။ ဟုတ်ကဲ့ အရမ်းပိုများတယ်။ ၆။ လေဆိပ်အထိကားနဲ့ ရထားနဲ့ ဘယ်ဟာက မြန်သလဲ။ ရထားကပိုပြီးမြန်တယ်။ ၇။ ပင်လယ်နဲ့ တောင်နဲ့ ဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲ။ နှစ်ခုစလုံး(ဘယ်ဟာမဆိ)ု ကြိုက်တယ်။ ၈။ ဂျပန်အစားအစာ(ထဲမှာ)ဘယ်ဟာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။ tenpura (ဂျပန်အကြော်)ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
Lesson 13 Grammar ၁။ —လိုချင်တယ်
အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို လိုချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါတွင်သုံးသည်။ ဥပမာ ။ 車(くるま)が
ကားကို လိုချင်တယ်။ 
သတိပြုရန် ။ ～ほしい
です ၏ရှေ့တွင် အထောက်အကူပြု ကြိယာ が ကိုအသုံးများသည်။
ます form ကြိယာမှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး たい ဥပမာ ။ たべたい
です(たべます မှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး たい ကိုထည့်ပါသည်။)
～したいです／したくないです したいです／したくないです ၏အရှေ့တွင် နာမ်လိုက်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာ ။ 散歩(さんぽ)
၄။ ဖိ(ု့ ရန်)သွားမယ်/လာမယ်
Ⅴに 行(い)きます／きます(V=Verb) Ｎに 行(い)きます／きます(N= Noun ) KyiPhyu(plz visit my page)
ဥပမာ ။ えいがを
ရုပ်ရှင(် ကို)ကြည့်ဖို့(ရန်) သွားမယ်။ にほんへ
ဂျပန်ကို စာလေ့လာဖို့ လာခဲ့တယ်။ 
ます form ကြိယာမှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး に
行(い)きます／きます ကိုထည့်လျှင် ဖိ(ု့ ရန်)
သွားမယ်/လာမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ 
နာမ်(N)ရဲ့နောက်မှာ ထည့်လျှင်လည်း အဲဒီ နာမ်ကို လုပ်ဖို့ သွားတယ်/လာတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
၅။ —ဖြစ်လ/—ဖြစ်ို့ ခဲ့လို့
Ⅴますから／Ⅴましたから ～ます form/ました form ကြိယာများရဲ့နောက်မှာ から ကိုထည့်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ ごはんを
၁။ ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာလိုချင်တယ်။ ၂။ ကျွန်တော် tenpura စားချင်တယ်။ ၃။ ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကို ဟင်းချက်သင်ဖို့သွားမယ်။
２．夏休(なつやす)みに …沖縄(おきなわ)へ ３．きょうは
၁။ အခုဘာကိုအလိုချင်ဆုံးလဲ။ အိမ်လိုချင်တယ်။ ၂။ နွေရာသီပိတ်ရက်မှာ ဘယ်ကိုသွားချင်လဲ။ အိုခီနာဝါကို သွားချင်တယ်။ ၃။ ဒီနေ့ပင်ပန်းခဲ့လို့ ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်နော်၊ ဒီနေ့အစည်းအဝေးက ပင်ပန်းခဲ့တယ်နော်။ ၄။ ဒီတပတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာဘာလှပ်မလဲ။ ခလေးနဲ့ Kobe ကိုသင်္ဘောကြည့်ဖို့သွားမယ်။ ၅။ ဂျပန်ကို ဘာလေ့လာဖို့လာခဲ့တာလဲ။ စီးပွါးရေး(ပညာ)လေ့လာဖို့လာခဲ့တယ်။ ၆။ ဆောင်းရာသီပိတ်ရက်မှာ တစ်နေရာရာကိုသွားခဲ့သလား။ အင်းသွားခဲ့တယ်။ ဘယ်ကိုသွားခဲ့သလဲ။ Hokkaido ကိုနှင်းလျှောစီးဖို့သွားခဲ့တယ်။
Lesson 14 Grammar ၁။ —လုပ်ပေးပါ (အမိန့်ပေး/ တောင်းဆိုခြင်း)
Ⅴて＋ください ကြိယာကို て form ပြောင်းပြီး ください နဲ့တွဲပေးပါ။ ဥပမာ ။ たべて
စားပါ။ ၂။ —လုပ်နေတယ်
Ⅴて＋います ကြိယာကို て form ပြောင်းပြီး います နဲ့တွဲပေးပါ။ ဥပမာ ။ たべて
၁။ ခဏစောင့်ပါ။ ၂။ မီလာစံက အခုဖုန်းဆက်နေတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…はい、どうぞ。 もう 少(すこ)し …はい。この
３．すみませんが、この 漢字(かんじ)の 読(よ)み方(かた)を 教(おし)えて ください。
…今(いま) 会議室(かいぎしつ)で じゃ、また
၁။ ဒီမှာ လိပ်စာနဲ့နာမည်ကိုရေးပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ နားလည်ပါပြီ။ ၂။ ဟိုရှပ်အင်ကျီကိုပြပါ။ ဟုတ်ကဲ့ ကြည့်ပါ။ နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ဟာ မရှိဘူးလား။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီရှပ်အင်ကျီက ဘယ်လိုလဲ။ ၃။ တဆိပ်လောက်ပါ။ ဒီခန်းဂျိရဲ့ဖတ်နည်းကို ပြောပြပါ။ အဲဒါက [kakitome] ဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ပူလိုက်တာနော်။ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ရအောင်လား။ ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပါ။ (ကျေးဇူးပြုပြီး ဖွင့်ပေးပါ။) ၅။ ဘူတာရုံအထိ သွားကြိုရမလား။ ဟင့်အင်းရပါတယ်။ တက္ကဆီနဲ့ သွားမှာမိလို့ ၆။ စတိုစံကဘယ်မှလဲ။ အခုအစည်းအဝေးခန်းမှာ မစုမိုတိုစံနဲ့စကားပြောနေတယ်။
Lesson 15 Grammar Posted on : 22/02/2015 Last updated : 10/06/2015 Category : Grammar သဒ္ဒါ
၁။ ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် ငြင်းဆိုခြင်း
すみません、ちょっと… တစ်ယောက် ယောက်ကတောင်းခံလာတဲ့ အကူအညီကို မပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွင် ယဉ်ကျေးစွာငြင်းသည့် ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ရှိတယ် (I have)
もって います ပိုင်ဆိုင်တယ်။ လက်ဝယ်ရှိတယ် ဆိုသောအဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးပါတယ်။ ဥပမာ။ 自転車(じてんしゃ)を
စက်ဘီး ရှိတယ်။ ၃။ —လို့မရဘူး
တစ်ခုခုကို မလုပ်ရဘူး။ လုပ်လို့မရဘူးလို့ တားမြစ်တဲ့အခါမှာသုံးသည်။ ဥပမာ ။ 歩(ある)いては
လမ်းလျှောက်လို့ မရဘူး။ (လမ်းမလျှာက်ရဘူး) ၄။ —လို့ရတယ်။
တစ်ခုခုကို လုပ်လို့ရတယ်။ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ 来(き)ても
၅။ —မှာ (နေရာပြပုဒ်)
ဂျပန်စာတွင် နေရာပြပုဒ် に
နှင့် で ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။
に ကိုလှုပ်ရှားမှုမပါသော ကြိယာနှင့်တွဲသုံးပြီး で ကိုလှုပ်ရှားမှု ပါဝင်သော ကြိယာဖြင့်သုံးသည်။ ဥပမာ ။ デパート(でぱーと)で
ကုန်တိုက်မှာ ဈေးဝယ်မယ်။ (လှုပ်ရှားမှုပါဝင်) 土曜日(どようび)
います。 စနေနေ့ အိမ်မှာရှိမယ်။ (လှုပ်ရှားမှုမပါဝင်)
၁။ ဓါတ်ပုံရိုတ်လို့ရလား။ ၂။ စန်တိုစုစံမှာ ကွန်ပြူတာရှိတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…いいえ、知(し)りません。 ５．マリア(まりあ)さんは …大阪(おおさか)に
၁။ ဒီ ကတလောက်ကိုယူလို့ရလား။ အင်း ရပါတယ်၊ ယူပါ။ ၂။ ဒီအဘိဓါဏ်ကိုငှါးလို့ရလား။ စိတ်မရှိပါနဲ့ သိပ်ပြီးတော့—။ အခုသုံးနေတယ်။ ၃။ ဒီမှာ ကစားလို့မရဘူး။ ဟုတ်ကဲ့။ KyiPhyu(plz visit my page)
၄။ မြို့နယ်ရုံးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိလား။ ဟင့်အင်းမသိဘူး။ ၅။ မာရီယာစံက ဘယ်မှာနေနေလဲ။ အိုဆာကာမှာ နေနေတယ်။ ၆။ ဝမ်းစံကလူပျိုလား။ ဟင့်အင်းလက်ထပ်ထား(နေ)တယ်။ ၇။ အလုပ်ကဘာလဲ။(ဘာလုပ်သလဲ) ဆရာပါ။ ဖူဂျီတက္ကသိုလ်မှာစာသင်နေတယ်။ အထူးပြုက？ ဂျပန်ရဲ့ အနုပညာပါ။
Lesson 16 Grammar ၁။ adj(နာမဝိသေသန) များကို て form ပြောင်းခြင်း 
い adj များကို て form ပြောင်းပုံ
い ကိုဖြုတ်၍ くて ပေါင်း い adj
な adj များကို て form ပြောင်းပုံ
၂။ verb ပြီးနောက် 
て form ကြိယာ၏နောက်တွင် “から” ကိုဆက်ခြင်းဖြင့် အဲဒီ verb ရဲ့ပြီးနောက်ဆိုတဲ့အ ဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Ⅴて +
ဥပမာ ။ たべてから、いきます。 စားပြီးမှာ သွားမယ်။
၁။ မနက်အပြေးလေ့ကျင့်ပြီး ရေချိုးပြီး ကုမ္ပဏီကိုသွားတယ်။ ၂။ ဖျော်ဖြေပွဲပြီးတဲ့အခါ စားသောက်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားခဲ့တယ်။ ၃။ အိုဆာကာက စားစရာက အရသာရှိတယ်။ ၄။ ဒီကွန်ပြူတာကပေါ့ပြီး သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
၁။ မနေ့က ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး စာအုပ်ငှါးပြီး အဲဒီနောက်သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ၂။ တက္ကသိုလ်အထိဘယ်လိုသွားမလဲ။ ကျိုတိုဘူတာကနေ နံပါတ် ၁၆ ဘတ်စ်ကားကိုစီးပြီး တက္ကသိုလ်ရှေ့မှာဆင်းတယ်။ ၃။ နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ။ အဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်မယ်။ ၄။ စန်တိုစုစံကဘယ်သူလဲ။ ဟိုအရပ်ရှည်ပြီး ဆံပင်အနက်ရောင်လူပါ။ ၅။ နာရာက ဘယ်လိုမြို့လဲ။ တိတ်ဆိပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ ၆။ ဟိုလူကဘယ်သူလဲ။ ခရီနာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ဖူဂျီတက္ကသိုလ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားပါ။
Lesson 17 Grammar ၁။ ကြိယာများကို ま形(けい) မှ ない形(けい)သို့ပြောင်းပုံ (形(けい)=form) 
အုပ်စⅠု၏ပြောင်းပုံကိုအောက်တွင်လေ့လာပါ။
ဥပမာနှင့် တွဲ၍ အောက်ကဇယားတွင်ကြည့်ပါ။
ကြိယာအုပ်စု ၁ ～い ます
すい ます ⇒ ～き ます
いき ます ⇒ いか
まち ます ⇒ ～び ます
よび ます ⇒ ～み ます
のみ ます ⇒ ～り ます
ます ⇒ はなさ
ます ⇒ いぞが
～し ます はなし
ない Page 56
အုပ်စⅡုမှာကြိယာများကို ます形(けい) မှ ない形(けい) ပြောင်းလိုလျှင် ます形(けい) မှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး ない ကိုထည့်ရုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ကြိယာအုပ်စု ၂
အုပ်စⅢုမှကြိယာများကို ます形(けい) မှ ない形(けい) သို့ပြောင်းလိုလျှင် き い သို့ပြောင်းပြီး し
ます ကို し
ます ကို こ
ဥပမာ။ ကြိယာအုပ်စု ၃ き
၂။ မလုပ်လို့မရဘူး (လုပ်ရမယ်) 
Ⅴない form မှ ない ကိုဖြုတ်ပြီး なければ Ⅴない form+ なければ
ဥပမာ ။ 朝(あさ)6 時(じ)に
မနက် ၆ နာရီမှာ မထရင် မဖြစ်ဘူး။ ၃။ မလုပ်ရန် အမိန့်ပေးခြင်း 
Ⅴない form ကို で Ⅴない form + で ဥပမာ ။ ここに
၄။ မလုပ်လို့လည်းရတယ် 
Ⅴない form မှ ない ကိုဖြုတ်ပြီး なくても Ⅴない form+ なくても ဥပမာ ။ 明日(あした)は
မနက်ဖန် မလာလည်းဘဲရတယ်။ ဝါကျ １．ここで
၁။ ဒီမှာ ဓါတ်ပုံမရိုတ်ပါနဲ့ (ဓါတ်ပုံရိုတ်လို့မရဘူး) ၂။ ပတ်စပို့ကိုပြရမယ်။ (မပြရင်မရဘူး ) ၃။ report ကိုမတင်ရင်လည်းရတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ １．そこに
…いいえ、2，3 日(にち) 飲(の)まないで ３．今晩(こんばん) 飲(の)みに …すみません。今日(きょう)は ですから、早(はや)く
၁။ အဲဒီမှာကားကိုမရပ်ပါနဲ့ စိတ်မရှိပါနဲ့။(တောင်းပန်ပါတယ်။) ၂။ ဆရာ အရက်သောက်လို့ရလား။ ဟင့်အင်း ၂ရက်၃ရက် မသောက်ပါနဲ့ ၃။ ဒီညသွားမသောက်ဘူးလား။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ ဒီနေ့အမျိုးသမီးနဲ့ ကတိ(ချိန်းထားတာ)ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်စောစောပြန်ရမယ်(မပြန်လို့မရဘူး) ၄။ report ကိုဘယ်နေ့အထိတင်ရင်ရမလဲ (မတင်ရင်မရဘူး) သောကြာနေ့အထိ တင်ပါ. ၅။ ခလေးလည်း ပိုက်ဆံပေးရမလား(မပေးရင်မရဘူးလား) ဟင့်အင်း မပေးလို့ရတယ်။
Lesson 18 Grammar ၁။ ます形(けい) ကို 辞書形(じしょけい) သို့ပြောင်းပုံ 
辞書形(じしょけい) ：ます ဖြင့်ဆုံးသောကြိယာ၏မူလပုံစံဖြစ်သော （～う、～く、～ぐ、 ～す、～つ、～ぶ、～む、～る）နှင့်ဆုံးသောကြိယာများဖြစ်သည်။ dictionary form, plain form ဟုလည်း ခေါ်သည်။
အုပ်စု Ⅰတွင် 辞書形(じしょけい)သို့ပြောင်းရန် ます形(けい)မှ ます ကိုဖြုတ်ပါ။ ကျန်နေသော စာလုံးနဲ့လိုက်ပြီး ပြောင်းပုံကကွဲပြားပါတယ်။ အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ပါ။
か い ます
か き ます
およ ぎ ます
はな し ます
た ち ます
よ び ます
はい り ます
အောက်မှ ဥပမာနှင့် တွဲ၍လေ့ကျင့်ပါ။ ဥပမာ။ ကြိယာအုပ်စု ၁ ます形(けい)
かい ます ⇒ かう かき ます ⇒ かく およぎ
အုပ်စု Ⅱတွင် 辞書形(じしょけい) သို့ပြောင်းရန် ます形(けい) မှ ます ကိုဖြုတ်၍ る
ကိုထည့်ပါ။ ဥပမာ။ ကြိယာအုပ်စု ၂ ます形(けい)
かり ます 
အုပ်စု Ⅲပြောင်းလဲပုံကိုပုံသေမှတ်ပါ။ ဥပမာ။ ကြိယာအုပ်စု ၃ ます形(けい)
၂။ —လုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်တတ်တယ် 
辞書形(じしょけい)※ ရဲ့နောက်မှာ ことが Ⅴことが できます ဥပမာ ။ たべる ⇒ たべることが စားတယ် ⇒
၃။ —မလုပ်ခင် 
辞書形(じしょけい) ရဲ့နောက်မှာ まえに ကိုထည့်ပေးပါ။ Ⅴまえに ဥပမာ ။ いく
၁။ မီလာစံခန်းဂျိ ကိုဖတ်တတ်လား။ ၂။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဝါသနာက ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ဖြစ်တယ်။ ၃။ မအိပ်ခင် နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ရေးတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းများ
…すみませんが、現金(げんきん)で KyiPhyu(plz visit my page)
３年(ねん)まえに、結婚(けっこん)しました。 ၁။ နှင်းလျှောစီးတတ်လား။ ဟုတ်ကဲ့ စီးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မတော်ဘူး။ ၂။ မာရီယာစံ ကွန်ပြူတာ သုံးတတ်လား။ ဟင့်အင်း မသုံးတတ်ဘူး။ ၃။ အိုဆာကာရဲတိုက်က ဘယ်နှစ်နာရီအထိ လေ့လာလို့ရလဲ။ ၅ နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ကဒ်နဲ့ပေးလို့ရလား။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ လက်ငင်းငွေနဲ့ပေးချေပါ။ ၅။ ဝါသနာကဘာလဲ။ (ဘာကိုဝါသနာပါလဲ) နာရီအဟောင်း စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ ဂျပန်ခလေးများဟာ ကျောင်းမဝင်ခင် (ကျောင်းမထားခင်)မှာ ဟီရဂနကိုကျက်မှတ်ထားရလား။ ဟင့်အင်း မကျက်မှတ်ထား လည်းရတယ်။ ၇။ ထမင်းမစားခင် ဒီဆေးကိုသောက်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ (နားလည်ပါပြီ) ၈။ ဘယ်တုန်းက လက်ထပ်ခဲ့သလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
Lesson 19 Grammar ၁။ လုပ်ဖူးတယ်၊ သွားဖူးတယ် 
た形(けい) ကြိယာရဲ့နောက်မှာ ことが Ⅴた＋ことが ဥပမာ ။
いく ⇒ いったことが သွားတယ် ⇒ သွားဖူးတယ် 
ကြိယာများကို た形(けい)သို့ပြောင်းပုံသည် て形(けい)သို့ပြောင်းပုံနှင့် အတူတူဖြစ်သောကြောင့် အခန်း၁၄သဒ္ဒါတွင် လေ့လာပါရန်။ ၂။ —လိုက်
た形(けい) ကြိယာရဲ့နောက်မှာ り ကိုထည့်ပေးပါ။ Ⅴた＋り ဥပမာ ။ いったり(သွားလိုက်–)
いく ⇒ たべる
たべたり(စားလိုက—်)
၃။ —ဖြစ်လာတယ် 
い adj မှ い ကိုဖြုတ်ပြီး く
な adj/noun ရဲ့နောက်မှာ ဒီအတိုင်း に い adj
な adj/ noun ⇒
なります ကိုထည့်ပါ။ なります ကိုထည့်ပါ။
ဥပမာ ။ さむい（い adj） ⇒
အေးသော ⇒ အေးလာပြီနော် 上手(じょうず)（な adj）⇒ 上手(じょうず)に
တော်သော ⇒ တော်လာပြီ 先生(せんせい)（noun） ⇒ 先生(せんせい)に
ဆရာ ⇒ ဆရာဖြစ်လာတယ်
たり します。 ３．これから
၁။ ဂျပန်နပန်းကို ကြည့်ဖူးလား။ ၂။ အားလပ်ရက်မှာ တင်းနစ်ကစားလိုက်၊ လမ်းလျှောက်လိုက် လုပ်တယ်။ ၃။ အခုကစပြီး တဖြေးဖြေးပူလာတော့မယ်။
したいです。 Page 65
၁။ ဟိုကိုင်းဒိုကိုသွား (ရောက်)ဖူးလား။ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခေါက်သွား(ရောက်)ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကသူငယ်ချင်းနဲ့သွားခဲ့တယ်။ ၂။ မြင်းစီးဖူးလား။ ဟင့်အင်း တစ်ခေါက်မှ မစီးဖူးဘူး။ ဆက်ဆက် စီးကြည့်ချ င်တယ်။ ၃။ နွေရာသီပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ ကျိုတိုကဘုရားကျောင်းနဲ့ နတ်ဘုရားကျောင်းတွေကြည့်လိုက်၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ပါတီလုပ်လိုက် လုပ်ခဲ့တယ်။ ၄။ ဂျပန်မှာ ဘာလုပ်ချင်သလဲ။ခရီးသွားလိုက်၊ ဂျပန်ရေနွေး (green tea)ထည့်တာ လေ့လာလိုက်လုပ်ချင်တယ်။ ၅။ ခန္တာကိုယ်ရဲ့ အခြေအနေကဘယ်လို လဲ။ ကျေးဇူးကြောင့် ကောင်းလာပါပြီ။ ၆။ ဂျပန်စကားတော်လာပြီနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး (အများကြီးလိုပါသေးတယ် ) ၇။ တဲလဲစာကျန်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
Lesson 20 Grammar Polite form to Plain form
noun じゃ ありません
い adj です
な adj です
ယဉ်ကျေးသောအသုံးအနှုန်း ⇒ များသောအားဖြင့်အလုပ်တွင်းမှအထက်လူကြီးနှင့် ရိုသေစွာပြော ဆိုဆက်ဆံရမည့်သူများကို အဓိကထားပြောဆိုသောအသုံးအနှုန်း။
ရိုးရိုးအသုံးအနှုန်း ⇒ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း၊ မိသားစုအချင်းချင်း၊ မိမိထက်ငယ် ရွယ်သူများနှင့် တရင်းတနှီးဆက်ဆံရမည့်သူများခြားပြောသောအသုံးအနှုန်း။ ဝါကျ
၁။ စန်တိုစုစံကပါတီကိုမလာခဲ့ဘူး။ ၂။ ဂျပန်ကကုန်ဈေးနှုန်ကြီးတယ်။ ၃။ အိုခီနာဝါရဲ့ ပင်လယ်ကလှခဲ့တယ်။ ၄။ ဒီနေ့ကျွန်တော့်မွေးနေ့ပါ။ ဥပမာစာကြောင်းများ
１．アイスクリ(あいすくり)ーム(む)［を］たべる？ …うん、食(た)べる。 ２．そこに
７．辞書(じしょ)［を］持(も)って …ううん、持(も)って KyiPhyu(plz visit my page)
［い］ない。 Page 68
၁။ ရေခဲမုန့်စားမလား။ အင်းစားမယ်။ ၂။ အဲဒီမှာ ကပ်ကျေးရှိလား။ ဟင့်အင်း မရှိဘူး။ ၃။ မနေ့က ခီမူရာစံနဲ့တွေ့ခဲ့သလား။ ဟင်းအင်း မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ၄။ မနက်ဖန် အားလုံးနဲ့ ကျိုတိုမသွားဘူးလား။ အင်းကောင်းသားဘဲ။ ၅။ အဲဒီမဆလာဟင်းအရသာရှိလား။ အင်းစပ်ပေမဲ့လဲအရသာရှိတယ်။ ၆။ အခုအားလား။ အင်း–အားတယ်။ ဘာလဲ။ ၇။ အဘိဓါဏ်ရှိလား။ ဟင့်အင်းမရှိဘူး။
Lesson 21 Grammar ၁။ —လို့ထင်တယ် 
မိမိ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောခြင်း ～と 思(おも)います ဥပမာ ။ いった
思(おも)います ရဲ့ရှေ့မှာ ရိုးရိုးပုံစ(ံ plain from) ကြိယာ၊ နာမဝိသေသနနဲ့ နာမ်များသာ
၂။ —လို့ပြောတယ် 
တစ်ယောက်ယောက်က ပြောတာကို ပြန်လည်ကိုးကားပြောခြင်း ～と 言(い)いました ဥပမာ ။ おいしいと
言(い)いました ရဲ့ရှေ့မှာ ရိုးရိုးပုံစ(ံ plain form) ကြိယာ၊ နာမဝိသေသနနဲ့ နာမ်များသာ
၃။ —လုပ်ကြည့်ရအောင် 
တစ်ခုခုကို လုပ်ကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောခြင်း Ⅴて＋
ဥပမာ ။ いって
သွားကြည့်ရမယ် (သို့) သွားမကြည့်ရင်— 食(た)べて
စားကြည့်ရမယ် (သို့) စားမကြည့်ရင်— 
ကြိယာ て形(けい) ရဲ့နောက်မှာ みないと ကိုထည့်ပါ။
～でしょう？ ဥပမာ ။ 遊(あそ)びに行(い)く
ကစားဖို့မသွားဘူးလား (သို့) ကစားဖို့သွားမယ်မဟုတ်လား 高(たか)い
ဈေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။  
စကားရဲ့နောက်ဆုံးတွင် —မဟုတ်ဘူးလား၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား လို့ပြောခြင်း でしょう？၏ရှေ့တွင်လိုက်သော ရိုးရိုးပုံစ(ံ plain form) ကြိယာ၊ နာမဝိသေသနနဲ့ နာမ်များ သာလိုက်လေ့ ရှိပါသည်။
၁။ မနက်ဖန် မိုးရွာမယ်လို့ထင်တယ်။ ၂။ ဝန်ကြီးချုပ်က နောက်လအမေရိကကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်။
コピ(こぴ)ーが 多(おお)いと 京都(きょうと)で
၁။ အလုပ်နဲ့မိသားစုနဲ့ ဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲ။ နှစ်ခုစလုံး အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ ၂။ ဂျပန်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၃။ မီလာစံကဘယ်မှာလဲ။ အစည်းအဝေးခန်းမှာ ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ၄။ မီလာစံဒီသတင်းကို သိနေလား။ ဟင့်အင်းမသိလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်။ မီလာစံ အလုပ်နဲ့ခရီးသွားနေလို့။ ၅။ တဲလဲစာကျန်ကအိပ်ပြီလား။ ဟုတ်ကဲ့အိပ်ပြီလို့ထင်တယ်။ ၆။ ထမင်းမစားခင် ဆုတောင်းလား။ ဟင့်အင်းမတောင်းပေမဲ「့いただきます」လို့ပြောတယ်။ ၇။ အစည်းအဝေးမှာ တစ်ခုခုထင်မြင်ချက်ပြောခဲ့လား။ ဟုတ်ကဲ့ အလဟသ မိတ္တူစာရွတ်တွေများတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ၈။ ၇ လပိုင်း ကျိုတိုမှာ ပွဲတော်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အင်းရှိတယ်။
Lesson 22 Grammar ၁။ —လုပ်တဲ့ဟာ(အရာ) ဖြစ်တယ် 
ကြိယာနှင့်နာမ်ကိုတွဲ၍ပြောခြင်း plain Verb+ Noun です ဥပမာ ။ わたしが
ကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟင်းပါ။ あの 歩(ある)いて
ဟိုကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူက ဘယ်သူလဲ။ 
ကြိယာ၏ ရိုးရိုးပုံစံအတိတ်ကာလနှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလများ၏နောက်တွင် နာမ်ကိုထည့်ပေးပါ။
１．これは ２．あそこに ３．きのう
၁။ ဒီဟာက မီလာစံလုပ်တဲ့ကိတ်မုန့်ပါ။ ၂။ ဟိုမှာရှိတဲ့သူက မီလာစံပါ။ ၃။ မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးကိုမေ့သွားပြီ။ ၄။ ဈေးဝယ်သွားမဲ့အချိန်မရှိဘူး။
す。 …そうですか。すごいですね。 ２．カリナ(かりな)さんが …あれです。あの ３．あの
ですか。 …大阪城(おおさかじょう)です。 ５．木村(きむら)さんと
…すみません。今晩(こんばん)は ちょっと そく)が
၁။ ဒီဟာဂရိတ်ဝေါမှာ ရိုတ်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံပါ။ ဟုတ်လား၊ အံသြစရာဘဲနော်(ကောင်းလိုက်တာနော်) ၂။ ခရီနာစံဆွဲတဲ့ပ(ုံ ပန်းချီ)က ဘယ်ဟာလဲ။ ဟိုဟာပါ။ ဟိုကပင်လယ်ပုံပန်းချီပါ။ ၃။ ဟိုကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။ ခီမူလာစံဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ယမဓစံ အမျိုးသမီးနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့တာဘယ်မှာလဲ။ အိုဆာကာရဲတိုက်ပါ။ ၅။ ခီမူရာစံနဲ့သွားတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကဘယ်လိုလဲ။ အရမ်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၆။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ မနေ့ကဝယ်တဲ့ထီးပျောက်သွားလို့ပါ။ ၇။ ဘယ်လိုအိမ်ကိုလိုချင်သလဲ။ ခြံအကျယ်ကြီးပါတဲ့အိမ်ကို လိုချင်ပါတယ်။ ၈။ ဒီညသွားသောက်ရအာင်လား။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒီညသူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဂတိရှိလို့ပါ။
Lesson 23 Grammar ၁။ —တဲ့အခါ/—မှာ
Ⅴ辞書形(じしょけい)/Ⅴた形(けい)/ adj/noun の ဥပမာ ။ そとへ
အပြင်ကိုသွားတဲ့အခါ၊ ထီးယူသွားမယ်။ 寂(さび)しい
အထီးကျန်တဲ့အခါ၊ မိသားစုထံသို့ဖုန်းဆက်မယ်။ 誕生日(たんじょうび)
た。 မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်အများကြီးရခဲ့တယ်။  
ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်နေတုန်း နောက်တစ်ခုကိုလည်းလုပ်နေ Ⅴ辞書形(じしょけい)(plain verb)、Ⅴた形(けい)、adj ရဲ့နောက်မှာ とき ကိုဒီအတိုင်းထည့်ပါ။ နာမ်ရဲ့ နောက်မှာ の ခံပြီးထည့်ပါ။
၂။ —ဖြစ်ရင်/ —လုပ်ရင် 
တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ နောက်တစ်ခုကလည်းဖြစ်လာတယ်။ Ⅴ辞書形(じしょけい) ဥပမာ ။ ここに
ဒီကိုလက်နဲ့ထိရင် ရေထွက်လာလိမ့်မယ်။ 
ရိုးရိုးပုံစံကြိယာရဲ့နောက်တွင် と ကိုထည့်ပါ။
၁။ စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်ကိုငှါးတဲ့အခါ ကဒ်လိုလား။ ၂။ ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ရင် ပိုက်ဆံအကြွေထွက်လာမယ်။
…そうですね。野球(やきゅう)の 試合(しあい)が ２．冷蔵庫(れいぞうこ)に …近(ちか)くの
か。 …すみません。忘(わす)れました。 ４．サントス(さんとす)さんは …夏休(なつやす)みや
(か)います。 日本(にほん)のは ５．それは
၁။ မကြာခဏ တီဗီကြည့်လား။ ဟုတ်တယ် base ball ရှိတဲ့အခါ ကြည့်တယ်။ ၂။ ရေခဲသတ္တာမှာ ဘာမှမရှိတဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ အနားက စားသောက်ဆိုင်ကို တစ်ခုခုစားဖို့သွားမယ်။ ၃။ အစည်းအဝေးခန်းကို ထွက်တဲ့အခါ အဲယားကွန်းပိတ်ခဲ့လား။ တောင်းပန်ပါတယ် မေ့ခဲ့တယ်။ ၄။ စန်တိုစုစံကဘယ်မှာ အင်ကျီနဲ့ဖိနပ်တွေကိုဝယ်လဲ။ နွေရာသီပိတ်ရက်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး နိုင်ငံကိုပြန်တဲ့အခါဝယ်တယ်။ ၅။ ဒါဘာလဲ။
ကျန်းမာရေး လက်ဘက်ခြောက်ပါ။ နေမကောင်းတဲ့အခါ သောက်တယ်။ ၆။ အားတဲ့အခါ အိမ်ကိုအလည်မလာဘူးလား(အလည်လာပါ)။ အင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၇။ ကျောင်းသားဖြစ်တုန်းက (ကျောင်းသားဘဝတုန်းက) အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သလား။ အင်း တခါတလေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ၈။ အသံကတိုးတယ်နော်။ ဒီခလုတ်ကို ညာဘက်လှည့်ရင်ကျ ယ်လာလိမ့်မယ်။ ၉။ တဆိတ်လောက် မြို့နယ်ရုံးကဘယ်မှာလဲ။ ဒီလမ်းကိုတည့်တည့်သွားရင် ညာဘက်မှာရှိတယ်။
Lesson 24 Grammar ၁။ သူများကိုပေးတယ်
～あげました Ⅴて あげました ဥပမာ ။ 帽(ぼう)子(し)を
～くれました Ⅴて くれました ဥပမာ ။ おばあさんが
အဖွားက မုန့်ပေးတယ်။ カリナ(かりな)さんが
ခရီနာစံက စာအုပ်ကို ငှါးပေးတယ်။
～もらいました Ⅴて もらいました ဥပမာ ။ この本(ほん)を KyiPhyu(plz visit my page)
ဒီစာအုပ်ကို မီလာစံထံမှ ရခဲ့တယ်။ ワン(わん)さんに
ဝမ်းစံက ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဝါကျ
၁။ စတိုစံက ကျွန်တော့်ကို ခရစ်စမတ်ကဒ်ပေးတယ်။ ၂။ ကျွန်တော် ခီမူရာစံကို စာအုပ်ငှါးပေးတယ်။ ၃။ ကျွန်တော် ယမဓစံဆီက ဆေးရုံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ယူခဲ့တယ်။ (ယမဓစံက ဆေးရုံဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောပြခဲ့တယ်။) ၄။ အမေက ကျွန်တော့ကို ဆွယ်တာအင်ကျီကို ပို့ပေးခဲ့တယ်။
す。 ３．太郎君(たろうくん)は て
၁။ တာရိုခွန်းက အဖွားကို သဘောကျလား(ကြိုက်လား) ဟုတ်တယ် သဘောကျတယ် အဖွားကအမြဲတမ်း မုန့်ပေးတယ်။ ၂။ အရသာရှိတဲ့ ဝိုင်နော်။ အင်း စတိုစံကပေးခဲ့တာ။ ပြင်သစ်က ဝိုင်ပါ။ ၃။ တရိုခွန်းက အမေများနေ့မှာ အမေကိုဘာလုပ်ပေးမလဲ။ ပီယာနို တီးပေးမယ်။ ၄။ မီလာစံ မနေ့က ပါတီရဲ့ဟင်းတွေအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ချက်ခဲ့တာလား။ ဟင့်အင်း ဝမ်းစံဆီက အကူအညီယူခဲ့တာပါ။ (ဝမ်းစံကကူညီပေးခဲ့တာပါ) ၅။ ရထားနဲ့ သွားခဲ့တာလား။ ဟင့်အင်း ယမဓစံက ကားနဲ့ပို့ပေးခဲ့တယ်။
Lesson 25 Grammar ၁။ ဖြစ်ခဲ့ရင် 
た形(けい) ကြိယာရဲ့နောက်မှာ -ら ကိုထည့်ပါ။ ～たら ဥပမာ ။ 晴(は)れたら、遊(あそ)びに行(い)きます。 ရာသီဥတုသာယာခဲ့ရင် အလည်သွားမယ်။
၂။ လည်းဘဲ/ တောင်မှ 
နာမဝိသေသန၏နောက်တွင်ထား၍အသုံးများသည်။ な adj/ noun များ၏နောက်တွင် でも ဖြင့်သုံးသည်။ ～ても/～でも ဥပမာ ။ いくら遠(とお)くても、行(い)きます。（い adj） ဘယ်လောက်ဝေးလည်းဘဲ သွားမယ်။ 嫌(きら)いでも、食(た)べます。（な adj） မကြိုက်လည်း စားမယ်။ 病気でも、行きます・（noun） နေမကောင်းလည်း သွားမယ်။
၁။ မိုးရွာရင်အပြင်မသွားဘူး။ ၂။ မိုးရွာလည်းဘဲ အပြင်သွားမယ်။
よ。 …そうですか。安(やす)かったら、買(か)いたいです。 ４．あしたまでに
…ええ、男(おとこ)の KyiPhyu(plz visit my page)
子(こ)だったら、「ひかる」です。 Page 85
…いいえ、1 年(ねん)ぐらい ７．先生(せんせい)、この …辞書(じしょ)を
です。 ၁။ တကယ်လို့ ယန်းသန်းတစ်ရာရှိခဲ့ရင် ဘာလုပ်ချင်လဲ။ ကွန်ပြူတာ ဆော့ဝဲယာ ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ချင်တယ်။ ၂။ ချိန်းထားတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းမလာခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ချက်ခြင်းပြန်မယ်။ ၃။ ဟိုဖိနပ်ဆိုင်အသစ်က ဖိနပ်ကောင်းကောင်းအများကြီးရှိတယ်လေ။ ဟုတ်လား ဈေးသက်သာရင်တော့ဝယ်ချင်တယ်။ ၄။ မနက်ဖန်အထိ report ကိုမတင်ရင် မရဘူးလား။ ဟင့်အင်း အဆင်မပြေရင် သောကြာနေ့မှတင်ပါ။ ၅။ ခလေးရဲ့နာမည်ကို စဉ်းစားပြီးပြီလား။ အင်း ယောက်ျားလေးဆိုရင် ဟီကာရု။
မိန်းခလေးဆိုရင် အာယ။ ၆။ တက္ကသိုလ်ပြီးရင် ချက်ခြင်းအလုပ်လုပ်မှာလား။ ဟင့်အင်း ၁ နှစ်လောက် နိုင်ငံအမျိုးမျိုးကိုခရီးသွားချင်တယ်။ ၇။ ဆရာ ဒီစာလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုနားမလည်ဘူး။ အဘိဓါဏ်ကြည့်ခဲ့လား။ ဟုတ်ကဲ့ ကြည့်ပေမဲ့လည်း နားမလည်ဘူး။ ၈။ ဂျပန်လူမျိုးတွေက အုပ်စုလိုက်ခရီးသွားရတာကိုကြိုက်တယ်နော်။ ဟုတ်တယ်။ ဈေးပေါလို့။ ဘယ်လောက်ဘဲဈေးပေါပါစေ ကျွန်တောက အုပ်စုလိုက်ခရီးသွားရတာကို မုန်းတယ်(မကြိုက်ဘူး)
အုပ်စု ၁ ကြိယာများ ပုံစံပြောင်းပုံ အုပ်စု ၁ ကြိယာများနှင့် ပုံစံပြောင်းပုံ 
အုပ်စု ၁ တွင်ပါဝင်သော ကြိယာများသည် ~ku,~gu,~su,~tsu,~nu,~bu,~mu,~ru,~u (~く、 ~ぐ、~す、~つ、~ぬ、~ぶ、~む、~る、~う) ဖြင့်ဆုံးပါသည်။
သူတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲပုံများလည်း အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို အောက်ပါဇယားဖြင့် လေ့လာပါ။ 1.～ku ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
ku + imasu = ~kimasu
⇒ ku မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
te form ပြောင်းပုံ
~ku ⇒ ku + ite = ~ite
⇒ ku မှ ku ကိုဖြုတ် ite ပေါင်း
aruku ⇒ aruite
nai form ပြောင်းပုံ
⇒ ku မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
ku +anai = ~ka nai aruka nai
aru ku 歩 ( ある ) く
tsu ku 着 ( つ ) く
tsu ku 付 ( つ ) く
kawa ku 乾 ( かわ ) く
hatara ku 働 ( はたら ) く
ki ku 聞 ( き ) く
ki ku 効 ( き ) く
mu ku 剥 ( む ) く
mu ku 向 ( む ) く
ma ku 巻 ( ま ) く
ka ku 書 ( か ) く
fu ku 吹 ( ふ ) く
sa ku 咲 ( さ ) く
wa ku 沸 ( わ ) く
na ku 泣 ( な ) く
na ku 鳴 ( な ) く
ka ku 描 ( か ) く
hi ku 引 ( ひ ) く
todo ku 届 ( とど ) く
ရောက်သည် (စာ၊ ပါဆယ်)
shi ku 敷 ( し ) く
hira ku 開 ( ひら ) く
ဖွင့်သည် (ဆိုင်၊ တံခါး)
ya ku 焼 ( や ) く
ကင်သည် (မီးဖြင့် )
o ku 置 ( お ) く
tsuzu ku 続 ( つづ ) く
ဆက်သည်။ အစဉ်အဆက် ဖြစ်သည်
miga ku 磨 ( みが ) く
ha ku 履 ( は ) く
ဖိနပ်စီးသည်။ ဘောင်းဘီ၊ ပုဆိုးဝတ်သည်
ugo ku 動 ( うご ) く
a ku 開 ( あ ) く
ပွင့်သည် (တံခါး၊ အဖုံး )
kigatsu ku 気 ( き ) が付 ( つ ) く
*i ku * 行 ( い ) く
tsuretei ku 連 ( つ ) れて行 ( い ) く
※ခြွင်းချက်။ ။ iku いく တစ်ခုတည်း te form တွင် itte いって သို့ပြောင်းပါသည်။
2.～gu ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
gu + imasu = ~gimasu
⇒ gu မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~gu ⇒ gu + ide = ~ide
⇒ gu မှ gu ကိုဖြုတ် ide ပေါင်း
oyogu ⇒ oyoi de
⇒ gu မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
gu +anai = ~ga nai oyoga nai
3.～su ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
su + imasu = ~simasu
⇒ su မှ u ကိုဖြုတ် imasu
~su ⇒ su + shite = ~shite
⇒ su မှ su ကိုဖြုတ် shite
sagasu ⇒ sagashi te
ပေါင်း nai form ပြောင်းပုံ
⇒ su မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
su +anai = ~sa nai sagasa nai
ချွန်တက်သော အရာဖြင့် ထိုးသည်
ပြန်ပေးသည်။ ပြန်အပ်သည်။ ပြန်ပို့သည်
ခဲဖျက်ဖြင့် ဖျက်သည်။ မီးပိတ်သည်။ တီဗီပိတ်သည်
ချီးသည်။ ချေးငှါးသည် lend
4.～tsu ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
tsu + imasu = ~
⇒ tsu မှ su ကိုဖြုတ် imasu
~tsu ⇒ tsu + tte = ~tte( って )
⇒ tsu မှ tsu ကိုဖြုတ် tte ပေါင်း
motsu ⇒ motte （かって）
⇒ tsu မှ su ကိုဖြုတ်anai
tsu +anai = ~ ta nai mota nai
ka tsu 勝(か)つ
mo tsu 持(も)つ
ရှိသည်။ ပိုင်သည်။ ကိုင်ထားသည်
ta tsu 立(た)つ
ma tsu 待(ま)つ
u tsu 打(う)つ
စာရိုတ်သည်။ ထုရိုတ်သည်။ ရိုတ်နှက်သည်
ta tsu 経(た)つ
yakunita tsu 役(やく)に立(た)つ
soda tsu 育(そだ)つ
5.～nu ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
⇒ nu မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~nu ⇒ nu + nde = ~nde( んで )
⇒ nu မှ nu ကိုဖြုတ် nde ပေါင်း
shinu ⇒ shin de （しんで）
⇒ nu မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
nu + imasu = ~ nimasu shini masu
nu +anai = ~ na nai shina nai
6.～bu ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
⇒ bu မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~bu ⇒ bu + nde = ~nde( んで )
⇒ bu မှ bu ကိုဖြုတ် nde ပေါင်း
manabu ⇒ manan de （まなんで）
masu form ပြောင်းပုံ
⇒ bu မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
bu + imasu = ~bimasu manabi masu
bu +anai = ~ba nai manaba nai
ချီနှောင်သည် (ကြိုးဖြင့် )
7.～mu ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
mu + imasu = ~ mimasu
⇒ mu မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~mu ⇒ mu + nde = ~nde( んで )
⇒ mu မှ mu ကိုဖြုတ် nde ပေါင်း
yasumu ⇒ yasun de （休んで）
⇒ mu မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
mu +anai = ~ ma nai yasuma nai
yasu mu 休(やす)む
su mu 住(す)む
yo mu 読(よ)む
ya mu 止(や)む
ရပ်စဲသည်။ ရပ်နားသည်။ မိုးတိပ်သည်
fu mu 踏(ふ)む
moushiko mu 申(もう)し込(こ)む
ka mu 噛(か)む
tsutsu mu 包(つつ)む
tanoshi mu 楽(たの)しむ
fuku mu 含(ふく)む
kako mu 囲(かこ)む
nozo mu 望(のぞ)む
su mu 済(す)む
tano mu 頼(たの)む
no mu 飲(の)む
naya mu 悩(なや)む
8.～ru ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
⇒ ru မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~ru ⇒ ru + tte = ~tte( って )
⇒ ru မှ ru ကိုဖြုတ် tte ပေါင်း
okuru ⇒ okutte （おくって）
⇒ ru မှ u ကိုဖြုတ်anai ပေါင်း
ru + imasu = ~rimasu okuri masu
ru +anai = ~ra nai okura nai
ဆောင့်သည်။ တိုက်သည်။ တိုက်မိသည်
る ya ru
စီးသည် (ကား၊ ရထား၊ ယာဉ်)
ကာကွယ်သည်။ ထိမ်းသိမ်း စောက်ရှောက်သည်
ပြန်သည်။ ပြန်ရောက်သည်။ ပြန်လှည့်လာသည်
ကောင်းလာသည်။ ပကတိအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာသည်
ပို့သည် (ပစ္စည်း၊ လူ)
9.～u ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
u + imasu = ~imasu
⇒ u မှ u ကိုဖြုတ် imasu ပေါင်း
~u ⇒ u + tte = ~tte( って )
⇒ u မှ u ကိုဖြုတ် tte ပေါင်း
a u ⇒ atte （あって）
u + wa nai = ~wa nai
⇒ u မှ u ကိုဖြုတ် wa nai ပေါင်း
မူးသည် (အရက်၊ ကား၊ သင်္ဘော)
う ka u
သွားလိုက် လာလိုက် လုပ်သည်။ ကျောင်းတက်သည်
အုပ်စု ၂ ကြိယာများ ပုံစံပြောင်းပုံ အုပ်စု ၂ ကြိယာများနှင့် ပုံစံပြောင်းပုံ 
အုပ်စု ၂ ကြိယာများသည် ~iru, ~eru ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများဖြစ်သည်။
ပုံစံပြောင်းပုံကို အောက်ပါဇယားများတွင် လေ့လာပါ။ 1.~iru ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
iru + masu = ~ imasu
⇒ru ကိုဖြုတ် masu ထည့်
iru + te = ~ ite
⇒ru ကိုဖြုတ် te ထည့်
iru + nai = ~ i nai
⇒ru ကိုဖြုတ် nai ထည့်
ဆင်းသည် (ကား၊ ရထား၊ ယာဉ်ပေါ်မှ)
ပိတ်သည် (ဆိုင်၊ တံခါး)
လုပ်တတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရသည်
2.~eru ဖြင့်ဆုံးသော ကြိယာများ masu form ပြောင်းပုံ
eru + masu = ~ emasu tabemasu eru + te = ~ ete tabete eru + nai = ~enai tabe nai
ထောက်သည်။ ခုသည်။ ပံပိုးသည်
ထည့်သွင်းသည်။ (မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြခြင်း)
အုပ်စု ၃ ကြိယာများ ပုံစံပြောင်းပုံ အုပ်စု ၃ ကြိယာများနှင့် ပုံစံပြောင်းပုံ 
အုပ်စု ၃ ကြိယာတွင် kuru くる နှင့် suru する ၂ မျိုးသာ ရှိပါသည်။
၄င်းတို့ရဲ့ ပြောင်းပုံများကို ပုံသေမှတ်ထားပါ။ masu form ပြောင်းပုံ
uru + imasu = ~ imasu
uru + ite = ~ ite
suru ⇒ shi nai အထက်ပါ အတိုင်း ပုံသေမှတ်ပါ။
“い”adj い adj များ ပုံစံပြောင်းပုံ い adj
い ဖြင့်ဆုံးသော adj
い adj အငြင်း
い ကိုဖြုတ် ＋くな
おいしい ⇒ おいしい＋くな い ＝ おいしくない
い ထည့် い adj အတိတ်
い ကိုဖြုတ် ＋かっ た ထည့်
おいしい ⇒ おいしい＋かっ た ＝ おいしかった おいしい ⇒ おいしい＋くな かった ＝ おいしくなかった
い adj များ 大(おお)きい
လွန်ကဲသော။ ပိုကဲသော။ ချီးမွမ်းစရာကောင်းသော
ပုံမှန်မဟုတ်သော။ ရယ်စရာ ကောင်းသော။ တစ်မျိုး ထူးဆန်းသော
ရွံစရာကောင်းသော။ မအီမသာရှိသော။ အန်ချင်သော
အရည်ပြစ်သော။ အရောင်ရင့်သော။ အရသာလေးသော
မတရားသော။ ရက်စက်သော။ ပြင်းထန်သော
“な”adj な adj များ ပုံစံပြောင်းပုံ な adj
な ဖြင့်ဆုံးသော adj
な adj အငြင်း
な ကိုဖြုတ် ＋じゃな
きれいな ⇒ きれいな＋じゃ ない ＝ きれいじゃない
い ထည့် な adj အတိတ်
な ကိုဖြုတ် ＋だった ထည့်
きれいな ⇒ きれいな＋だっ た ＝ きれいだった きれいな ⇒ きれいな＋じゃ なかった ＝ きれいじゃなか った
な adj များ ハンサムな
ထူးဆန်းသော။ အံသြစရာ ကောင်းသော
အာရုံစူးစိုက်သော။ ဝိရိယာရှိသော။ အားထက်သန်သော
Lesson 26 Grammar １．~んです 
「~です」（ဖြစ်သည်）နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ 「~んです」ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ပို၍ရင်းနှီးမှုရှိစေပြီး ယဉ်ကျေးသော စကားပြောပုံစံကို ဖြစ်စေပါသည်။ အဓိပ္ပါယ် ⇒
ဥပမာ ⇒ 明日(あした)から旅行(りょこう)なんです。မနက်ဖန်ကစပြီး ခရီးသွားမှာလေ။ အသုံးပြုပုံ (verb) る-動詞(どうし)、 ない-動詞(どうし)、 た-動詞(どうし)、 たい-動詞(どうし)
行(い)くんで す 行(い)かない です 行(い)ったん です 行(い)きたい んです
(adj) な形容詞(けいようし) (な ကကကကကကကကကကကကကကကကကက
ယဉ်ကျေးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် အဓိပ္ပါယ် ⇒ လုပ်ပေးလို့မရဘူးလား/ လုပ်ပေးပါလား ဥပမာ ⇒ 連絡(れんらく)していただけませんか。ဆက်သွယ်ပေးလို့ မရဘူးလား (ဆက်သွယ်ပေးပါ) အသုံးပြုပုံ 名詞(めいし) (noun)
1. あしたから旅行(りょこう)なんです。 2. 生(い)け花(ばな)を習(なら)いたいんですが、いい先生(せんせい)を紹介(しょうか い)していただけませんか。 ၁။ မနက်ဖန်ကစပြီး ခရီးသွားမှာလေ။ ၂။ ဂျပန်ပန်းအလှပြင်ခြင်းကို သင်ယူချင်လို့ ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမလား။ ဥပမာစာကြောင်း
1.渡辺(わたなべ)さんは時々(ときどき)大阪弁(おおさかべん)を使(つか)いますね。 大阪(おおさか)に住(す)んでいたんですか。 …ええ、15 歳(さい)まで大阪(おおさか)に住(す)んでいました。 2.おもしろいデザインの靴(くつ)ですね。どこで買(か)ったんですか。 …エドヤストアで買(か)いました。スペインの靴(くつ)です。
3.どうして遅(おく)れたんですか。 …バスが来(こ)なかったんです。 4.運動会(うんどうかい)に参加(さんか)しますか。 …いいえ、参加(さんか)しません。スポーツはあまり好(す)きじゃないんです。 5.日本語(にほんご)で手紙(てがみ)を書(か)いたんですが、ちょっと見(み)ていただけませんか。 …いいですよ。 6.NHK を見学(けんがく)したいんですが、どうしたらいいですか。 …直接(ちょくせつ)行(い)ったらいいですよ。いつでも見(み)ることができます。 ၁။ ဝါတနာဘဲစံက တခါတလေ အိုဆာကာစကားကို သုံးတယ်နော်။ အိုဆာကာမှာ နေဘူးလို့လား။ အင်း ၁၅နှစ်အထိ အိုဆာကာမှာ နေခဲ့တယ်။ ၂။ စိတ်ဝင်စားစရားကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖိနပ်နော်။ ဘယ်မှာ ဝယ်ခဲ့တာလဲ။ အဲဒိုယာစတိုးမှာ ဝယ်ခဲ့တာ။ စပိန်လုပ် ဖိနပ်လေ။ ၃။ ဘာဖြစ်လို့ နောက်ကျတာလဲဟင်။ ဘတ်စ်ကားက မလာခဲ့လို့ပါ။ ၄။ အားကစားပွဲမှာ ပါမှာလား။ ဟင့်အင်း မပါဘူး။ အားကစားကို သိပ်မကြိုက်ဘူးလေ။ ၅။ ဂျပန်လို စာရေးခဲ့တာလေ နဲနဲကြည့်ပေးလို့ ရလား။ ရပါတယ် ၆။ NHK ကိုသွားလေ့လာချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။ ဒါရိုတ်သွားရင် ရတယ်လေ။ အမြဲတမ်း ကြည့်လို့ရတယ်။
Lesson 27 Grammar 1.可能動詞(かのうどうし) 可能動詞(かのうどうし) ဆိုတာ ကြိယာပုံစံ တစ်ခုကို “နိုင/် တတ်/လို့ရတယ်” စသည့် ကြိယာပုံစံသို့ ပြောင်းလဲ၍ သုံးခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ဥပမာ လမ်းလျှောက်တယ် ကို 可能動詞(かのうどうし) သို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် လမ်းလျှောက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကြိယာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကြိယာအုပ်စုများနှင့်လိုက်၍ ပြောင်းပုံခြင်းမတူပါ။ အောက်က ဇယားတွင် အသေးစိတ်လေ့လာပါ။ 動詞 ( ドウシ )
動詞 ( ドウシ ) Ⅱ
歩 ( アル ) く
歩 ( アル ) ける
食 ( タ ) べる
動詞 ( ドウシ )
食 ( タ ) べられる
( コ ) られる
覚 ( オボ ) える
⇒ 覚 ( オボ ) え られる ရပ်နိုင်/တတ်တယ် 泳 ( オヨ ) ぐ
換 ( カ ) える
換 ( カ ) えられる ရေကူးနိုင်/တတ်တယ်
降 ( オ ) りる
読 ( ヨ ) める
降 ( オ ) りられる ဖတ်နိုင/် တတ်တယ် 呼(ヨ)ぶ
ဆင်းနိုင/် တတ်တယ် 呼 ( ヨ ) べる
借 ( カ ) りる
借 ( カ ) りられる ခေါ်နိုင်/တတ်တယ် 話 ( ハナ ) す
ငှါးနိုင်တယ် 話 ( ハナ ) せる
買 ( カ ) える
可能動詞(かのうどうし) ၏အရှေ့တွင် “が” အလိုက်များသည်။ အောက်က ပုံစံအတိုင်းမှတ်ပါ။
日本語(にほんご)が読(よ)めます。 ဂျပန်စာ ဖတ်တတ်တယ်။ 寿司(すし)が食(た)べられます。 ဆူရှီကို စားနိုင်/တတ်တယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ “できました” ကို အရင်တုန်းက မရှိခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုက အဲဒီနေရာမှာ ရှိလာတာမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။ 
“できます/した”အရှေ့တွင် “が” အလိုက်များသည်။ 新(あたら)しい空港(くうこう)ができました。 လေဆိပ်အသစ် ဖွင့်လှစ်တယ်(ရှိလာတယ်/ဖြစ်လာတယ်)။ ここに新(あたら)しい道路(どうろ)ができます。 ဒီမှာ လမ်းအသစ် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်(ဖွင့်လိမ်မယ် )
–ကလွဲပြီး ရွေးချယ်စရာနဲသောအခါမျိုး၊ အရေအတွက်အားဖြင့် နဲသည်ဟု ဖေါ်ပြလိုသော အခါတွင် အသုံးများသည်။ 
”しか” ၏နောက်လွဲ အငြင်းပုံစံ ကြိယာသာလိုက်လေ့ရှိသည်။ 休(やす)みは２(ふつ)日(か)しか取(と)れません。 ပိတ်ရက်က ၂ရက်ကလွဲပြီး ယူလို့မရဘူး 自転車(じてんしゃ)しかありません。 စက်ဘီးကလွဲပြီး မရှိဘူး။ KyiPhyu(plz visit my page)
1. わたしは日本語(にほんご)が少(すこ)し話(はな)せます。 2. 山(やま)の上(うえ)から町(まち)が見(み)えます。 3. 駅(えき)の前(まえ)に大(おお)きいス(す)ーパ(ぱ)ーができました。 1. ကျွန်တော် ဂျပန်စကား နဲနဲပြောတတ်တယ်။ 2. တောင်ပေါ်ကနေ မြို့ကိုမြင်ရတယ်။ 3. ဘူတာရုံရှေ့မှာ ဆူပါအကြီးကြီး ဖွင့်ခဲ့တယ်။ 例文(れいぶん) 1. 日本語(にほんご)の新聞(しんぶん)が読(よ)めますか。 …いいえ、読(よ)めません。 2. パワー電気(でんき)では夏休(なつやす)みは何日(なんにち)ぐらい取(と)れますか。 …そうですね。3 週間(しゅうかん)ぐらいです。 いいですね。わたしの会社(かいしゃ)は 1(１)週間(しゅうかん)しか休(やす)めません。
3. このマンションでペットが飼(か)えますか。 …小(ちい)さい鳥(とり)や魚(さかな)は飼(か)えますが、犬(いぬ)や猫(ねこ)は飼(か)えません。
4. 東京(とうきょう)から富士山(ふじさん)が見(み)えますか。 …昔(むかし)はよく見(み)えましたが、今(いま)はほとんど見(み)えません。
5. 鳥(とり)の声(こえ)が聞(き)こえますね。 …ええ。もう春(はる)ですね。
6. 関西空港(かんさいくうこう)はいつできましたか。 …1994 年(ねん)の秋(あき)にできました。
7. ステキなかばんですね。どこで買(か)ったんですか。 …通信販売(つうしんはんばい)で買(か)いました。 デパートにはありますか。 …デパートにはないと思(おも)いますよ。
1. ဂျပန်စာ သတင်းစာကို ဖတ်တတ်လား ဟင့်အင်း မဖတ်တတ်ဘူး
2. ပါဝါလျှပ်စစ်မှာ နွေရာသီပိတ်ရက် ဘယ်နှစ်ရက်လောက် ရလဲ အင်း–၃ပတ်လောက် ရတယ် ကောင်းတယ်နော်။ ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီမှာ ၁ပတ်ကလွဲပြီး နားလို့မရဘူး
3. ဒီတိုက်ခန်းမှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် မွေးလို့ရလား သေးတဲ့ ငှက်တို့ ငါးတို့ မွေးလို့ရပေမဲ့ ခွေးတို့ ကြောင်တို့က မွေးလို့မရဘူး
4. တိုကျိုကနေ ဖူဂျီတောင်ကို မြင်ရလား အရင်က ကောင်းကောင်း မြင်ရပေမဲ့ အခု သိပ်မမြင်ရတော့ဘူး
5. ငှက်ရဲ့အသံက ကြားရတယ်နော် အင်း–နွေဦးပေါက်ကို ရောက်ပြီနော်
6. Kansai လေဆိပ်က ဘယ်တုန်းက ဖွင့်ခဲ့တာလဲ ၁၉၉၄ခုနှစ် ဆောင်းဦးပေါက်မှာ ဖွင့်ခဲ့တယ်
7. လှလိုက်တဲ့ အိပ်နော် ဘယ်မှာ ဝယ်ခဲ့တာလဲ On line shoppingမှာ ဝယ်ခဲ့တယ် ကုန်တိုက်မှာရော ရှိလား ကုန်တိုက်မှာ မရှိဘူးလို့ထင်တယ်
Lesson 28 Grammar 文法(ぶんぽう)သဒ္ဒါ 1．～ながら
အဓိပ္ပါယ် ⇒ –ရင်း။ တစ်ခုကိုလုပ်ရင်းနဲ့ နောက်တစ်ခုကိုလည်းလုပ်နေ အသုံးပြုပုံ ⇒ ကြိယာ ます form မှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး ながら နှင့်ပေါင်း V ます
ご飯(はん)を食(た)べながらテレビを見(み)ています。 ထမင်းစားရင်း တီဗီကြည့်နေတယ်။ 2．～し、～し အဓိပ္ပါယ် ⇒ –ပြီး–။ အဓိပ္ပါယ်တူ adj, v, noun များကို တစ်ခုထက်ပို၍ သုံးသောအခါတွင် သုံးနိုင်သည် အသုံးပြုပုံ ⇒ adj, v, noun များ၏နောက်တွင် ထား၍သုံးနိုင်သည် adj, v + し な adj, noun + だし このレストランは安(やす)いし、おいしいし、いいですね。 ဒီစားသောက်ဆိုင်က ဈေးပေါပြီး အရသာရှိလို့ ကောင်းတယ်နော်။ 彼女(かのじょ)は頭(あたま)がいいし、きれいだし、だから人気(にんき)がありますね。 သူမက ညာဏ်လည်းကောင်းပြီး လှလည်းလှတယ် ဒါကြောင့် လူကြိုက်များတယ်နော်။ ※な adj, noun ၏နောက်တွင် だし ဖြင့် ဆက်ပေးရမည်။ 3．～いただけませんか အဓိပ္ပါယ် ⇒ လုပ်ပေးလို့မရဘူးလား။ အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် သုံးသည်။ အသုံးပြုပုံ ⇒V て များ၏နောက်တွင် ထား၍သုံးနိုင်သည်။ Vて
ミラーさん、英語(えいご)を教(おし)えていただけませんか。 မီလာစံ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ပေးပါလား(သင်ပေးလို့မရဘူးလား) KyiPhyu(plz visit my page)
文型(ぶんけい) ဝါကျများ 1. 音楽(おんがく)を聞(き)きながら食事(しょくじ)します。 သီချင်းကိုနားထောင်ရင်း ထမင်းစားမယ်။ 2. 毎朝(まいあさ)ジョギングをしています。 မနက်တိုင်း အပြေးလေ့ကျင့်နေတယ်။ 3. 地下鉄(ちかてつ)は速(はや)いし、安(やす)いし、地下鉄(ちかてつ)で行(い)きましょう。 မြေအောက်ရထားက မြန်ပြီး ဈေးသက်သာလို့ မြေအောက်ရထားနဲ့ သွားရအောင်။ 例文(れいぶん) ဥပမာစာကြောင်းများ 1. 眠(ねむ)いとき、ガムをかみながら運転(うんてん)します。 …そうですか。私(わたし)は車(くるま)を止(と)めて、しばらく寝(ね)ます。 2. 太郎(たろう)、テレビを見(み)ながら勉強(べんきょう)してはいけませんよ。 …はい。 3. 彼(かれ)は働(はたら)きながら大学(だいがく)で勉強(べんきょう)しています。 …そうですか。偉(えらい)いですね。 4. 休(やすみ)みの日(ひ)はいつも何(なに)をしていますか。 …そうですね。たいてい絵(え)をかいています。 5. ワット先生(せんせい)は熱心(ねっしん)だし、まじめだし、それに経験(けいけん)もあります。 …いい先生(せんせい)ですね。 6. 田中(たなか)さんはよく旅行(りょこう)をしますが、外国(がいこく)へは行(い)きませんね。 …ええ。ことばもわからないし、習慣(しゅうかん)も違(ちが)うし、外国旅行(がいこくりょこう)は 大変(たいへん)ですよ。 7. どうしてさくら大学(だいがく)を選(えら)んだんですか。 …さくら大学(だいがく)は父(ちち)が出(で)た大学(だいがく)だし、いい先生(せんせい)も多(おお)い し、それに家(いえ)から近(ちか)いですから。
1. အိပ်ချင်တဲ့အခါ ပီကေကိုဝါးရင်း ကားမောင်းတယ်။
ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကားကိုရပ်ပြီး ခဏအိမ်တယ်။ 2. တရိုး တီဗီကြည့်ရင်း စာမကျက်ရဘူးနော်။
ဟုတ်ကဲ့။ 3. သူက အလုပ်လုပ်ရင်း တက္ကသိုလ်မှာ စာလေ့လာနေတယ်။
ဟုတ်လား။ ကြိုးစားတယ်နော်။ 4. ပိတ်ရက်မှာ အမြဲတမ်း ဘာလုပ်နေလဲ။
ဟုတ်တယ်နော် များသော(ယေဘူယျ)အားဖြင့် ပုံဆွဲနေတယ်။ 5. ဝပ်တိုဆရာက ကြိုးစားပြီး တည်ကြည်ပြီး ဒါအပြင် အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်။
ဆရာကောင်းဘဲနော်။ 6. တနခါစံက ခရီးခဏခဏသွားပေမဲ့ နိုင်ငံခြားကိုတော့မသွားဘူးနော်
အင်း ဘာသာစကားလည်းနားမလည်းဘူး ဓလေ့စရိုတ်လည်း မတူတော့ နိုင်ငံခြားခရီးက မလွယ်ပါဘူး။ 7. ဘာကြောင့် ဆကူရာ တက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။
ဆကူရာ တက္ကသိုလ်က အဖေက ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပြီး ဆရာကောင်းလည်းများပြီး အိမ်ကနေနီးလို့လေ။
Lesson 29 Grammar 文法(ぶんぽう)သဒ္ဒါ 1．～(て)います
အဓိပ္ပါယ် ⇒ –လုပ်နေတယ်။ တစ်ခုခုကို လုပ်နေစဉ် အခြေအနေကို ဖေါ်ပြခြင်းတွင်း သုံးသည် အသုံးပြုပုံ ⇒ V て ၏နောက်တွင် ထား၍သုံးသည် Vて
勉強(べんきょう)しています。 စာလေ့လာနေတယ်။ ご飯(はん)を食(た)べています。 ထမင်းစားနေတယ်။
အဓိပ္ပါယ် ⇒ လုပ်မိသွားခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုကို စတင်၍ လုပ်မိသွားသည်။ အမှတ်မထင် လုပ်မိသွားသည်။ (ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန် ခက်ခဲသော အခြေအနေမျိုးဖြစ်) အသုံးပြုပုံ ⇒V て ၏နောက်တွင် ထား၍သုံးသည် V て+ しまいました
遅(おく)れてしまいました。 နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ 忘(わす)れてしまいました。 မေ့သွားခဲ့တယ်။
1. 窓(まど)が閉(し)まっています。 2. この自動販売機(じどうはんばいき)は壊(こわ)れています。 3. 電車(でんしゃ)に傘(かさ)を忘(わす)れてしまいました。 1. ပြတင်းပေါက် ပိတ်နေ(ထား)တယ်။ 2. ဒီ စက်အရောင်းစက် ပျက်နေတယ်။ 3. ရထားမှာ ထီးကို မေ့ကျန်ထားခဲ့တယ်။ 例文(れいぶん) ဥပမာစာကြောင်းများ
…じゃ、渡辺(わたなべ)さんに言(い)って、開(あ)けてもらいましょう。 2. このファクス、使(つか)ってもいいですか。
…それは故障(こしょう)していますから、あちらのを使(つか)ってください。 3. シュミットさんが持(も)って来(き)たワイン(わいん)はどこですか。
…みんなで全部飲(ぜんぶの)んでしまいました。 4. 昼(ひる)ごはんを食(た)べに行(い)きませんか。
…すみません。この手紙(てがみ)を書(か)いてしまいますから、お先(さき)にどう ぞ。 5. 新幹線(しんかんせん)に間(ま)に合(あ)いましたか。
…いいえ。道(みち)が込(こ)んでいましたから、遅(おく)れてしまいました。 6. 切符(きっぷ)をなくしてしまったんですが、どうしたらいいですか。
1. အစည်းအဝေးခန်းရဲ့ သော့က ပိတ်နေတယ်။
ကဲဒါဆို၊ ဝါတာနဘဲစံကို ပြောပြီး ဖွင့်ခိုင်းရအောင်။ 2. ဒီ ဖက်စ် သုံးလို့ရပါသလား။
ဒီဟာပျက်နေလို့ ဟိုဟာကို သုံးပါ။ 3. ရှူမစ်တိုစံ ယူလာတဲ့ ဝိုင်ကဘယ်မှာလဲ။
အားလုံး အကုန်လုံးသောက်ပစ်လိုက်ပြီ။ 4. နေ့လည်စာ သွားမစားကြဘူးလား။
စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒီစာကို ရေးလိုက်မှာမို့ အရင်သွားနှင့်ပါ။ 5. ရှင်ကန်ဆန်ရထား မှီခဲ့လား။
ဟင့်အင်း လမ်းကပိတ်နေလို့ နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ 6. လက်မှတ် ပျောက်သွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။
ဟိုမှာရှိတဲ့ ဘူတာရုံဝန်ထမ်းကို ပြောပါ။
Lesson 30 Grammar 1.(て)あります 
အဓိပ္ပါယ် ⇒ ထားတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက် (သိ)ု့ မိမိက တစ်ခုခုကို လုပ်ထားခြင်း
အသုံးပြုပုံ ⇒ V て ၏နောက်တွင်ထား၍ သုံးသည်။ V て + あります ドアが閉(し)めてあります。 တံခါးပိတ်ထားသည်။ 名前(なまえ)が書(か)いてあります。 နာမယ်ရေးထားသည်။
てあります တွင်သုံးသောကြိယာသည် 他動詞(たどうし)များသည်။ နာမ်နှင့်ကြိယာခြားတွင် 助詞(じょし) 「が」အလိုက်များသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် (သိ)ု့ မိမိက ကိစ္စတစ်ခုက ပြုလုပ်ပြီးစီးသွားသော အခြေအနေများတွင်သုံးသည်။ သေချာ၊ ကျိန်းသေ ပြုလုပ်သည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်သည်။
ています နှင့်ကွာခြားပုံ ⇒ています တွင် 自動詞(じどうし) အလိုက်များသည်။ ကိစ္စတစ်ခုခုက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများတွင်သုံးသည်။
ဥပမာ 1. 電気(でんき)が付(つ)いています。（自動詞(じどうし)） မီးပွင့်နေသည်။ (တစ်စုံတစ်ယောက်(သိ)ု့ မည်သူမှန်းမသိသူက ဖွင့်ထားခဲ့ခြင်း။ မိမိမြင်သောအချိန်တွင် မီးပွင့်နေသည်။) 2. 電気(でんき)が付(つ)けてあります。（他動詞(たどうし)） မီးဖွင့်ထားသည်။ (မိမိက ဖွင့်ထားခြင်း (သိ)ု့ တစ်စုံတစ်ယောက် ဖွင့်ထားခြင်း) 3. 窓(まど)が閉(し)まっています。（自動詞(じどうし)） ပြတင်းပေါက်ပိတ်နေသည်။ (တစ်စုံတစ်ယောက်က ပိတ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မိမိတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြတင်းပေါက်က ပိတ်နေသည်) 4. 窓(まど)が閉(し)めてあります。（他動詞(たどうし)） ပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားသည်။ (ပြတင်းပေါက်ကို မိမိ (သိ)ု့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်)
အဓိပ္ပါယ် ⇒ ထားတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း ကိစ္စများတွင် အသုံးများသည်။
အသုံးပြုပုံ ⇒ V て ၏နောက်တွင်ထား၍ သုံးသည်။ Vて
友達(ともだち)が来(く)る前(まえ)に、準備(じゅんび)をしておきます。 သူငယ်ချင်းမလာခင် ပြင်ဆင်ထားမယ်။ 本(ほん)を読(よ)んでおきます。 စာအုပ်ကို ဖတ်ထားမယ်။ 3.（て）おいてください o
အဓိပ္ပါယ် ⇒ ထားပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် တောင်ဆိုခြင်း အမိန်းပေးခြင်း။
会議(かいぎ)のために、書類(しょるい)を準備(じゅんび)しておいてください。 အစည်းအဝေးအတွက် စာရွတ်စာတန်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါ။ 窓(まど)を閉(し)めておいてください。 ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်ထားပါ။ 3.まだ～ています o
အဓိပ္ပါယ် ⇒ နေတုန်းဘဲ။ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်နေတုန်း မပြီပြတ်သေးဘူးဟု ပြောချင်သောအခါတွင် သုံးသည်။ まだ+V て+います まだ勉強(べんきょう)しています。 စာကျက်နေတုန်းဘဲ။ まだ食事(しょくじ)をしています。 ထမင်းစားနေတုန်းဘဲ။
5. 旅行(りょこう)のまえに、案内書(あんないしょ)を読(よ)んでおきます。 6. ရဲကင်းမှာ ရွပ်ကွက်ရဲ့ မြေပုံကို ကပ်ထားသည်။ 7. ခရီးမသွားခင် လမ်းညွန်စာကို ဖတ်ထားမယ်။ 例文(れいぶん) 8.
…え？そうですか。 壁(かべ)に花(はな)や動物(どうぶつ)の絵(え)がかいてあるんです。 9.
…この資料(しりょう)を読(よ)んでおいてください。 12. ボランティアに参加(さんか)したいんですが、2 週間(しゅうかん)ほど休(やす)みを とってもいいですか。 …2 週間(しゅうかん)ですか。うーん。部長(ぶちょう)に相談(そうだん)しておきます。 13.
ဘူတာရုံက အိမ်သာအသစ်က စိတ်ဝင်စားစရာနော်။
ဟယ်။ ဟုတ်လား။ နံရံမှာ ပန်းနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ပုံတွေ ရေးထားတယ်လေ။ 16.
ဟို အံဆွဲထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားတယ်။ 17.
ဟင့်အင်း မျက်နှာကြည့်ပြီးမှာ စဉ်းစားမယ်။ 18.
နောက်အစည်းအဝေးအထိ ဘာလုပ်ထားရင် ကောင်းမလဲ။
ဒီစာရွတ်စာတန်းတွေကို ဖတ်ထားပါ။ 19.
Volunteer မှာပါဝင်ချင်လို့ ၂ ပတ်လောက် ခွင့်ယူလို့ ရပါသလား။
၂ပတ်လား အင်း– ဌါနမှူးနဲ့ တိုင်ပင်ထားမယ်။ 20.
ကပ်ကျေးကို သုံးပြီးရင် အရင်နေရာမှာ ပြန်ထားပါ။
ဟုတ်ကဲ့ နားလည်ပါပြီ။ 21.
ဟင့်အင်း အဲဒီအတိုင်းဘဲထားပါ။ သုံးနေတုန်းဘဲမိုလို့။
Lesson 31 Grammar 1．意向形(いこうけい)-Verb
မိမိပြုလုပ်မည့် အကြောင်းအရာကို ပြောရာတွင်သုံးသည်။ အဓိပ္ပါယ် ⇒ –ရအောင် (ましょう နှင့်ဆင်တူသည်) 意向形(いこうけい)သည် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု၊ ရင်းနှီးသောသူများအကြား သုံးသောပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ます Vကို 意向形(いこうけい)-Verb သို့ပြောင်းလျှင် အုပ်စ၁ုကြိယာ あるきます⇒あるこう အုပ်စ၂ုကြိယာ たべます⇒たべよう အုပ်စ၃ုကြိယာ します⇒しよう 「-う」နှင့်ဆုံးသော ကြိယာပုံစံရပါသည်။ 意向形(いこうけい)-Verb များတွင်လည်း အုပ်စု ၁၊ အုပစ်၂ု၊ အုပ်စ၃ုကြိယာများရဲ့ ပြောင်းပုံများဟာ မတူညီပါဘူး။ 1.1.意向形(いこうけい)VⅠ
အုပ်စ၁ုကြိယာပြောင်းပုံကို အောက်ပါအတိုင်းမှတ်သားပါ။ -ます ၏အရှေ့တွင်ရှိသော စာလုံးနှင့် လိုက်၍ ပြောင်းရမည့် စာလုံးကို အောက်ပါအတိုင်းကျက်မှတ်ထားပါ။ ၄င်းစာလုံးသို့ ပြောင်းပြီး နောက်တွင် 「-う」ထည့်ပေးပါ။
အုပ်စ၂ုကြိယာပြောင်းပုံမှာ ます Vမှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး 「よう」ကိုပေါင်းပါ။ ます V
寝(ね)ます⇒寝(ね)よう 借(か)ります⇒借(か)りよう 覚(おぼ)える⇒覚(おぼ)えよう 1.3．意向形(いこうけい)VⅢ အုပ်စ၃ုကြိယာပြောင်းနည်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပုံသေမှတ်ထားပါ။ します⇒しよう きます⇒こよう 2．意向形(いこうけい)V と思(おも)っています အဓိပ္ပါယ် ⇒
စိတ်ကူးထားသော စီစဉ်ထားသော ကိစ္စရပ်တစ်ခု စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုကို ပြောခြင်း
意向形(いこうけい)V+と思(おも)っています 明日買(あしたか)い物(もの)に行(い)こうと思(おも)っています。 မနက်ဖန် ဈေးသွားဝယ်မယ်လို့ — (စိတ်ကူးနေတယ်) 日本(にほん)へ留学(りゅうがく)しようと思(おも)っています。 ဂျပန်ကို ကျောင်းသွားတက်မလို့—(စီစဉ်နေတယ် ) 3．V つもりです အဓိပ္ပါယ် ⇒
ရည်ရွယ်တယ် (ကျိန်းသေပြုလုပ်မည့် ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောခြင်း)
Plain V/ない V
先生(せんせい)になるつもりです。 ဆရာဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။ 卒業(そつぎょう)したら帰国(きこく)するつもりです。 ကျောင်းပြီးရင် နိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်
意向形(いこうけい)V と思(おも)っています နှင့်
V つもりです ကွာခြားပုံ
意向形(いこうけい)V と思(おも)っています ကို လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော အကြောင်းအရာတွင်သုံးပြီး V つもりです ကို ကျိန်းသေလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော ကိစ္စများတွင်သုံးသည်။
4．予定(よてい)です အဓိပ္ပါယ် ⇒
စီစဉ်ထားပါတယ်။ အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ် (နေ့လရက်များ schedule များကိုပြောရာတွင်
အသုံးများ) Plain V
A さん；試験(しけん)はいつですか。စာမေးပွဲက ဘယ်တော့လဲ။ B さん；来週(らいしゅう)の金曜日(きんようび)の予定(よてい)です。နောက်တစ်ပတ် သောကြာနေ့ပါ။ 文型(ぶんけい)
1. いっしょに飲(の)もう。 2. 将来自分(しょうらいじぶん)の会社(かいしゃ)を作(つく)ろうと思(おも)っています。 3. 来月車(らいげつくるま)を買(か)うつもりです。 1. အတူတူသောက်ရအောင်။ 2. အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ ထောင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ 3. နောက်လ ကားဝယ်မလို့ (ရည်ရွယ်ထားတယ်) 例文(れいぶん) 1. 疲(つか)れたね。ちょっと休(やす)まない？ …うん、そうしよう。 2. お正月(しょうがつ)は何(なに)をしますか。 …家族(かぞく)と温泉(おんせん)に行(い)こうと思(おも)っています。 それはいいですね。 3. レポートはもうできましたか。 …いいえ、まだ書(か)いていません。 金曜日(きんようび)までに、まとめようと思(おも)っています。 4. ハンス君(くん)は国(くに)へ帰(かえ)っても、柔道(じゅうどう)を続(つづ)けますか。 …はい、続(つづ)けるつもりです。 5. 夏休(なつやす)みは国(くに)へ帰(かえ)らないんですか。 …ええ。大学院(だいがくいん)の試験(しけん)を受(う)けますから、今年(ことし)は帰(かえ)らない つもりです。 6. 明日(あした)からニューヨークへ出張(しゅっちょう)します。 …そうですか。いつ帰(かえ)りますか。 来週(らいしゅう)の金曜日(きんようび)に帰(かえ)る予定(よてい)です。
1. မောလိုက်တာနော်။ ခဏနားရအောင်။ အင်း နားရအောင်။ 2. နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘာလုပ်မလဲ။ မိသားစုနဲ့ ရေပူစမ်းသွားမလိ…ု့ ကောင်းလိုက်တာနော် 3. Report ကရေးလို့ပြီးပြီလား။ ဟင့်အင်းမရေးရသေးဘူး။ သောကြာနေ့အထိတော့ အပြီးသတ်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေတယ်။ 4. ဟန်စုခွန်က နိုင်ငံကိုပြန်သွားရင်လည်း ဂျူဒိုကို ဆက်ကစားမှာလား။ ဟုတ်ကဲ့ ဆက်လုပ်မှာပါ။ 5. နွေရာသီပိတ်ရက်မှာ နိုင်ငံကိုမပြန်ဘူးလား။ အင်း ဘွဲ့လွန်တက်ဖို့အတွက် စာမေးပွဲဖြေမှာမိုလို့ မပြန်တောဘူးလို့ ရည်ရွယ်တယ်။ 6. မနက်ဖန်ကနေစပြီး နယူးယောက်ကို အလုပ်ခရီးသွားမယ်။ ဟုတ်လား။ ဘယ်တော့ပြန်မလဲ။ နောက်တစ်ပတ် သောကြာနေ့မှာ ပြန်မဲ့ အစီအစဉ်ပါ။
Lesson 32 Grammar 1．~（V た/V ない）ほうがいいです အဓိပ္ပါယ် ⇒
လုပ်တာ/ မလုပ်တာ ကောင်းတယ်
အသုံးပြုပုံ ⇒V ない/V た + ほうがいいです たばこは吸(す)わないほうがいいです。 ‘ဆေးလိပ်မသောက်တာ ကောင်းတယ် 傘(かさ)を持(も)って出(で)かけたほうがいいです。 ထီးကိုယူပြီး အပြင်သွားတာ ကောင်းမယ် 2．~（V る/V ない/Adj/N）でしょう အဓိပ္ပါယ် ⇒
အသုံးပြုပုံ ⇒V る/V ない/Adj/N + でしょう 星(ほし)が見(み)えるでしょう。（V る） ကြယ်တွေကို မြင်ရလိမ့်မယ် 雪(ゆき)は降(ふ)らないでしょう。（V ない） ‘နှင်းမကျလောက်ဘူး 寒(さむ)いでしょう。（い Adj） ချမ်းမယ်လို့ထင်တယ် きれいでしょう。（な Adj） လှတယ်လို့ထင်တယ် 雨(あめ)でしょう。（Noun） မိုးရွာလိမ့်မယ် (မိုးလို့ထင်တယ်) 3．~（V る/V ない/Adj/N）かもしれません အဓိပ္ပါယ် ⇒
လို့ထင်တယ် (သိပ်မသိ၊ သိပ်မသေချာသော ကိစ္စများကို ပြောရာတွင်သုံးသည် )
အသုံးပြုပုံ ⇒V る/V ない/Adj/N + かもしれません やめるかもしれません。（V る） အလုပ်ထွက်မယ် လို့ထင်တယ် こないかもしれません。（V ない） မလာဘူးလို့ထင်တယ် 忙(いそが)しいかもしれません。（い Adj） အလုပ်ရှုတ်မယ် လို့ထင်တယ် ひまかもしれません。（な Adj） အားမယ်လို့ ထင်တယ် 病気(びょうき)かもしれません。（Noun） ‘နေမကောင်းဘူး လို့ထင်တယ် KyiPhyu(plz visit my page)
1. 毎日運動(まいにちうんどう)したほうがいいです。 2. 明日(あした)は雪(ゆき)が降(ふ)るでしょう。 3. 約束(やくそく)の時間(じかん)に間(ま)に合(あ)わないかもしれません。 1. ‘နေ့တိုင်း အားကစားလုပ်တာ ကောင်းတယ် 2. မနက်ဖန် နှင်းကျလိမ့်မယ် 3. ချိန်းထားတဲ့ အချိန်ကို မမှီဘူးလို့ထင်တယ် 例文(れいぶん)
1. 最近(さいきん)の学生(がくせい)はよく遊(あそ)びますね。 …そうですね。でも、若(わか)いときは、いろいろな経験(けいけん)をしたほうが いいと思います。 2. 1 か月(げつ)ぐらいヨーロッパへ遊(あそ)びに行(い)きたいんですが、40 万円(まん えん)で足(た)りますか。 …十分(じゅうぶん)だと思います。 でも、現金(げんきん)で持(も)っていかないほうがいいですよ。 3. 日本(にほん)の経済(けいざい)はどうなるでしょうか。 …そうですね。まだしばらくよくならないでしょう。 4. オリンピックは成功(せいこう)するでしょうか。 …大丈夫でしょう。 ずいぶん前(まえ)から準備(じゅんび)していますから。 5. 先生(せんせい)、ハンスは何(なん)の病気(びょうき)でしょうか。 …インフルエンザですね。3 日(にち)ほど高(たか)い熱(ねつ)が続(つづ)くかもしれ ませんが、心配(しんぱい)しないでください。 6. エンジンの音(おと)がおかしいと思(おも)いませんか。 …ええ。故障(こしょう)かもしれません。 すぐ空港(くうこう)に戻(もど)りましょう。
1. အခုတလော ကျောင်းသားတွေက အရမ်း အပျော်အပါးမက်တယ်နော် ဟုတ်တယ်နော် ဒါပေမဲ့ ငယ်တဲ့အချိန်မှာ အမျိုးမျိုးအတွေ့အကြုံယူထားတာ ကောင်းတယ်ထင်တယ် 2. တစ်လလောက် Europe ကိုအလည်သွားချင်တယ် ၄ သိန်းယန်းလောက်နဲ့ လောက်လား။ လုံလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ငွေသားယူမသွားတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ 3. ဂျပန်ရဲ့ စီးပွါးရေးက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဟုတ်တယ်နော် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ သိပ်မကောင်းနိုင်ဘူးထင်တယ် 4. အိုလံပစ်က အောင်မြင်ပါ့မလား ကိစ္စမရှိဘူးလို့ ထင်တယ် ‘တော်တော်ကြာကြာခတည်းက ပြင်ဆင်ထားတာမိုလို့။ 5. ဆရာ ဟန်စုက ဘာရောဂါဖြစ်မလဲဟင် တုတ်ကွေးမိတာပါ။ ၃ရက်လောက် ကိုယ်အပူကြီးလိမ်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ 6. အင်ဂျင်အသံက တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်ဘူးလား အင်း ပျက်ပြီလားမသိဘူး ချက်ချင်း လေဆိပ်ကိုပြန်ရအောင်
Lesson 33 Grammar 1.命令形(めいれいけい)/禁止形(きんしけい) 
အမိန့်ပေးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းများတွင် သုံးသည်။ ဆရာမှ ကျောင်းသားသို့ ပြောဆိုအမိန့်ပေးခြင်း။ မိဘမှ သားသမီးသို့ ပြောဆို အမိန့်ပေးရာတွင် သုံးသည်။ အားကစားပွဲများတွင် အားပေးရာတွင်လည်းသုံးနိုင်သည်။ စက်ရုံ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမိန့်ပေးပုံစံမျိုး ဖြင့်လည်းသုံးသည်။
ပုံစံပြောင်းပုံ 1. အုပ်စု ၁ ကြိယာများကို V ます မှ ます ကိုဖြုတ်ပြီး ကျန်နေသောစာလုံးနှင့်လိုက်၍ ပြောင်းပုံကွဲပြားပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ပုံတွင်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ はしります
ပြေးစမ်းပါ (ပြေးစမ်းပြေးစမ်း )
2. အုပ်စု ၂ ကြိယာများတွင် V ます မှ ます ကိုဖြုတ်၍ 〝ろ＂ထည့်ပါ။ 3. အုပ်စု ၃ ကြိယာပြောင်းပုံကို ပုံတွင်ပြထားသည့် အတိုင်း ပုံသေမှတ်ယူပါ။
2.V るな 
အနည်းငယ် ကြမ်းတမ်းသော အမိန့်ပေး၊ သတိပေးပုံစံဖြစ်သည်။ ပုံမှန်တွင် သုံးလေ့မရှိပါ။ စိတ်ဆိုး ရန်ဖြစ်သော အခါမျိုးတွင်သာ သုံးလေ့ရှိသည်။ အသုံးပြုပုံ ⇒V る+な 寝(ね)るな မအိပ်နဲ့
3.V る/い Adj/な Adj/Noun という意味(いみ)です 
အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်လို့ ပြောသောအခါတွင် သုံးသည်။ အသုံးပြုပုံ ⇒V る/い Adj/な Adj/Noun +という意味(いみ)です 危険(きけん)は危(あぶ)ないという意味(いみ)です。 「きけん」ဆိုတာ အန္တာရယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ 4.V ると言(い)っていました
တစ်ယောက်ယောက်က ပြောသောစကားကို တဆင့်ပြန်လည် ပြောရာတွင်သုံးသည် အသုံးပြုပုံ ⇒V る+と言(い)っていました ミラーさんは明日国(あしたくに)へ帰(かえ)ると言(い)っていました。 မီလာစံက မနက်ဖန် နိုင်ငံကို ပြန်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ 5.もう~ない
ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင် လက်လျှော့လိုက်ရသော အခြေအနေများတွင် သုံးသည် အသုံးပြုပုံ ⇒もう+V ない もう、走(はし)れない。 တော်ပြီ မပြေးနိုင်တော့ဘူး 文型(ぶんけい)
1. 急(いそ)げ。 ‘မြန်မြန်လုပ် 2. 触(さわ)るな。 မကိုင်နဲ့ 3. 立(た)ち入(い)り禁止(きんし)は入(はい)るなという意味(いみ)です。 「立(た)ち入(い)り禁止(きんし)」ဆိုတာ မဝင်ရလို့ ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တယ် 4. ミラーさんは来週大阪(らいしゅうおおさか)へ出張(しゅっちょう)すると言(い)っ ていました。 မီလာစံက နောက်တစ်ပတ် အိုဆာကာကို ခရီးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
1. だめだ。もう走(はし)れない。 မရတော့ဘူး။ မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ …頑張(がんば)れ。あと 1000 メートルだ。 ကြိုးစားထား။ နောက် မီတာ ၁၀၀၀ ဘဲ။ 2. もう時間(じかん)がない。 အချိန်မရှိတော့ဘူး …まだ 1 分(ぷん)ある。あきらめるな。ファイト！ နောက် ၁ မိနစ်ရှိသေးတယ်။ လက်မရှော့နဲ့။ ဖိုက် 3. あそこに何(なん)と書(か)いてあるんですか。 ဟိုမှာ ဘာလို့ ရေးထားတာလဲ …「止(と)まれ」と書(か)いてあります。 ရပ်ပါလို့ ရေးထားတယ် 4. あの漢字(かんじ)は何(なん)と読(よ)むんですか。 ဟိုခန်းဂျိက ဘယ်လိုဖတ်တာလဲဟင် …「禁煙(きんえん)」です。 「きんえん」ပါ たばこを吸(す)うなという意味(いみ)です。 ဆေးလိပ်မသောက်ရလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ 5. このマークはどういう意味(いみ)ですか。 အဲဒီအမှတ်အသားက ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်လဲ …洗濯機(せんたくき)で洗(あら)えるという意味(いみ)です。 အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ လျှော်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ 6. グプタさんはいますか。 ဂုပုတစံ ရှိပါသလား …今、出(で)かけています。30 分(ぷん)ぐらいで戻(もど)ると言(い)っていました。 အခု အပြင်သွားနေတယ်။ မိနစ် ၃၀လောက်ကြာရင် ပြန်လာမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ် 7. すみませんが、渡辺(わたなべ)さんに明日(あした)のパーティーは6時(じ)からだ と伝(つた)えていただけませんか。 စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ဝါတာနာဘဲစံကို မနက်ဖန် ပါတီ၆နာရီကနေလို့ ပြောပေးလို့ရမလား …わかりました。6 時(じ)からですね。 ‘ကောင်းပါပြီ ၆နာရီကနေနော် KyiPhyu(plz visit my page)
Lesson 34 Grammar 1．~とおりに
အသုံးပြုပံ ⇒ုကြိယာပုံစံ အမျိုးမျိုးနှင့် နာမ်၏နောက်တွင် အလိုက်များသည် V る/V た/N +
彼女(かのじょ)が話(はな)すとおりに、書(か)いてください。 သူမပြောတဲ့အတိုင်း ရေးပါ။ 案内書(あんないしょ)のとおりに来(き)てください。 လမ်းညွန်အတိုင်း လာခဲ့ပါ။ 2．~あとで
အသုံးပြုပံ ⇒ုအတိတ်ကြိယာပုံစံနှင့် နာမ်၏နောက်တွင် အလိုက်များသည် V た/N の
食事(しょくじ)をしたあとで、歯(は)を磨(みが)きます。 ထမင်းစားပြီးမှ သွားတိုက်တယ်။ 買(か)い物(もの)のあとで、友達(ともだち)に電話(でんわ)します。 ဈေးဝယ်ပြီးမှ သူငယ်ချင်းဆီကို ဖုန်းဆက်မယ်။ 3．~ないで V
အသုံးပြုပံ ⇒ုအငြင်းကြိယာ၏နောက်တွင် လိုက်သည် V ないで
バスに乗(の)らないで、学校(がっこう)へ歩(ある)いて行(い)きます。 ဘတ်စ်ကားမစီးဘဲ ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားမယ်။ コーヒーに砂糖(さとう)を入(い)れないでください。 ကော်ဖီကို သကြားမထည့်ပါနဲ့။
1. わたしが今(いま)から言(い)うとおりに、書(か)いてください。 ကျွန်တော် အခုပြောတဲ့အတိုင်း (လိုက)် ရေးပါ။ 2. ごはんを食(た)べたあとで、歯(は)を磨(みが)きます。 ထမင်းစားပြီးမှ သွားတိုက်မယ်။ 3. コーヒーは砂糖(さとう)を入(い)れないで飲(の)みます。 ကော်ဖီကို သကြားမထည့်ဘဲ သောက်တယ်။ 例文(れいぶん)
1. 皆(みな)さん、盆踊(ぼんおど)りを練習(れんしゅう)しましょう。 …はい。 わたしがするとおりに、踊(おど)ってください。 အားလုံး Bonအကကို လေ့ကျင့်ရအောင် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် လုပ်သလိ(ု တဲ့အတိုင်း) ကပါ။ 2. おもしろい夢(ゆめ)を見(み)ました。 …どんな夢(ゆめ)ですか。見(み)たとおりに、話(はな)してください。 စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အိမ်မက်ကိုမက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုအိမ်မက်မျိုးလဲ။ မက်တဲ့အတိုင်း ပြောပြပါ။ 3. このテーブルは自分(じぶん)で組(く)み立(た)てるんですか。 …ええ、説明書(せつめいしょ)の通(とお)りに、組(く)み立(た)ててください。簡単 (かんたん)です。 ဒီစားပွဲကို ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ရတာလား။ ဟုတ်တယ်။ ညွန်ကြားစာအတိုင်း တပ်ဆင်လိုက်ပါ။ လွယ်ပါတယ်။ 4. どこで財布(さいふ)を落(お)としたんですか。 …わかりません。うちへ帰(かえ)った後(あと)で、気(き)がついたんです。 ဘယ်မှာ ပိုက်ဆံအိပ်ကို ကျပြောက်တာလဲ။ မသိဘူး။ အိမ်ရောက်ပြီးမှ သတိထားမိတာ။ KyiPhyu(plz visit my page)
5. 仕事(しごと)のあとで、飲(の)みに行(い)きませんか。 …すみません。きょうはスポーツクラブへ行(い)く日(ひ)なんです。 အလုပ်ပြီးရင် သွားသောက်ရအောင်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒီနေ့ အားကစားကလပ်ကို သွားရမဲ့ရက်ဖြစ်နေတယ်။ 6. 友達(ともだち)の結婚式(けっこんしき)に何(なに)を着(き)て行(い)ったらいいです か。 …そうですね。日本(にほん)では男(おとこ)の人(ひと)は黒(くろ)か紺(こん)のス (す)ーツ(つ)を着(き)て、白(しろ)いネクタイをしていきます。 သူငယ်ချင်းရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ဘာဝတ်သွားရင် ကောင်းမလဲဟင်။ ဟုတ်တယ်နော်။ ဂျပန်မှာ အမျိုးသားတွေက အနက်ရောင် ဒါမှာမဟုတ် နက်ပြာရောင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ ဝတ်ပြီး အဖြူရောင်နက်ကတိုင်ဝတ်ပြီး သွားကြတယ်။ 7. これはしょうゆをつけるんですか。 …いいえ、何(なに)もつけないでたべてください。 ဒါ shouyu ဆမ်းရမှာလား။ ဟင့်အင်း ဘာမှ မဆမ်းဘဲနဲ့ စားပါ။ 8. 少(すこ)し細(ほそ)くなりましたね。ダイエットしたんですか。 …いいえ。バスに乗(の)らないで駅(えき)まで歩(ある)いているんです。 နဲနဲ ပိန်သွားတယ်နော်။ ဝိတ်လျှော့နေတာလား။ ဟင့်အင်း ဘတ်စ်ကားမစီးဘဲနဲ့ ဘူတာရုံအထိ လမ်းလျှောက်နေတာလေ။
Lesson 35 Grammar 1．条件形(じょうけんけい)
~ば နှင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဥပမာ 言(い)えば、聞(き)けば စသည့်စာလုံးများဖြစ်သည်။ စကားဆက်အဖြစ်အသုံးများသည်။ 条件形(じょうけんけい)ပြောင်းပုံများကို အောက်တွင်လေ့လာပါ။ 
1g= ကြိယာအုပ်စု ၁၊ 2g=ကြိယာအုပ်စ၂ု၊ 3g=ကြိယာအုပ်စ၃ု
အသုံးပြုပံ ⇒ုစကားဆက်အဖြစ်သုံးသည် ~ば+~ます A：試験(しけん)はいつかわかりますか。 စာမေးပွဲက ဘယ်တော့်လဲ B：いいえ、わかりません。 ဟင့်အင်းမသိဘူး A：そうですか。誰(だれ)に聞(き)きますか。 ဟုတ်လား ဘယ်သူ့ကို မေးရမလဲ B：先生(せんせい)に聞(き)けばわかります。 ဆရာ့ကိုမေးရင် သိလိမ့်မယ်
အသုံးပြုပံ ⇒ုစကားဆက်အဖြစ်သုံးသည် なれば+~ます 春(はる)になれば、桜(さくら)が咲(さ)きます。 ☆နွေဦးရောက်ရင် ဆာကူရာပန်းတွေပွင့်တယ်။ 4．~ば~ほど
အသုံးပြုပံ ⇒ု
ပုံစံပြောင်းလဲတတ်သော သဘောတရားများကို ဖေါ်ပြရာတွင်သုံးသည်။
~ば+V ほど 日本語(にほんご)は勉強(べんきょう)すればするほど、上手(じょうず)になります ဂျပန်စာက လေ့လာရင် လေ့လာသလို ထူးချွန်လာလိမ့်မယ် 文型(ぶんけい)
1. 春(はる)になれば、桜(さくら)が咲(さ)きます。 springရောက်ရင် ဆာကူရာပန်းတွေပွင့်တယ်။ 2. 天気(てんき)が良(よ)ければ、向(む)こうに島(しま)が見(み)えます。 ရာသီဥတုကောင်းရင် ဟိုဘက်က ကျွန်းကိုမြင်ရတယ်။ 3. 北海道旅行(ほっかいどうりょこう)なら、6(６)月(がつ)がいいです。 ဟိုကိုင်းဒိုခရီးဆိုရင် ၆လပိုင်းမှာ ကောင်းတယ်။ 4. 結婚式(けっこんしき)のスピーチは短(みじか)ければ短(みじか)いほどいいです。 မင်္ဂလာဆောင်မှာ ပြောတဲ့အမှာစကားက တိုရင် တိုသလောက်ကောင်းတယ်။ 例文(れいぶん)
1. 車(くるま)の窓(まど)が開(ひら)かないんですが…。 …そのボタンを押(お)せば開(あ)きますよ。 ကားရဲ့မှန်က မပွင့်ဘူး… အဲဒီခလုပ်ကို နှိပ်ရင် ပွင့်လိမ့်မယ်။
2. ほかに意見(いけん)がありますか。 …いいえ、特(とく)にありません。 なければ、これで終(お)わりましょう。 တခြားအကြံပေးစရား ရှိပါသလား။ ဟင့်အင်း အထွေအထူးမရှိပါဘူး။ မရှိဘူးဆိုရင် ဒီမှာဘဲနိဂုံးချုပ်ရအောင်။ 3. 日本(にほん)の生活(せいかつ)はどうですか。 …何(なん)でもあって、便利(べんり)です。でも、もう少(すこ)し物価(ぶっか)が安 (やす)ければ、もっといいと思(おも)います。 ဂျပန်မှာ နေရထိုင်ရတာ ဘယ်လိုလဲ ဘာမဆိုရှိပြီး အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နဲနဲလောက် ကုန်ဈေးနှုန်းသက်သာရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ 4. 明日(あした)までにレポートを出(だ)さなければ、なりませんか。 …無理(むり)なら、金曜日(きんようび)までに出(だ)してください。 မနက်ဖန်အထိ report ကို မတင်ရင်မရဘူးလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သောကြာနေ့အထိ(မှီအောင်) တင်ပါ။ 5. 2，3 日旅行(にちりょこう)をしようと思(おも)っているんですが、どこかいい所 (ところ)はありませんか。 …そうですね。2，3 日(にち)なら、箱根(はこね)か日光(にっこう)がいいと思(お も)います。 ၂ရက်၃ရက်လောက် ခရီးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာ။ ကောင်းတဲ့နေရာများ ရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်နော်။ ၂ရက်၃ရက်ဆိုရင် ဟကိုနဲ သို့မဟုတ် နိကိုးက ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ 6. 本(ほん)を借(か)りたいんですが、どうすればいいですか。 …受付(うけつけ)でカードを作(つく)ってもらってください。 စာအုပ်ငှါးချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရပါသလဲ (ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ)။ receptionကောင်တာမှာ ကဒ်လုပ်ခိုင်းပါ။ 7. 小川(おがわ)よねさんは元気(げんき)な方(ほう)ですね。 …ええ。年(とし)を取(と)れば取(と)るほど元気(げんき)になりますね。 အိုဂါဝါ ရော့နဲစံ က အမြဲတမ်း ကျန်းမာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ ဟုတ်တယ် အသက်ရလာရင် ရလာသလောက် ကျန်းမာလာတယ်နော်။ KyiPhyu(plz visit my page)
Lesson 36 Grammar 1．～ようになります/してください
အဓိပ္ပါယ် ⇒–အောင်လုပ်တယ်/လုပ်ပါ အသုံးပြုပံ⇒ုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သော အခြေအနေများကို ဖေါ်ပြခြင်း၊ အမိန့်ပေးညွန်ကြားခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းများပြု လုပ်ရာတွင်သုံးသည်။ V る/V ない+ように+なります/してください 日本語(にほんご)がうまく話(はな)せるようになりました。 ဂျပန်စကား ကောင်းကောင်းပြောတတ်လာပြီ။ 明日遅刻(あしたちこく)しないようにしてください。 မနက်ဖန် နောက်မကျစေနဲ့နော်။ 早(はや)く元気(げんき)になりますように… မြန်မြန် ကျန်းမာပါစေနော်။ 2・~しなくなります
အဓိပ္ပါယ် ⇒–မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး အသုံးပြုပုံ ⇒အငြင်းပုံစံ ကြိယာများ၏ နောက်တွင်ထား၍သုံးသည်။ ရည်ရွယ်ထားသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း၊ ဆက်မလုပ်တော့သည့် အခါများတွင်သုံးသည်။ V ない
明日雨(あしたあめ)が降(ふ)りますから、出(で)かけなくなりました。 မနက်ဖန် မိုးရွာမှာမိုလို့ အပြင်မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ 結婚式(けっこんしき)に出席(しゅっせき)できなくなりました。 မင်္ဂလာဆောင်ကို မတက်ရောက်နိုင်တော့ဘူး။ 3．やっと
အဓိပ္ပါယ် ⇒–အခုမှဘ–ဲအသုံးပြုပံ⇒ုမျှော်လင့်စောင်းဆိုင်းနေသော ကိစ္စတစ်ခု အထမြောက်အောင်မြင်သော အခါတွင်သုံးသည်။ ကောင်းသောကိစ္စရပ်များတွင်သုံးသည်။ やっと JLPT テストの N1 が合格(ごうかく)できました。 အခုမှဘဲ JLPT N1ကို အောင်တော့တယ်။ KyiPhyu(plz visit my page)
1. 速(はや)く泳(およ)げるように、毎日練習(まいにちれんしゅう)しています。 မြန်မြန် ရေကူးနိုင်လာအောင် နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေတယ်။ 2. やっと自転車(じてんしゃ)に乗(の)れるようになりました。 အခုမှဘဲ စက်ဘီးစီးတတ်တော့်တယ်။ 3. 毎日日記(まいにちにっき)を書(か)くようにしています。 နေ့တိုင်း မှတ်တမ်းရေးဖြစ်အောင် ရေး(နေ)ပါတယ်။ 例文(れいぶん)
1. それは電子辞書(でんしじしょ)ですか。 …ええ。知(し)らないことを聞(き)いたら、すぐ調(しら)べられるように持(も)って いるんです。 အဲဒါ လျှပ်စစ်အဘိဓါန်လား။ အင်း မသိတဲ့အကြောင်းအရာရှိရင် ချက်ချင်းရှာလို့ရအောင် ဆောင်ထားတာလေ။ 2. カレンダーのあの赤(あか)い丸(まる)はどういう意味(いみ)ですか。 …ごみの日(ひ)です。忘(わす)れないように、つけてあるんです。 ပြက္ခဒိန်က ဟိုအနီရောအလုံးက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ အမှိုက်ပစ်ရမဲ့ ရက်လေ။ မမေ့အောင်လို့ ရေးမှတ်ထားတာလေ။ 3. 布団(ふとん)にはもう慣(な)れましたか。 …はい。初(はじ)めはなかなか寝(ね)られませんでしたが、今はよく寝(ね)られる ようになりました。 အိပ်ရာနဲ(့ အသစ်) ကျင့်သားရပြီလား။ ဟုတ်ကဲ့ အစပိုင်းတော့ တော်တော်နဲ့အိပ်လို့ မရဘူး အခုတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါပြီ။ 4. ショパンの曲(きょく)が弾(ひ)けるようになりましたか。 …いいえ、まだ弾(ひ)けません。 早(はや)く弾(ひ)けるようになりたいです。 Chopinရဲ့ သီချင်းကို ပီယာနိုနဲ့ တီးတတ်လာပြီလား။ ဟင့်အင်း မတီးတတ်သေးဘူး။ မြန်မြန် တီးတတ်ချင်ပါတယ်။
5. 工場(こうじょう)ができてから、この近(ちか)くの海(うみ)では泳(およ)げなくなり ました。 …そうですか。残念(ざんねん)ですね。 စက်ရုံရောက်လာပြီးမှ ဒီအနီးအနားက ပင်လယ်မှာ ရေကူးလို့မရတော့ဘူး (ရေများညစ်ပတ်လာသောကြောင်)့ ဟုတ်လား စိတ်မကောင်းစရာဘဲနော်။ 6. 甘(あま)いものは食(た)べないんですか。 …ええ。できるだけ食(た)べないようにしているんです。 そのほうが体(からだ)にいいですね。 အချိုမစားဘူးလား။ ဟုတ်တယ် တတ်နိုင်သလောက် မစားဘဲနဲ့နေတယ်။ အဲဒါ ကိုယ်ခန္တာကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်။ 7. コンサートは6時(じ)に始(はじ)まります。 絶対(ぜったい)に遅(おく)れないようにしてください。遅(おく)れたら、入(はい)れ ませんから。 …はい、わかりました。 concert က ၆နာရီမှာ စမယ်။ သေချာ နောက်မကျအောင်လုပ်နော်။ နောက်ကျရင် အထဲကို ဝင်လို့မရလို့။ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါပြီ။
Lesson 37 Grammar 1.受身動詞(うけみどうし)
受身動詞(うけみどうし)ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ယောက် ပြုလုပ်တာကိုခံရခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပြောင်းလဲပုံများကို အောက်ပါပုံတွင် လေ့လာပါ။ ဥပမာ။ ။ 聞(き)きます（kiki masu）⇒
聞(き)かれます（kikare masu）အုပ်စု ၁ ကြိယာ
借(か)りられます（kari raremasu）အုပ်စု ၂ ကြိယာ
試験(しけん)を合格(ごうかく)したので、先生(せんせい)に褒(ほ)められました。 စာမေးပွဲအောင်လို့ ဆရာချီးမွမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။
သတိပြုစရာ။ ။ 受身動詞(うけみどうし)ကိုသုံးရာတွင် အပြန်အလှန်သဘောရှိသော ကြိယာများတွင် သုံးလေ့မရှိပါ။ 別(わか)れる、話(はな)す、ケンカする ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက်လုပ်မှ ဖြစ်မြောက်တဲ့ ကြိယာများတွင် သုံးလေ့မရှိပါ။ 2. ～によって
A によって B が作(つく)られました
Aနဲ့လိုက်ပြီး Bကဖြစ်ပေါ်လာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာလို တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်လို့မရပေမဲ့ Bရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအားလုံးဟာ Aပေါ်တွင်မှုတည်တယ်ဟု လည်းအဓိပ္ပါယ် ကောက်လို့ ရပါတယ်။ သတိပြုရန်။ ။～によって ၏ရှေ့တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ လိုက်လေ့ရှိသည်။ KyiPhyu(plz visit my page)
1. 子(こ)どものとき、よく母(はは)にしかられました。 ခလေးတုန်းက အမေဆူတာ အရမ်းခံခဲ့ရတယ်။ 2. ラッシュの電車(でんしゃ)で足(あし)を踏(ふ)まれました。 ရထားကျပ်ကျပ်ထဲမှာ ခြေထောက်ကို တက်နင်းခံရတယ် 3. 法隆寺(ほうりゅうじ)は 608 年(ねん)に建(た)てられました。 Horyuji က ၆၀၈ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခြင်းခံရတယ် (တည်ဆောက်ထားရှိတယ်) 例文(れいぶん)
1. けさ、部長(ぶちょう)に呼(よ)ばれました。 မနက်တုန်က ဌါနမှုးအခေါ်ခံရတယ်။ …何(なに)かあったんですか。 တစ်ခုခုများရှိလို့လား။ 出張(しゅっちょう)のレポートの書(か)き方(かた)について注意(ちゅうい)されまし た。 ခရီးထွက်တုန်းက report ရေးထားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး သတိပေးခံခဲ့ရတယ် 2. どうしたんですか。 ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ …だれかに傘(かさ)を間違(まちが)えられたんです。 တစ်ယောက်ယောက်က ထီးမှားသွားလို့ (ထီးမှားသွားခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်)။ 3. また、新(あたら)しい星(ほし)が発見(はっけん)されましたよ。 ထပ်ပြီး ကြယ်အသစ်တွေပြန်ပြီတဲ့ …そうですか。 ဟုတ်လား 4. 今年(ことし)の世界子(せかいこ)ども会議(かいぎ)はどこで開(ひら)かれますか。 ဒီနှစ် ကမ္ဘာခလေးများ အစည်းအဝေးကို ဘယ်မှာ ကျင်းပမှာလဲ။ …広島(ひろしま)で開(ひら)かれます。 Hiroshimaမှာ ကျင်းပမယ်။
5. お酒(さけ)の原料(げんりょう)は何(なん)ですか。 အရက်ရဲ့ ကုန်ကြမ်းက ဘာလဲ။ …米(こめ)です。 ဆန်ပါ။ ビールは？ ဘီယာကကော …ビールは麦(むぎ)から造(つく)られます。 ဘီယာက ဂျုံကနေ ပြုလုပ်ထားတယ် 6. ドミニカでは何語(なにご)が使(つか)われていますか。 Dominika မှာ ဘာဘာသာစကား အသုံးပြုနေသလဲ …スペイン語(ご)が使(つか)われています。 စပိန်ဘာသာကို အသုံးပြုနေပါတယ် 7. 先生(せんせい)、飛行機(ひこうき)は誰(だれ)が発明(はつめい)したんですか。 ဆရာ လေယာဉ်ပျံကို ဘယ်သူက တီထွင်ခဲ့တာလဲ …飛行機(ひこうき)はライト兄弟(きょうだい)によって発明(はつめい)されました。 လေယာဉ်ပျံက Wright ညီအကိုကနေ တီထွင်ခဲ့တယ်။
Lesson 38 Grammar 1.V のは楽(たの)しいです
အဓိပ္ပါယ် -လုပ်ရတာပျော်တယ် ပျော်တယ် 楽(たの)しい ရဲ့နေရာမှာ အခြားနာမဝိသေသနများနှင့်လည်း အစားထိုး၍သုံးလို့ရပါသည်။ 海岸(かいがん)で散歩(さんぽ)するのは楽(たの)しいです。 ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတာပျော်တယ် 日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)するのはおもしろいです。 ဂျပန်စာကိုလေ့လာရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ 2.V のが好(す)きです
အဓိပ္ပါယ် -လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ が နှင့်အမြဲတွဲသုံးလေ့ရှိသော နာမဝိသေသနများအတွက် V のが ဖြင့်သုံးပါတယ်။ が ဖြင့်သုံးသော နာမဝိသေသနများ- 好(す)き、嫌(いや)、上手(じょうず)、下手(へた)、ほ しい 涼(すず)しいのが好(す)きです。 အေးတာကြိုက်တယ် 整理(せいり)するのが上手(じょうず)ですね。 အစီအစဉ်တကျသိမ်းဆည်းတာ တော်တယ်နော် 3.V のを忘(わす)れました
အဓိပ္ပါယ် -လုပ်ဖို့မေ့သွားတယ် မဖြစ်မနေလုပ်ရမဲ့အလုပ်တခုကို လုပ်ဖို့မေ့သွားတဲ့အခါတွင် အသုံးပြုသည် 玄関(げんかん)にカギをかけるのを忘(わす)れた。 အိမ်တံခါးမကြီးသော့ခတ်ဖို့မေ့သွားတယ်။
1. 絵(え)をかくのは楽(たの)しいです。 ပန်းချီဆွဲရတာ ပျော်တယ်။ 2. わたしは星(ほし)を見(み)るのが好(す)きです。 ကျွန်တော်က ကြယ်တွေကို ကြည့်ရတာ ကြိုက်တယ်။ 3. 財布(さいふ)を持(も)ってくるのを忘(わす)れました。 ပိုက်ဆံအိပ်ကို ယူလာဖို့ မေ့ခဲ့တယ်။ 4. わたしが日本(にほん)へ来(き)たのは去年(きょねん)の 3(３)月(がつ)です。 ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုရောက်ခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လကဖြစ်ပါတယ်။ 例文(れいぶん)
1. 日記(にっき)を続(つづ)けていますか。 …いいえ、３(み)日(っか)でやめてしまいました。 始(はじ)めるのは簡単(かんたん)ですが、続けるのは難(むずか)しいですね。 နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ဆက်ပြီးရေးဖြစ်လား ဟင့်အင်း ၃ရက်လောက်နဲ့ နားလိုက်တယ် စတာကလွယ်ပေမဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့က ခဲယဉ်းတယ်နော် 2. 花(はな)がたくさんあって、きれいな庭(にわ)ですね。 …ありがとうございます。 夫(おっと)は花(はな)を育(そだ)てるのが上手(じょうず)なんです。 ပန်းတွေအများကြီးနဲ့ လှလိုက်တာနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယောက်ျားကပန်းစိုက်တာ တော်တယ်လေ။ 3. 東京(とうきょう)はどうですか。 …人(ひと)が多(おお)いですね。それにみんな歩(ある)くのが速(はや)いですね。 တိုကျိုကဘယ်လိုလဲဟင် လူအရမ်းများတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးလမ်းလျှောက်တာ အရမ်းမြန်တယ်။
4. あ、いけない。 …どうしたんですか。 車(くるま)の窓(まど)を閉(し)めるのを忘(わす)れました。 ဟာ မဖြစ်တော့ဘူး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကားတံခါးမှန်ကို ပိတ်ခဲ့ဖို့မေ့ခဲ့ပြီ 5. 木村(きむら)さんに赤(あか)ちゃんが生(う)まれたのを知(し)っていますか。 …いいえ、知(し)りませんでした。いつですか。 １(い)ヶ(っか)月(げつ)ぐらいまえです。 ခီမူရာစံ ခလေးမွေးတယ်တဲ့ သိပြီးပြီလား ဟင့်အင်း မသိသေးဘူး။ ဘယ်တုန်းကလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က 6. 初(はじ)めて好(す)きになった人(ひと)のことを覚(おぼ)えていますか。 …ええ、彼女(かのじょ)に初(はじ)めてあったのは小学校(しょうがっこう)の教室 (きょうしつ)です。 彼女(かのじょ)は音楽(おんがく)の先生(せんせい)でした。 အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အကြောင်းကိုမှတ်မိသေးလား။ အင်း သူမနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တာ မူလတန်းကျောင်းကစာသင်ခန်းမှာပါ။ သူမက ဂီတဆရာမလေ။
Lesson 39 Grammar 1．V て＋Adj/V
အသုံးပြုပံ-ု အရှေ့က Verb နှင့်လိုက်၍ နောက်က Adj ကစိတ်ခံစားမှုကို ဖေါ်ပြသောအခါတွင် သုံးသည် 新聞(しんぶん)を読(よ)んで、びっくりしました。 သတင်းစာဖတ်ပြီး လန့်သွားတယ် 母(はは)が退院(たいいん)して、安心(あんしん)しました。 အမေဆေးရုံကဆင်းလို့ စိတ်အေးသွားပြီ 2．Adj で/くて＋V ない
အသုံးပြုပံ-ု အရှေ့မှ Adj ကြောင့် နောက်က verb သည် လက်ရှိအခြေအနေ၊ ခံစားချက်တို့ကိုဖေါ်ပြသည့် အခါတွင်သုံးသည် 内容(ないよう)が複雑(ふくざつ)で、良(よ)くわかりません。 အကြောင်းအရာက ရှုတ်ထွေးနေလို့ ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူး 遠(とお)くて、良(よ)く見(み)えません ဝေးနေလို့ ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး 3．N で＋結果(けっか)
အသုံးပြုပံ-ု အရှေ့မှ Nounအရ နောက်ပိုင်းတွင် အကျိုး/အပြစ်ကိုဖေါ်ပြသည့်အခါတွင်သုံးသည်။ 火事(かじ)で家(いえ)が焼(や)けました。 မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်လောင်သွားတယ် 洪水(こうずい)で、たくさんの人(ひと)が困(こま)っています。 ရေကြီးမှုကြောင့် လူအများကြီး ဒုက္ခရောက်နေတယ် 4．N な/Adj/V ので（理由）＋V
အသုံးပြုပံ-ု အရင်ဆုံးအကြောင်းပြချက်ကိုပြပြီး နောက်ကVervဖြင့် လုပ်ဆောင်မည့် အကြောင်းအရာကို ဖေါ်ပြရာတွင်သုံးသည်။ おなかが痛(いた)いので、病院(びょういん)へ行(い)きます。 ဗိုက်နာလို့ ဆေးရုံသွားမယ် 遅刻(ちこく)なので、早(はや)く歩(ある)きます。 နောက်ကျနေလို့ မြန်မြန်လမ်းလျှောက်မယ် KyiPhyu(plz visit my page)
1. ニュースを聞(き)いて、びっくりしました。 သတင်းနားထောင်ပြီး လန့်သွားတာဘဲ 2. 地震(じしん)でビルが倒(たお)れました。 ငလျှင်ကြောင့် အဆောက်အဦးက ပြိုသွားတယ် 3. 体(からだ)の調子(ちょうし)が悪(わる)いので病院(びょういん)へ行(い)きます。 ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ ဆေးရုံသွားမလို့ 例文(れいぶん)
1. お見合(みあ)いはどうでしたか。 …写真(しゃしん)を見(み)たときは、すてきな人(ひと)だと思(おも)いましたが、会 (あ)って、がっかりしました。 တွေ့ဆုံပွဲသွားတာဘယ်လိုလဲဟင် ဓါတ်ပုံကြည့်တုန်းကတော့ လှတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တွေ့ကြည့်တော စိတ်ပျက်သွားတယ် 2. 今度(こんど)の土曜日(どようび)にみんなでハイキングに行くんですが、いっしょ に行(い)きませんか。 …すみません。土曜日(どようび)はちょっと都合(つごう)が悪(わる)くて、行(い)け ないんです。 အခုလာမဲ့စနေနေ့မှာ အားလုံးနဲ့ hiking သွားမလို့ အတူတူသွားရအောင်လား စိတ်မကောင်းပါဘူး စနေနေ့ မအားလို့ မသွားနိုင်ဘူး 3. あの映画(えいが)はどうでしたか。 …話(はなし)が複雑(ふくざつ)で、よくわかりませんでした。 အဲဒီရုပ်ရှင် ဘယ်လိုလဲ စကားတွေက ရှုတ်ထွေးပြီး သိပ်နားမလည်ဘူး 4. 遅(おそ)くなって、すみません。 …どうしたんですか。 事故(じこ)でバス(ばす)が遅(おく)れたんです。 နောက်ကျသွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့ ဘတ်စ်ကားက နောက်ကျသွားတာ
5. これから飲(の)みに行(い)きませんか。 …すみません。用事(ようじ)があるので、お先(さき)に失礼(しつれい)します。 そうですか。お疲(つか)れ様(さま)でした。 အခုသွားသောက်ကြမလား စိတ်မရှိပါနဲ့ ကိစ္စရှိနေလို့ အရင်ပြန်မယ်နော် ဟုတ်လား ပင်ပန်းသွားပြီနော် 6. 最近(さいきん)、布団(ふとん)で寝(ね)ているんですが、便利(べんり)ですね。 …ベッドはどうしたんですか。 部屋(へや)が狭(せま)くて、邪魔(じゃま)なので、友達(ともだち)にあげました。 အခုတလော မွေ့ရာနဲ့အိပ်နေတာ အဆင်ပြေတယ်နော် ကုတင်က ဘယ်လိုဖြစ်လို့တုန်း အခန်းကကျင်းလို့ ရှုတ်တာနဲ့ဘဲ သူငယ်ချင်းကိုပေးလိုက်ပြီ
Lesson 40 Grammar 1．～かどうか
အကြောင်းတစ်ခုကို မေးခွန်းနှင့် အငြင်းမေးခွန်းပုံစံတွဲ၍ သုံးပါသည်။ သူ့ရဲ့နောက်တွင် 「わかりませ ん、覚(おぼ)えてません、知(し)っていますか、決(き)めていますか」စသော ကြိယာများ အလိုက်များသည်။ ဥပမာ 明日行(あしたい)くかどうかまだ決(き)めていません。 မနက်ဖန် သွားမလား မသွားဘူးလားဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး 安(やす)いかどうかわかりません。 ဈေးသက်သာလား မသက်သာဘူးလားဆိုတာ မသိဘူး 2．～てみます
အဓိပ္ပါယ် ⇒ အသုံးပြုပုံ ⇒
—ကြည့်ကြည့်မယ် V て+みます
ဥပမာ このお寿司(すし)おいしいですよ。食(た)べてみてください。 ဒီဆူရှီ ကောင်းတယ်နော်။ စားကြည့်ကြည့်ပါလား။ 3．Adj い⇒Adj さ
Adj い ကို い ဖြုတ်၍ さ ထည့်ခြင်းဖြင့် Noun အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ (အရှည)်
1. JL107 便(びん)は何時(なんじ)に到着(とうちゃく)するか、調(しら)べてください。 JL107လေယာဉ်က ဘယ်နှစ်နာရီမှာ ဆိုက်ရောက်မယ်ဆိုတာ ရှာကြည့်ပေးပါ။ 2. 台風(たいふう)9 号(ごう)は東京(とうきょう)へ来(く)るかどうか、まだわかりません。 မုန်တိုင်း နံပါတ် ၉ က ဘယ်တော့ တိုကျိုရောက်မလဲ မရောက်ဘူးလားဆိုတာ မသိသေးဘူး။ 3. 宇宙(うちゅう)から地球(ちきゅう)を見てみたいです。 အာကာသကနေ ကမ္ဘာမြေကို ကြည့်ချင်တယ်။ 例文(れいぶん) 1. 二次会(にじかい)はどこへ行(い)きましたか。 …酔(よ)っていたので、どこへ行(い)ったか、全然覚(ぜんぜんおぼ)えていないんです。 ပါတီပြီးရင် နောက်ဆက်တွဲဘယ်ကိုသွားခဲ့တာလဲ မူးနေလို့ ဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာ လုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူး 2. 山(やま)の高(たか)さはどうやって測(はか)るか、知(し)っていますか。 …さあ、どうやって測(はか)るんですか。 တောင်ရဲ့အမြင့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိုင်းတယ်ဆိုတာ သိလား ဟင်း ဘယ်လိုလုပ်တိုင်းဘာလိမ့်နော် 3. 私(わたし)たちが初(はじ)めてあったのはいつか、覚(おぼ)えていますか。 …昔(むかし)のことはもう忘(わす)れてしまいました。 ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံးတွေ့တာ ဘယ်တုန်းကလည်းဆိုတာ မှတ်မိလား ဟိုးအရင်တုန်းက အကြောင်းတွေက မေ့သွားပြီ 4. 忘年会(ぼうねんかい)に出席(しゅっせき)できるかどうか 20(はつ)日(か)までに返事(へんじ)を ください。 …はい、わかりました。 နှစ်ဟောင်းပျော်ရွှင်ပွဲကို တက်ရောက်မယ် မတက်ရောက်ဘူးဆိုတာ ၂၀ရက်အထိ အကြောင်းပြန်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါပြီ 5. あそこで何(なに)を調(しら)べるんですか。 …飛行機(ひこうき)に乗(の)る人(ひと)がナイフなど危険(きけん)なものを持(も)っていないか どうか、調(しら)べるんです。 ဟိုးမှာ ဘာကိုရှာနေတာလဲဟင် လေယာဉ်မှာ စီးမဲ့သူက ဓါးတို့ အန္တာရယ်များတဲ့ပစ္စည်းတွေ ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာ စစ်နေတာ 6. すみません。この服(ふく)を着(き)てみてもいいですか。 …はい、こちらでどうぞ。 တစိတ်လောက် ဒီအင်ကျီကို ဝတ်ကြည့်လို့ရလား ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘက်မှာ ဝတ်ကြည့်ပါ
Lesson 41 Grammar 1．N をいただきました
V て＋いただきました。 အဓိပ္ပါယ် ⇒ လက်ခံရရှိသည် မိမိထက်အသက်ကြီးသူ မိဘ၊ ဆရာ၊ အလုပ်မှ အထက်လူကြီးထံမှ တစ်ခုခုကို လက်ခံရရှိသည့်အခါမျိုးတွင် သုံးသည်။
お母(かあ)さんに誕生日(たんじょうび)プレゼントをいただきました。 အမေထံမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ 2．V て＋くださいました
အဓိပ္ပါယ် ⇒ တစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးတာကို လက်ခံသည် မိမိထက်အသက်ကြီးသူ မိဘ၊ ဆရာ၊ အလုပ်မှ အထက်လူကြီးထံမှ တစ်ခုခုလုပ်ပေးတာ ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါမျိုးတွင်သုံးသည်။
先生(せんせい)は私(わたし)に日本(にほん)の歴史(れきし)を教(おし)えてくださいまし た。 ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ဂျပန်သမိုင်း သင်ပေးခဲ့တယ်။ KyiPhyu(plz visit my page)
အဓိပ္ပါယ် ⇒ တစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးသည် မိမိထက်အသက်ငယ်သူ လက်အောက်ငယ်သား၊ မောင်နှမကို ကိုယ်က တစ်ခုခုလုပ်ပေး သည့်အခါမျိုးတွင်သုံးသည်။
私のペットミミちゃんにエサを作ってやりました。 ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို အစာလုပ်ကျွေးခဲ့တယ်။ 文型(ぶんけい)
1. 私(わたし)はワット(わっと)先生(せんせい)に本(ほん)をいただきました。 ကျွန်တော် ဆရာဝက်ထံမှ စာအုပ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ 2. 私(わたし)は課長(かちょう)に手紙(てがみ)の間違(まちが)いを直(なお)していただ きました。 ကျွန်တော်ကို ဦးစီးမှုးက စာမှားနေတာကို ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ 3. 部長(ぶちょう)の奥(おく)さんは私(わたし)にお茶(ちゃ)を教(おし)えてくださいま した。 ဌါနမှုးရဲ့ အမျိူးသမီးက ကျွန်တော့ကို ဂျပန်ရေနွေးထည့်နည်း သင်ပေးခဲ့တယ်။ 4. 私(わたし)は息子(むすこ)に紙飛行機(かみひこうき)を作(つく)ってやりました。 ကျွန်တော် သားကို စက္ကူလေယာဉ် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
1. きれいなお皿(さら)ですね。 …ええ。結婚(けっこん)のお祝(いわ)いに田中(たなか)さんがくださいました。 လှလိုက်တဲ့ ပန်းကန်နော် အင်း မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက တနာခါစံကနေ လက်ဖွဲ့အဖြစ် ရခဲ့တာ။ 2. お母(かあ)さん、あの猿(さる)にお菓子(かし)をやってもいい？ …いいえ。あそこにえさをやってはいけないと書(か)いてありますよ。 အမေ ဟိုကမြောက်ကို မုန့်ကျွေးလို့ရလား။ ဟင့်အင်း ဟိုးမှာ အစာမကျွေးရဘူးလို့ ရေးထားတယ်။ 3. 相撲(すもう)を見(み)に行(い)ったことがありますか。 …ええ。この間(あいだ)、部長(ぶちょう)に連(つ)れて行(い)っていただきました。 ဆူမိုကို သွားကြည့်ဖူးသလား။ အင်း ဟိုတလောက ဌါနမှုးက ခေါ်သွားပေးခဲ့တယ်။ とても面白(おもしろ)かったです。 အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ 4. タワポンさん、夏休(なつやす)みのホームステイはどうでしたか。 …楽(たの)しかったです。家族(かぞく)の皆(みな)さんがとても親切(しんせつ)にし てくださいました。 တဝါပုန်စံ နွေရာသီပိတ်ရက် home stay သွားခဲ့တာ ဘယ်လိုလဲ ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ မိသားစုအားလုံးက အရမ်းဖော်ရွေစွာနဲ့ ဆက်ဆံပေးခဲ့တယ်။ 5. お子(こ)さんの誕生日(たんじょうび)にはどんなことをしてあげますか。 …友達(ともだち)を呼(よ)んで、パーティーをしてやります。 ခလေးမွေးနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီး party လုပ်ပေးတယ် 6. 新(あたら)しいコピ(こぴ)ー機(き)の使(つか)い方(かた)がよく分(わ)からないんで すが、ちょっと教(おし)えてくださいませんか。 …いいですよ。 ကော်ပီစက်အသစ်ရဲ့ သုံးပုံသုံးနည်းကို သိပ်နားမလည်လို့ သင်ပေးလို့ရလား ရပါတယ်။
Lesson 42 Grammar 1．N のために/V ために
-ရန်/အတွက/် ဖို့ (တစ်ခုခုအတွက် ရည်ရွယ်၍ တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခြင်း )
日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)するために、来日(らいにち)しました。（V ために） ဂျပန်စာလေ့လာဖို့ ဂျပန်ကိုလာခဲ့တယ်။ 日本語(にほんご)の勉強(べんきょう)のために、来日(らいにち)しました。（N のために） ဂျပန်စာလေ့လာဖို့ ဂျပန်ကိုလာခဲ့တယ်။ 2．N に/V のに
-ရန်/အတွက/် ဖို့ (ために ဖြင့် သုံးပုံအလွန်တူပြီး အဓိပ္ပါယ်လည်းတူပါသည်။ のに ကို အချိန်ကို
ဖေါ်ပြသော စာကြောင်းများတွင် ပိုမိုအသုံးများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဈေးဝယ်တဲ့အခါ၊ ခရီးသွားတဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ ပုလင်းကိုဖွင့်တဲ့အခါ စတဲ့နေရာများတွင် အသုံးများတတ်ပါသည်။ ) 家(いえ)の近(ちか)くにス(す)ーパ(ぱ)ーができたので、買(か)い物(もの)するのに便利(べんり) です。（V のに） အိမ်နားမှာ စူပါအသစ်ဖွင့်လို့ ဈေးဝယ်ရတာလွယ်ကူတယ်။ 家(いえ)の近(ちか)くにス(す)ーパ(ぱ)ーができたので、買(か)い物(もの)に便利(べんり)です。 （N に） အိမ်နားမှာ စူပါအသစ်ဖွင့်လို့ ဈေးဝယ်ရတာလွယ်ကူတယ်။ 3．～は/～も
အဓိပ္ပါယ် ⇒～は ပြောသူ၏ ခံစားချက်နှင့်လိုက်၍ အရေအတွက်၊ ကိန်းဂဏန်း အနဲကို ပိုမိထင်ရှားအောင်ပြောသော အခါတွင်သုံးသည်။ ～も ပြောသူ၏ ခံစားချက်နှင့်လိုက်၍ အရေအတွက်၊ ကိန်းဂဏန်းအများ၊ ထင်ထားတာထက် များနေသောအခါများတွင် သုံးသည်။ A：日本(にほん)の結婚式(けっこんしき)はお金(かね)どれくらいかかりますか？ ဂျပန်က မင်္ဂလာဆောင်က ပိုက် ဆံလယ်လောက်ကုန်လဲ။ B：200 万円(まんえん)はかかります。 ယန်း သောင်း ၂၀၀တော့ ကုန်တယ်။ A：200 万円(まんえん)もかかるんですか。 ယန်း သောင်း၂၀၀တောင် ကုန်တယ်။
1. 将来(しょうらい)、自分(じぶん)の店(みせ)を持(も)つために、貯金(ちょきん)して います。 အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်ရန် ပိုက်ဆံစုနေတယ်။ 2. このはさみは花(はな)を切(き)るのに使(つか)います。 ဒီကပ်ကျေးက ပန်းတွေကိုညှပ်ဖ(ို့ ရန်) သုံးတယ်။ 例文(れいぶん)
1. この夏盆踊(なつぼんおど)りに参加(さんか)するために、毎日練習(まいにちれんし ゅう)しています。 ဒီနှစ်နွေရာသီ အိုဘွန်းအကမှာ ပါဝင်ဖို့ နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်နေတယ်။ …そうですか。楽(たの)しみですね。 ဟုတ်လား။ ပျော်စရာဘဲနော်။ 2. どうして一人(ひとり)で山(やま)に登(のぼ)るんですか。 ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်တည်း တောင်တက်မှာလဲ။ …一人(ひとり)になって考(かんが)えるために、山(やま)に行(い)くんです。 တစ်ယောက်တည်းနေပြီး စဉ်းစားဖိ(ု့ ချင်လ)ို့ သွားမှာ။ 3. 健康(けんこう)のために、何(なに)かしていますか。 ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ခုခု လုပ်နေပါသလား။ …いいえ。でも、来週(らいしゅう)から毎朝走(まいあさはし)ろうと思(おも)って います。 ဟင့်အင်း။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ပါတ်ကစပြီး မနက်တိုင်း ပြေးမယ်လို့ တွေးနေတယ်။ 4. きれいな曲(きょく)ですね。 ကောင်းလိုက်တဲ့ သီချင်း(တီးလုံး) နော်။ …「エリーゼのために」ですよ。ベートーベンがある女(おんな)の人(ひと)のため に作(つく)った曲(きょく)です。 “Elise no tameni” လေ။ Beethoven က မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် သီးကုန်းထားတဲ့ သီးချင်းလေ။
5. これは何(なに)に使(つか)うんですか。 ဒါ ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။ …ワインを開(ひら)けるのに使(つか)います。 ဝိုင်ပုလင်းကိုဖွင်းဖို့ သုံးတာ။ 6. 日本(にほん)では結婚式(けっこんしき)をするのにどのくらいお金(かね)が必要(ひ つよう)ですか。 ဂျပန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဘယ်လောက်လောက် ငွေလိုအပ်ပါသလဲ။ …200 万円(まんえん)は要(い)ると思(おも)います。 ယန်း သောင်း ၂၀၀လောက် လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ えっ、200 万円(まんえん)も要(い)るんですか。 အယ် ယန်း သောင်း ၂၀၀တောင် လိုတယ်လား။ 7. そのバックは入れるところがたくさんありますね。 အဲဒီအိပ်က ထည့်စရာနေရာအများကြီးဘဲနော်။ …ええ。財布や書類やハンカチが別々にしまえるので、旅行や仕事に便利なんです。 အင်း ပိုက်ဆံအိပ် စာရွတ်စာတန်းတွေနဲ့ လက်ကိုင်ပဝါကို သပ်သပ်စီခွဲပြီး သိမ်းလို့ရလို့ ခရီးသွားနဲ့ အလုပ်မှာလည်း သုံးရလွယ်ကူတယ်။
Lesson 43 Grammar 1．～そうです
-မဲ့ပုံဘဲ (အကြည့်အမြင်ဖြင့် မှန်းဆ၍ပြောခြင်း)
ます Formကြိယာမှ ます ကိုဖြုတ် そうです ကိုထည့် V ます
あの本(ほん)は棚(たな)から落(お)ちそうです。 ဟိုစာအုပ် စဉ်ပေါ်က ဖြုတ်ကျတော့မယ်။ (ဖြုတ်ကျမဲ့ပုံဘဲ) い adjမှ い ကိုဖြုတ် そうです ကိုထည့် い adj
い adj +
これはりんごケーキですか。おいしそうですね。 ဒါပန်းသီးကိတ်လား။ အရသာရှိမဲ့ပုံဘဲ な adjမှ な ကိုဖြုတ် そうです ကိုထည့် な adj
な adj +
ひまな ⇒ အားမဲ့ပုံဘဲ
ない အငြင်းပုံမှ い ကိုဖြုတ် さそうです ကိုထည့် V/adj ない
ほしいものがこの店(みせ)になさそうですね。 လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းက ဒီဆိုင်မှာ ရှိပုံမရဘူး 2．～てきます
အဓိပ္ပါယ် ⇒ –လာမယ် 持(も)ってきます ယူလာမယ် 行(い)ってきます သွားပြီးပြန်လာမယ် (သွားလိုက်အုန်းမယ်) 見(み)てきます ကြည့်လာမယ် 3．V る+つもりです
အဓိပ္ပါယ် ⇒ ရည်ရွယ်တယ် (လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားသည်)6時(じ)に帰(かえ)るつもりです。 ၆နာရီမှာ ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်တယ် 今年(ことし)の JLPT テストを受(う)けるつもりです。 ဒီနှစ် JLPTစာမေးပွဲကို ဖြေဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ KyiPhyu(plz visit my page)
1. 今(いま)にも雨(あめ)が降(ふ)りそうです。 အခုချက်ချင်းပင် မိုးရွာမဲ့ပုံဘဲ 2. ちょっと切符(きっぷ)を買(か)って来(き)ます。 ခဏလောက် လက်မှတ်သွားဝယ်လိုက်အုန်းမယ်။ 例文(れいぶん) 1. 上着(うわぎ)のボタンがとれそうですよ。 အပေါ်ထပ်အင်ကျီးရဲ့ ကြယ်သီးက ပြုတ်ထွက်ခါနီးနေပြီ …あっ、ほんとうですね。どうもありがとうございます。 ဟို ဟုတ်တယ်နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 2. 暖(あたた)かくなりましたね。 နွေးလာပြီနော် …ええ、もうすぐ桜(さくら)が咲(さ)きそうですね。 အင်း သိပ်မကြာခင် ဆာကူရာပန်း ပွင့်မဲ့ပုံဘဲ 3. ドイツのりんごのケーキです。どうぞ。 ဂျာမနီက ပန်းသီးနဲ့လုပ်တဲ့ ကိတ်မုန့်ပါ။ စားကြည့်ပါ။ …わあ、おいしそうですね。いただきます。 ဟယ် ကောင်းမဲ့ပုံဘဲ။ စားမယ်နော်။ 4. 今度(こんど)の課長(かちょう)、頭(あたま)がよさそうだし、まじめそうですね。 ဒီတစ်ခေါက်ဦးစီမှုးက ခေါင်းကောင်းမဲ့ပုံဘဲ တည်ကြည်တဲ့ပုံလဲရတယ် …ええ、でも、服(ふく)のセンスはなさそうですね。 အင်း ဒါပေမဲ့ အဝတ်အစားပုံတုန်းကြီးဖြစ်မဲ့ပုံဘဲ (ဖက်ရှင်မကျဘူး) 5. 資料(しりょう)がたりませんね。 စာရွတ်စာတန်းတွေ မလောက်ဘူးနော် …すみませんが、ちょっとコピーして来てください。 စိတ်မရှိပါနဲ့ အနည်းငယ် ကော်ပီကူးလာခဲ့ပါ 6. ちょっと出(で)かけて来(き)ます。 ခဏအပြင်သွားလိုက်အုန်းမယ် …何時(なんじ)ごろ帰(かえ)りますか。 ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ ４時(じ)までには帰(かえ)るつもりです。 ၄နာရီမထိုးခင်တော့ ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်
Lesson 44 Grammar 1．～すぎます
အဓိပ္ပါယ် ⇒ -များသွားတယ်။ -လွန်သွားတယ် V ます
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ⇒ な Adj
きれいな ⇒ きれいすぎます လှသော ⇒ လှလွန်းသည် 2．～やすい
အဓိပ္ပါယ် ⇒ အဆင်ပြေတယ်။ လွယ်ကူတယ် V ます
–လုပ်သည်/ ရွေးချယ်သည်။ ဖေါ်ပြပါဝင်သော Adj, Noun များကို လုပ်မည်/
ရွေးချယ်သည် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ い Adj
早(はや)い မြန်သော ⇒
きれいな ⇒ きれいにします သန့်ရှင်းသော ⇒ သန့်ရှင်းအောင်လပ်ုသည် Noun ⇒
Noun + にします
ဂျပန်အကြော် ⇒ ဂျပန်အကြော်ကိုစားမယ် (ဂျပန်အကြော်ကို ရွေးချယ်သည်) 文型(ぶんけい)
1. ゆうべお酒(さけ)を飲(の)みすぎました。 ညက အရက်သောက်တာများသွားတယ်။ 2. このパソコンは使(つか)いやすいです。 ဒီကွန်ပြူတာက သုံးရတာလွယ်ကူတယ်။ 3. ズボンを短(みじか)くしてください。 ဘောင်းဘီကို တိုပေးပါ 4. 今夜(こんや)は楽(たの)しく踊(おど)りましょう。 ဒီကျတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကရအောင် 例文(れいぶん)
1. 泣(な)いているんですか。 ငိုနေတာလား …いいえ、笑(わら)いすぎて、涙(なみだ)が出(で)たんです。 အင့်ဟင် ရယ်ရလွန်းလို့ မျက်ရည်ထွက်လာတာ။ 2. 最近(さいきん)の車(くるま)は操作(そうさ)が簡単(かんたん)ですね。 အခုနောက်ပိုင်းကားတွေက ကိုင်တွယ်ရတာ လွယ်တယ်နော်။ …ええ。でも、簡単(かんたん)すぎて、運転(うんてん)がおもしろくないです。 အင်း ဒါပေးမဲ့ လွယ်လွန်းတော့ ကားမောင်းရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူး 3. 田舎(いなか)と町(まち)と、どちらが住(す)みやすいですか。 တောနဲ့မြိုံ့နဲ့ ဘယ်မှာနေရတာ နေလို့အဆင်ပြေလဲ (နေရလွယ်လ)ဲ …田舎(いなか)のほうが住(す)みやすいとおもいます。 တောက နေရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ် 物価(ぶっか)も安(やす)いし、空気(くうき)もきれいですから。 ကုန်ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပြီး လေကောင်းလေသန့်လည်းရတယ်။ KyiPhyu(plz visit my page)
4. このコップは丈夫(じょうぶ)でわれにくいですよ。 ဒီခွက်က မာကျောပြီး မကွဲလွယ်ဘူး …子(こ)どもが使(つか)うのに安全(あんぜん)で、いいですね。 ခလေးလည်းစိတ်ချလက်ချ သုံးလို့ရလို့ ကောင်းတယ်နော် 5. もう夜(よる)遅(おそ)いですから、静(しず)かにしていただけませんか。 ညနက်နေပြီ တိတ်တိတ်နေပေးပါ။ …はい。すみません。 ဟုတ်ကဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် 6. 今晩(こんばん)のおかずは何(なに)にしましょうか。 ဒီည ဘာဟင်း ချက်ရင်ကောင်းမလဲ …きのうは肉(にく)を食(た)べたから、きょうは魚料理(さかなりょうり)にしよう よ。 မနေ့က အသားစားခဲ့တာဆိုတော့ ဒီနေ့ ငါးချက်ရအောင် 7. 電気(でんき)や水(みず)は大切(たいせつ)に使(つか)いましょう。 လျှပ်စစ်မီးတို့ ရေတို့ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချရအောင် …はい、わかりました。 ဟုတ်ကဲ့ နားလည်ပါပြီ 8. 野菜(やさい)は細(こま)かく切(き)って、卵(たまご)と混(ま)ぜます。 ဟင်းသီးဟင်းရွတ်တွေကို နှုတ်နှုတ်ဆင်ပြီး ကြက်ဥနဲ့ရောမွှေမယ်။ …はい。これでいいですか。 ဟုတ်ကဲ့ ဒါလိုရလား။
Lesson 45 Grammar 1．～場合(ばあい)
အဓိပ္ပါယ် ⇒ အဲဒီအချိန်ကျရင် V る/V た/V ない
雨(あめ)が降(ふ)った場合(ばあい)、係(かか)りの人(ひと)に連絡(れんらく)くさい。 မိုးရွာခဲ့ရင် တာဝန်ရှိသူကို အကြောင်းကြားပါ။ 明日来(あしたこ)れない場合(ばあい)、連絡(れんらく)してください。 မနက်ဖန် မလာနိုင်ရင် အကြောင်းကြားပါ။ 2．～のに
အဓိပ္ပါယ် ⇒ -ရဲ့သားနဲ့ (မှန်းဆထားသော အကြောင်းအရာ မိမိထင်သလို ဖြစ်မလာသော အခါမျိုးတွင် သုံးသည်) V る/V た/V ない
ダイエットをしたのに、太(ふと)ってしましました。 အစားရှောင် (ဝိတ်ချ)နေရဲ့သားနဲ့ ဝလာတယ်။ 一生懸命勉強(いっしょうけんめいべんきょう)したのに、100 点取(てんと)れなかった です。 ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ စာကျက်ခဲ့ပေမဲ့လည်း အမှတ် ၁၀၀မရခဲ့ဘူး။ 文型(ぶんけい)
1. カードをなくした場合(ばあい)は、すぐカード会社(かいしゃ)に連絡(れんらく)し てください。 ကဒ်ပြောက်သွားရင် ချက်ခြင်း ကဒ်ကုမ္ပဏီကို အကြောင်းကြားပါ။ 2. 約束(やくそく)をしたのに、彼女(かのじょ)は来(き)ませんでした。 ကတိလုပ်ထားရဲ့သားနဲ့ သူမက မလာခဲဘူး။
1. まちがい電話(でんわ)をかけた場合(ばあい)は、何(なん)と言(い)って謝(あやま)っ たらいいですか。 ဖုန်းမှားပြီးဆက်ခဲ့မိရင် ဘယ်လိုပြောပြီးတောင်းပြန်ရင် ကောင်းမလဲ။ …「すみません。番号(ばんごう)をまちがえました。」と言(い)えばいいです。 တောင်းပန်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်မှားသွားလို့ပါ လို့ပြောရင်ရတယ်လေ။ 2. これがこのコンピューターの保証書(ほしょうしょ)です。 ဒါကွန်ပြူတာရဲ့ အာမခံကဒ်ပါ။ 調子(ちょうし)が悪(わる)い場合(ばあい)は、この番号(ばんごう)に連絡(れんらく) してください。 ပျက်တာရှိရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို အကြောင်းကြားပါ။ …はい、わかりました。 ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါပြီ။ 3. あのう、この図書館(としょかん)ではコピーの領収書(りょうしゅうしょ)がもらえ ますか。 ဟိုလေ ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ ကော်ပီကူးတဲ့ ဘောင်ချာ ရနိုင်သလား။ …ええ、必要(ひつよう)な場合(ばあい)は係(がかり)に言(い)ってください。 အင်း လိုအပ်ရင် တာဝန်ရှိသူကို ပြောပါ။ 4. 火事(かじ)や地震(じしん)の場合(ばあい)は、絶対(ぜったい)にエレベーターを使 (つか)わないでください。 မီးလောင်တာတို့ ငလျင်လုပ်တာတို့ဖြစ်ရင် လုံးဝ ဓာတ်လှေခါး မသုံးပါနဲ့ …はい、わかりました。 ဟုတ်ကဲ့ နားလည်ပါပြီ 5. スピーチはうまくいきましたか。 မိန့်ခွန်းပြောတာ အဆင်ပြေခဲ့လား။ …いいえ、一生懸命(いっしょうけんめい)練習(れんしゅう)して覚(おぼ)えたのに、 途中(とちゅう)で忘(わす)れてしまいました。 ဟင့်အင်း ကြိုးစားပန်းစား လေ့ကျင့်ထားရဲ့သားနဲ့ တစ်ဝက်မှာ မေ့သွားခဲ့တယ်။ 6. 雨(あめ)なのに、ゴルフですか。 မိုးရွာနေတာတောင် ဂေါ့သွားမလို့လား …ええ。下手(へた)だけど、好(す)きなんです。 အင်း သိပ်မတော်ပေမဲ့ (ညံပေမဲ)့ ကြိုက်လို့ပါ။ KyiPhyu(plz visit my page)
Lesson 46 Grammar 1．V る/V ている/V た+ところ
V る+ところ အဓိပ္ပါယ် ⇒
လုပ်တော့မလို့ အခုဘဲလုပ်တော့မလို့ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်
今(いま)から買(か)い物(もの)に行(い)くところです。 အခုဘဲ ဈေးဝယ်သွားတော့မလို့ 寝(ね)るところです。 အိပ်တော့မလို့ V ている+ところ အဓိပ္ပါယ် ⇒
ご飯(はん)を食(た)べているところです。 ထမင်းစားနေတုန်းဘဲ V た+ところ အဓိပ္ပါယ် ⇒
仕事終(しごとお)わったところです。 အလုပ်ပြီးရုံဘဲရှိသေးတယ်။ 2．V た+ばかり အဓိပ္ပါယ် ⇒
လုပ်ပြီးခါစ （ばかり သည်「V た＋ところ」နှင့် အဓိပ္ပါယ် အလွန်တူပါသည်။ ဒါကြောင့် သုံးဆွဲရတွင်
ရှုတ်ထွေးတတ်၍ ばかり ကို တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်သာ လုပ်သော ကိစ္စများတွင် အသုံးများသည်။ ဥပမာ 入学(にゅうがく)する、家(いえ)を建(た)てる、卒業(そつぎょう)する တို့ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို ところ ဖြင့် သုံးလို့မရပါ။ ところ ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကိစ္စများဖြစ်သော ご飯(はん)を食(た)べる、 仕事(しごと)が終(お)わる、寝(ね)る စသော သမရိုးကျ ကိစ္စများတွင် အသုံးများပါသည်။ 日本(にほん)へ来(き)たばかりです。 ဂျပန်ကို ရောက်ခါစဘဲ ရှိသေးတယ်။ ～ばかりの N ばかりの ရဲ့နောက်မှာ နာမ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ あの人(ひと)は結婚(けっこん)したばかりの田中(たなか)さんでしょう。 ဟိုကလူက မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစ တနာခာစံ မဟုတ်လား။ 3．V る/V ない/Adj な/N の+はず
(အထင်နဲ့ပြောတာဖြစ်လို့ 100% ကျိမ်းသေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်ချေနှုန်းမြင့်မားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါတယ်။) 彼(かれ)はお酒(さけ)を飲(の)まないはずです。 သူက အရက်ကျိမ်းသေ မသောက်ဘူး (သူ အရက်သောက်လိမ့်မယ်လို့ (ကျိမ်းသေ) မထင်ဘူး) 明日(あした)は雨(あめ)のはずです。 မနက်ဖန် မိုးကျိမ်းသေ ရွာလိမ့်မယ်။ 文型(ぶんけい)
1. 会議(かいぎ)は今(いま)から始(はじ)まるところです。 အစည်းအဝေးက အခုလဲ စတော့လို့။ 2. 彼(かれ)は３月(がつ)に
သူက မတ်လတုန်းက တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရပြီးခါစ။ 3. 書類(しょるい)は速達(そくたつ)で出(だ)しましたから、あした着(つ)くはずです。 စာရွတ်စာတန်းတွေကို အမြန်ချောနဲ့ ပို့ထားလို့ မနက်ဖန် ကျိမ်းသေရောက်လိမ့်မယ်။ 例文(れいぶん)
1. もしもし、田中(たなか)ですか、今(いま)いいでしょうか。 ဟယ်လို တနာခါဖြစ်ပါတယ်။ အခု ရရဲ့လားဟင်။ …すみません。今(いま)から出(で)かけるところなんです。 စိတ်မရှိပါနဲ့ အခုအပြင်သွားတော့မလို့ 帰(かえ)ったら、こちらから電話(でんわ)します。 ပြန်လာရင် ဒီကနေ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်။ 2. 故障(こしょう)の原因(げんいん)は
ပျက်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်း သိပြီလား။ …いいえ、今(いま)調(しら)べているところです。 ဟင့်အင်း အခု ရှာနေတုန်းဘဲ
3. 渡辺(わたなべ)さんはいますか。 ဝတာနာဘဲစံ ရှိပါသလား။ …あ、たった今(いま)帰(かえ)ったところです。 ဟာ အခုလေးတင် ပြန်သွားတယ်။ まだ
ဓါတ်လှေကားနားမှာဘဲ ရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်။ 4. 仕事(しごと)はどうですか。 အလုပ်က ဘယ်လိုလဲ။ …先月(せんげつ)
りません。 ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ ကုမ္ပဏီကို ဝင်ခါစဆိုတော့ သိပ်မသိသေးဘူး။ 5. このビデオカメラ、先週(せんしゅう)買(か)ったばかりなのに、もう動(うご)かな いんです。 ဒီ ဗီဒီအိုကင်မရာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဝယ်ခါစဘဲရှိသေးတာကို အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ …じゃ、ちょうと見(み)せてください。 ကဲ ခဏပြပါအုန်း 6. テレサの熱(ねつ)は下(さ)がるでしょうか。 တဲလဲစာရဲ့ အဖျားကျပါ့မလား …今(いま)注射(ちゅうしゃ)をしましたから、３時間(じかん)後(ご)には下(さ)がる はずです。 အခု ဆေးထိုးပြီးပြီဆိုတော့ ၃နာရီလောက်ကြာရင် ကျိမ်းသေ ကျပါလိမ့်မယ်
Lesson 47 Grammar 1．どうも
မိမိ၏ထင်မြင်ချက်ဖြင့် မှန်းဆ၍ပြောသော အခါတွင်သုံးသည် စာကြောင်း၏ရှေ့တွင်ထားသုံးလေ့ရှိပြီး စာကြောင်း၏နောက်တွင် ようだ/そうだ များလိုက်လေ့ရှိသည်။ でしょう、かもしれない、～とおもう များဖြင့်တွဲမသုံးပါ どうも―――ようだ。 どうも雪(ゆき)が降(ふ)りそうですね。 နှင်းကျတော့မဲ့ပုံဘဲနော် 2．～によると
တခြားသူထံမှကြားထားသော အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ပြောသော အခါတွင်သုံးသည်။ ～によると―――V る/V た/V ない/Adj い/Adj だ/N だ+そうです 天気予報(てんきよほう)によると、明日(あした)は雨(あめ)だそうです。 မိုးလေဝသ သတင်းအရ မနက်ဖန် မိုးရွာမယ်တဲ့ テレビのニュースによると、東京(とうきょう)で地震(じしん)があったそうです。 တီဗီသတင်းအရ တိုကျိုမှာ ငလျှင်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ 3．～ようです
မိမိ၏ထင်မြင်ချက်ဖြင့် မှန်းဆ၍ပြောသည့် အခါတွင်သုံးသည် ―――V る/V た/V ない/Adj い/Adj な/N の+ようです 昨日(きのう)の晩雨(ばんあめ)が降(ふ)ったようです。 မနေ့ညက မိုးရွာခဲ့တဲ့ပုံဘဲ။ (အထင်နဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပြီး တကယ်ရွာမရွာတော့ သိပ်မသေချာသော အခြေအနေမျိုးဖြစ်သည်)
文型(ぶんけい) 1. 天気予報(てんきよほう)によると、あしたは寒(さむ)くなるそうです。 မိုးလေဝသ သတင်းအတိုင်းဆိုရင် မနက်ဖန် အေးမယ်ဆိုဘဲ။ 2. 隣(となり)の部屋(へや)にだれかいるようです。 အနားကအခန်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိမဲ့ ပုံဘဲ။ 例文(れいぶん) 1. 新聞(しんぶん)で読(よ)んだんですが、１月(がつ)に日本語(にほんご)の
いかい)があるそうですよ。ミラーさんも出(で)てみませんか。 သတင်းစာဖတ်လိုက်တော့ ဇန်နဝါရီလမှာ ဂျပန်စာကားပြောပြိုင်ပွဲ ရှိတယ်ဆိုဘဲ။ မီလာစံ ဝင်ပြိုင်ကြည့်ပါလား။ …そうですね。考(かんが)えてみます。 ဟုတ်တယ်နော် စဉ်းစားပါမယ်။ 2. クララさんは子(こ)どものとき、フランスに住(す)んでいたそうです。 ခုလာလာက ကလေးဘဝတုန်းက ပြင်သစ်မှာ နေခဲ့တယ်တဲ့။ …それでフランス語(ご)もわかるんですね。 ဒါကြောင့် ပြင်သစ်စကားလည်း နားလည်းတာကိုး။ 3. パワー電気(でんき)の新(あたら)しい電子辞書(でんしじしょ)はとても使(つか)いやすくて、 いいそうですよ。 ပါဝါလျှပ်စစ်က အသစ်ထုပ်လိုက်တဲ့ လျှပ်စစ်အဘိဓါန်က သုံးရတာလွယ်ပြီး ကောင်းတယ်တဲ့။ …ええ。わたしはもう買(か)いました。 အင်း ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသွားပြီ။ 4. この間(あいだ)インドネツアのバリ島(とう)へ遊(あそ)びに行(い)って来(き)ました。 ဟိုတစ်လောက အင်ဒိုနီရှား ဘာလီကျွန်းကို အလည်သွားခဲ့တယ်။ …とてもきれいな所(ところ)だそうですね。 အရမ်းလှတဲ့ နေရာလို့ ကြားဖူးတယ်။ ええ。ほんとうによかったです。 အင်း တကယ့်ကို ကောင်းခဲ့တယ်။ 5. にぎやかな声(こえ)がしますね。 ဆူဆူညံညံအသံ ကြားရတယ်။ …ええ。パーティーでもしているようですね。 အင်း ပါတီလုပ်နေတာ ဖြစ်မယ်။
Lesson 48 Grammar 1．使役動詞(しえきどうし)
စေခိုင်းခြင်းခံ ကြိယာများ ⇒အမိန့်ပေး။ စေခိုင်းခြင်း ကိစ္စများတွင် သုံးသည်။ ⇒စေခိုင်းသူကို ကတ္တားတွင် ထား၍သုံးသည်။
အုပ်စု ၁ ကြိယာများ (1g) V ます ၏ ます ရှေ့တွင်ရှိသော စာလုံးနှင့်လိုက်၍ ပြောင်းပုံမတူပါ။ အပေါ်တွင် ပြထားတဲ့အတိုင်း ます ကိုဖြုတ်ပြီး い ဖြစ်လျှင်「わ+せます」ကိုထည့်။ 間(ま)に合(あ)います⇒間(ま)に合(あ)わせます အချိန်မှီသည်⇒ အချိန်မှီအောင်လုပ်ခိုင်းသည် ခြွင်းချက်။ ။ い ဖြင့်ဆုံးသော စာလုံးများသည် 「あ+せます」မဟုတ်ဘဲ 「わ+せます」 ကိုထည့်ရပါမယ်။ အခြား ます ကိုဖြုတ်ပြီး き ဖြစ်လျှင် ၄င်းအတန်းတွင်ရှိသော 「か+せます」ဆိုပြီးထည့်ရပါမယ်။ し⇒「さ+せます」 傘(かさ)をさします⇒傘(かさ)をささせます ထီဆောင်းသည်⇒ ထီးဆောင်းခိုင်းသည် ち⇒「た+せます」 待(ま)ちます⇒待(ま)たせます စောင့်သည်⇒ စောင့်ခိုင်းသည် に⇒「な+せます」စသဖြင့် အုပ်စု ၂ ကြိယာများ (2g) ます ကိုဖြုတ်「させます」ကိုထည့်ပါ။ KyiPhyu(plz visit my page)
စားသည်⇒ စားခိုင်းသည်။ အုပ်စု ၃ ကြိယာများ (3g) ၂ခုဘဲရှိလို့ အဲဒီအတိုင်းပုံသေ မှတ်ပါ။ 2．させていただけませんか
⇒ခွင့်တောင်းခြင်း 「してもいいですか」နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူပြီး ပို၍ယဉ်ကျေးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီးထံတွင် ယဉ်ကျေးစွာခွင့်တောင်းသော အခါများတွင်သုံးသည်။ 「させて」ဆိုတဲ့ 使役動詞(しえきどうし)+いただけませんか 2(ふつ)日間(かかん)休(やす)みをさせていただけませんか ၂ရက် ခွင့်ယူပါရစေ။ 文型(ぶんけい)
1. 息子(むすこ)をイギリス(いぎりす)へ留学(りゅうがく)させます。 သားကို အင်္ဂလန်သို့ ကျောင်းသွားတက်ခိုင်းမယ်။ 2. 娘(むすめ)にピアノ(ぴあの)を習(なら)わせます。 သမီးကို ပီယာနို သင်ခိုင်းမယ်။ 例文(れいぶん)
1. 駅(えき)に着(つ)いたら、お電話(でんわ)をください。 ဘူတာရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပါ။ 係(かかり)の者(もの)を迎(むか)えに行(い)かせますから。 တာဝန်ကျသူကို သွားကြိုခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ …わかりました。 ကောင်းပါပြီ။
2. ハンス(はんす)君(くん)は外(そと)で遊(あそ)ぶのが好(す)きですね。 ဟန်စုခွန်က အပြင်မှာ ကစားရတာ ကြိုက်တယ်နော် …ええ。体(からだ)にいいし、友達(ともだち)もできるし、できるだけ外(そと)で 遊(あそ)ばせています。 အင်း ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လည်း ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်းလည်းရတယ် တတ်နငိုသလောက် အပြင်မှာ ကစားခိုင်းတယ်။ 3. もしもし、一郎君(いちろうくん)お願(ねが)いします。 ဟယ်လို အိချိရိုးခွန်နဲ့ ပြောပါရစေ။ …すみません。今(いま)おふろに入(はい)っています。 စိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ် အခု ရေချိုးခန်း ဝင်နေတယ်။ あとで一郎(いちろう)にかけさせます。 ပြီးမှ(နောက်မ)ှ အိချိရိုးကို ဆက်ခိုင်းလိုက်မယ်။ 4. ワット先生(せんせい)の授業(じゅぎょう)はどうですか。 ဝတိုဆရာ စာသင်ရတာ ဘယ်လိုလဲ …厳(きび)しいですよ。学生(がくせい)に絶対(ぜったい)に日本語(にほんご)を使 (つか)わせませんから。 စည်းကမ်းအရမ်း တင်းကျပ်တယ်။ ကျောင်းသားတွေကို လုံးဝ ဂျပန်လို မသုံးခိုင်းဘူးလေ။ でも、言(い)いたいことは自由(じゆう)に言(い)わせます。 ဒါပေမဲ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းတော့ လွပ်လပ်စွာ ပြောခိုင်းတယ်။ 5. すみません。しばらくここに車(くるま)を止(や)めさせていただけませんか。荷物 (にもつ)を降(お)ろしますので。 စိတ်မရှိပါနဲ့။ ခဏလောက့် ဒီမှာ ကားရပ်ခွင့်လေးရမလား။ အထုပ်ချမလို့ပါ။ …いいですよ。 ရပါတယ်။
Lesson 49 Grammar 1．お＋V ます＋になります Main Verb ကို ပိုမိုယဉ်ကျေးစွာ သုံးသောအသုံး お＋V ます မှ ます ကိုဖြုတ်＋になります ထည့် 帰(かえ)る
2．お＋V ます＋ください Main Verbကို ပိုမိုယဉ်ကျေးစွာ သုံးသောအသုံး お＋V ます မှ ます ကိုဖြုတ်＋ください ထည့် 食(た)べる
3．お+和語(わご)N 和語(わご) ⇒
※和語(わご)=ဂျပန်အသံထွက် စာလုံးများ အထက်ပါဂျပန်အသံထွက် စာလုံးများ၏ရှေ့တွင် 「お」ကိုထား၍ သုံးသည်။ 4．ご+漢語(かんご) 漢語(かんご) ⇒
※漢語(かんご)=တရုတ်အသံထွက် ဂျပန်စာလုံး အထက်ပါ တရုတ်အသံထွက် စာလုံးများ၏ရှေ့တွင် 「ご」ကိုထား၍ သုံးသည်။ 5．お＋V ます＋です Main Verbကို ပိုမိုယဉ်ကျေးစွာ သုံးသောအသုံး お＋V ます မှ ます ကိုဖြုတ်＋ます ထည့် 待(ま)つ
文型(ぶんけい) 1. 課長(かちょう)はもう帰(かえ)られました。 2. 社長(しゃちょう)はもうお帰(かえ)りになりました。 3. 部長(ぶちょう)はアメリカ(あめりか)へ出張(しゅっちょう)なさいます。 4. しばらくお待ちください。 ဌါနခွဲမှုး ပြန်သွားပါပြီ။ သူဌေး ပြန်သွားပါပြီ။ ဌါနမှုးက အမေရိကကို ခရီး(အလုပ်) သွားပါတယ်။ ခဏ စောင့်ပေးပါ။ KyiPhyu(plz visit my page)
1. この本(ほん)は読(よ)まれましたか。 ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးပြီလား။ …ええ、もう読(よ)みました。 အင်း ဖတ်ပြီးပြီ။ 2. すみません。その灰皿(はいざら)、お使(つか)いになりますか。 စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒီ ဆေးလိပ်ပြာခွက် သုံးနေပါသလား။ …いいえ、使(つか)いません。どうぞ。 ဟင့်အင်း မသုံးပါဘူး။ ယူပါ။ 3. よく映画(えいが)をご覧(らん)になりますか。 ရုပ်ရှင် ခဏခဏ ကြည့်ပါသလား။ …いいえ。でも、たまにテレレビで見(み)ます。 ဟင့်အင်း ဒါပေမဲ့ တခါတလေတော့ တီဗီမှာ ကြည့်ဖြစ်တယ် 4. 小川(おがわ)さんの息子(むすこ)さんがさくら大学(だいがく)に合格(ごうかく)した のをご存知(ぞんじ)ですか。 အိုဂါဝါစံရဲ့ သားက ဆာကူရာတက္ကသိုလ်ကို အောင်သွားတယ်ဆိုတာ သိလားဟင်။ …いいえ、ちょとも知(し)りませんでした。 ဟင့်အင်း နည်းနည်းလေးမှကို မသိခဲ့ဘူး 5. 飲(の)み物(もの)は何(なに)を召(め)し上(あ)がりますか。 ဘာများသောက်မလဲ။ 遠慮(えんりょ)なくおっしゃてください。 အားမနာဘဲ ပြောပါနော် …じゃ、ビールをお願(ねが)いします。 ကဲဒါဆို ဘီယာသောက်မယ်။ 6. 松本部長(まつもとぶちょう)はいらっしゃいますか。 မစုမိုတို ဌါနမှုး ရှိပါသလား။ …ええ、こちらのお部屋(へや)です。どうぞお入りください。 အင်း ဒီဘက်ကအခန်းပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အထဲကိုဝင်ပါနော်။
Lesson 50 Grammar 1．お+V ます+します
မိမိကိုယ်ကို နှိမ်ချပြောခြင်းတွင် သုံးသည်။ စကားလုံးများ၏ရှေ့တွင် 「お」ထည့်၍သုံးခြင်းသည် မိမိကိုယ်နှိမ်ချပြောခြင်းတမျိုးဖြစ်သလို တဘက်သူကို ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံသော အဓိပ္ပါယ်လည်း ရပါသည်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီအသုံးများကို မိမိရဲ့ အထက်လူကြီးနှင့် မိမိကရိုသေစွာ ဆက်ဆံသင့်သောသူများနှင့် စကားပြောသောအခါတွင် အသုံးများသည်။ お+貸(か)します+します
မိမိကိုယ်ကို နှိမ်ချပြောခြင်းတွင် သုံးသည်။ ご+説明(せつめい)/連絡(れんらく)/案内(あんない) +します အထက်တွင် ရေးသားထားသော 「お」အသုံးနှင့် အတူတူထား၍ သုံးနိုင်သည် 3．謙譲語(けんじょうご)
မိမိကိုယ်ကို နှိမ်ချပြောသော အသုံးများ ဝန်ထမ်းမှ အထက်လူကြီးသို့ စကားပြောဆိုရာတွင်၊ ဝန်ထမ်းမှ Coustomerသို့ စကားပြောရာတွင် စသဖြင့် ရိုသေစွာပြောဆို ဆက်ဆံသင့်သောသူကို စကားပြောရာတွင် သုံးသည်။ ရိုးရိုးအသုံး
1. 今月(こんげつ)のスケジュールをお送(おく)りします。 ဒီလရဲ့ schedule ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ 2. 私(わたし)はアメリカから参(まい)りました。 ကျွန်တော် အမေရိက ကနေ လာခဲ့ပါတယ်။ 例文(れいぶん)
1. 重(おも)そうですね。お持(も)ちしましょうか。 လေးမဲ့ပုံဘဲနော်။ သယ်ပေးရမလား …すみません。お願(ねが)いします。 စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ကူညီပေးပါ။ 2. ガイドさん、ここを見(み)たあとで、どこへ行(い)くんですか。 Guideရေ ဒီကိုကြည့်ပြီးရင် ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ …江戸東京博物館(えどとうきょうはくぶつかん)へご案内(あんない)します。 အဲဒိုတိုကျို ပြတိုက်ကို လိုက်ပြပါမယ်။ 3. グプタさんの到着(とうちゃく)は２時(じ)ですね。だれか迎(むか)えに行(い)くんですか。 ဂုပုတစံက ၂နာရီ ရောက်မှာနော်။ ဘယ်သူသွားကြိုမှာတုန်း။ …はい、私(わたし)が参(まい)ります。 ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် သွားကြိုပါမယ်။
4. ご家族(かぞく)はどちらにいらっしゃいますか。 မိသားစုက ဘယ်မှာနေပါသလဲ။ …ニューヨークにおります。 နယူးယောက်မှာ နေပါတယ်။ 5. ちょっと切符(きっぷ)を拝見(はいけん)します。 တစိတ်လောက် လက်မှတ်ကို ကြည့်ခွင့်ပေးပါ။ …はい。 ဟုတ်ကဲ့ どうもありがとうございました。 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 6. ミラーさんがスピーチコンテストで優勝(ゆうしょう)したのをご存(ぞん)じですが。 မီလာစံက စကားပြောပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတာ သိပြီးပြီလား။ …はい、部長(ぶちょう)から伺(うかが)いました。 ဟုတ်ကဲ့ ဌါနမှုးဆီက ကြားပြီးပါပြီ။ 7. こちらはミラーさんです。 ဒီဘက်က မီလာစံပါ။ …初(はじ)めまして。ミラーと申(もう)します。 တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ မီလာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ どうぞよろしくお願(ねが)いいたします。 ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံပေးပါ။ 8. この近(ちか)くに電話(でんわ)がありますか。 ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ တယ်လီဖုန်း ရှိပါသလား။ …はい、あちらの階段(かいだん)の横(よこ)にございます。 ဟုတ်ကဲ့ ဟိုးက လှေခါးရဲ့ ဘေးမှာ ရှိပါတယ်။
Report "Minna No Nihongo (Grmmar)"